BR G ANYA - Nweta enyemaka n’aka ndị ọkachamara banyere akwara, akwara na nkwonkwo
AJ --J G - Zaa azịza!
Onwere ihe obula igha iju gi banyere nsogbu akwara? Chọta mpaghara ahụ ị nwere ajụjụ gbasara ma jiri ubi a na - ekwu - ma ọ bụ jiri otu nhọrọ akwadoro n'okpuru. I nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị na peeji Facebook anyị ozugbo.
- Anyị na-enye ndụmọdụ site na chiropractors, physiotherapists na ọkachamara
Ndị mmekọ chiropractors, ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ na ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ, ndụmọdụ, mmega ahụ, na omume ndị akọwapụtara kpọmkwem na nsogbu gị. Soro onye choro obere enyemaka ma obu mkpali n’agha maka ndu ubochi na enweghi ahuhu.
- Oge ụfọdụ ịpụ site na mgbu ogologo oge nwere ike ịdị ka ịmanye ugwu. Kpọtụrụ anyị ebe a na ngalaba ihe ma ọ bụ site na ozi na peeji Facebook anyị ugbua taa. Mgbe ahụ anyị nwere ike inyere gị aka na ajụjụ gị ma ọnụ anyị nwere ike ịrịgo ugwu mgbu.
NEW: - Ugbu a ị nwere ike ịjụ ajụjụ kpọmkwem na njikọ chiropractor anyị!
Alexander nwere ogo mmụta na chiropractic ma rụọ ọrụ dị ka chiropractor kemgbe 2011 - ọ na-arụ ọrụ na Kiropraktorhuset Elverum. O nwere ikike zuru oke n'ihe gbasara nsogbu dị n'ime nsogbu ahụ mgbu - ma nwee nnukwu ihe akaebe dabere na onye ọrịa ahụ na-anata ndụmọdụ / omume / ọzụzụ ọzụzụ / mmezigharị ergonomic nke na-enye ha ohere inweta ogo nke nsogbu ha ogologo oge. gbochie ihe mgbu ị na-eme ọzọ. Ọ na-ebi ndụ site na ụkpụrụ bụ na 'mmega ahụ bụ ọgwụ kachasị mma' ma na-agba mbọ ịgba ume ka ị na-emegharị ahụ kwa ụbọchị site na ọrụ kwa ụbọchị dị ka njem na ịgafe obodo, mana ọ makwaara na ọ nwere ike ịbụ usoro sara mbara iji si n'olulu mgbu pụọ ozugbo ị kwụsịrị ebe ahụ. . Yabụ, ndụmọdụ, omume na usoro a na-emegharịkwa maka onye ọ bụla. Kirie ihe onyonyo a ma ọ bụ ya juo ya ajuju.
Anyị bụ otu free ọrụ ebe Ola na Kari Nordmann nwere ike nweta azịza nye ajuju ha banyere nsogbu ahu ike ndi mmadu. Anyị nwere ndị ọrụ ahụike metụtara ndị na-edere anyị akwụkwọ. Ndị edemede a na-eme nke a naanị iji nwee ike inyere ndị chọrọ ya aka karịa - na-akwụghị ụgwọ maka ya. Naanị ihe anyị na-arịọ bụ na ị nwere mmasị na ibe Facebook anyị, kpọọ ndị enyi gị ime otu ihe (jiri bọtịnụ 'kpọọ ndị enyi' na ibe Facebook anyị) na kekọrịta posts na-amasị gị na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike nyere ọtụtụ mmadụ aka enwere ike, na ọkachasị ndị kachasị mkpa ya - ndị na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ ọtụtụ narị kroner maka mkparịta ụka dị mkpirikpi na ndị ọkachamara ahụike.
Anyị ji obi ọma na-arịọ gị ka ị jiri mpaghara nkọwa ndị a metụtara otu, maka nke a ga - ahụ na ị ga - enweta azịza ọsọ ọsọ na azịza zuru oke. Achọghị ajụjụ ndị a dị na peeji a n'otu ahịrị a jụọ ajụjụ dị na peeji dị mkpa.
Lee otu a:
Anyị nwere ekele n'ezie ma ọ bụrụ na ị na-emegharị maka nchọpụta ahụ (dịka. crystal na-arịa ọrịa) / isiokwu ịchọrọ enyemaka site na nchịkọta nhọrọ ọchụchọ dị na elu aka nri ma ọ bụ site na elu menu. Mgbe ahụ were igbe ikwu okwu na ala nke ibe ahụ n'otu ụzọ ahụ ị na-eme ebe a.
A na-ajụkarị ụfọdụ n’ime peeji isiokwu isiokwu gara aga:
- Ọkpụkpụ meniscus / ikpere nke ikpere
Ola R. ekwu, sị:
Enwere m mgba mgbu ukwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2. Anwala ọtụtụ ihe, mana enwetala nsonaazụ.
Oge mbụ m hụrụ ihe mgbu bụ na May 2013. Enwere m ọzụzụ ọzụzụ football 7-8 kwa izu wee gaa akara egwuregwu na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Nwere mgbatị ahụ 4/5 ụbọchị n'izu ebe 2 nke ụbọchị bụ football na egwuregwu kacha elu. Ọzụzụ bọọlụ anọwo na turf wuruwuru na klaasị mgbatị ahụ nọ n'ala siri ike, yabụ enwere nnukwu nsogbu.
N'ime ọsọ ruo Mee 2013, enwere m ntakịrị mgbu na mberede na ukwu aka ekpe n'oge mgbatị ahụ. M kwụsịrị maka ụbọchị ahụ ma gbalịa ọzọ mgbatị ahụ na-esote, ihe mgbu ahụ ka dị. Agara m onye na-ahụ maka ahụ ike ma nweta mgbatị ahụ iji mee ka ukwu m sie ike. Emere mmega ahụ maka izu atọ. Enwetaghị nsonaazụ ọ bụla site na mmega ahụ.
M gbanwere klọb wee nweta onye na-ahụ maka ahụike ọhụrụ, o nyere m ihe gbasara otu mgbatị ahụ ma mee ha ihe dị ka izu 4 n'enweghị ọganihu. Mgbe ahụ, o zigara m onye chiropractor. Ọ nwalere ntakịrị na ịdị nro m na ma ihe niile kwụ ọtọ ma kwụ ọtọ.
Enwetara m mmega mgbatị ahụ ka m wee dị nro ma na-agagharị agagharị. Ọ dị m ka ọ nyere aka ntakịrị, mana ikekwe ọ bụ naanị n'ihi na enwere m nro site na mgbatị ahụ.
E zigara m maka MRI. Ọ bịara bụrụ na ukwu m dị mma nke ukwuu.
Enweela ihe mgbu na ukwu aka ekpe na aka nri, mana ọ na-anọkarị n'aka ekpe.
Mgbe ahụ aghọrọ m onye na-ahụ maka ọgwụgwọ menu/ọkachamara hip. A gwara m na m nwere azụ azụ na obere pelvis gbagọrọ agbagọ, nke mere ka ukwu m na-agbaji. Enwere m mmega ahụ ga-eme ka pelvis m kwụ ọtọ. A ga-eme mmega ahụ maka ọnwa 3. N'otu oge ahụ ka m na-aga na onye na-agwọ ọrịa ntuziaka, m na-agakwa na physio. Akọwara m nke a na physio nke nwere akụkụ dị n'azụ. Enwetara m mgbatị ahụ iji mee ka akwara dị n'akụkụ pelvis dị ike.
Mgbe ọnwa 2-3 gachara na mgbatị ahụ na ọzụzụ siri ike, enwere m obere mgbu na azụ wee bụrụ onye kwụ ọtọ / kwụsie ike na pelvis. Ma ka na-ejighị n'aka na nke a bụ nsogbu.
Acupuncture nwere ike ịbụ ngwọta?
Enwere m ekele dị ukwuu maka nzaghachi maka ihe ị chere na ihe kpatara mgbu ahụ nwere ike ịbụ yana otu ọ nwere ike isi pụọ.
Ndewo Ola, iji chịkọta ntakịrị wee chepụta ajụjụ na-esochi.
- Mgbu gị malitere n'okpuru mgbatị ahụ siri ike na May 2013. Nke a na-enye anyị ihe mere anyị ga-eji kwere na ọ bụ musculoskeletal. Otu n'ime akwara ndị a na-ahụkarị n'oge football bụ iliopsoas (ntụgharị hip).
- Kedu mmegharị ahụ na-egbu mgbu? Mgbe ahụ, anyị na-eche ma azụ na hip.
- A na-ewerekwa MRI nke azụ azụ gị ka ọ bụ naanị ukwu / hip? Akpụkpọ diski nwere ike na-ezo aka na mgbu na ukwu ma ọ bụrụ na ọ na-emetụta akwara 'nri'.
Azịza zuru oke ga-abịa ka anyị na-ewepụ ọrịa ole na ole ndị ọzọ nwere ajụjụ ndị dị otú ahụ.
nkwojiaka ekwu, sị:
Agagoro m ọtụtụ weebụsaịtị, ọkachasị site na ndị ọkachamara dịka
physiotherapists na chiropractors.
Kedu ihe dị ntakịrị bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-akwado mmega ahụ ebe otu
na-ehuta nkwojiaka azụ azụ, (mgbatị?)
Eji m n'aka na ọ bụ naanị mmega ahụ dị ka oge niile
na-eme m ihe mgbu n'aka ekpe m.
Achọrọ m nzaghachi, echiche na nke a.
Na otu ihe ọzọ, weebụsaịtị niile sitere na physio na chiropractors kwesịrị ịgụnye
mkpa ọ dị ịghara ịgbatị nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere nkwonkwo hypermobile.
Nke a bụ ihe m maara na physiotherapists na chiropractors adịkarịghị eme
na-ekwu. ihe ndị a bụ ihe m gụrụ n’onwe m.
M na-aga ọgwụgwọ n'onwe m, kwa izu.
Ndo nzaghachi mbubreyo.
Mmega ahụ akwadoro ga-enwerịrị ma kwesịkwa ime ka ọ dabara na nyocha gị akọwapụtara. Eleghị anya mgbatị mgbatị ahụ ị na-achọ bụ 'mmega mgbatị mgbatị ahụ eccentric'? Ezubere ha maka epicondylitis mpụta / ikpere tenis, ma nwee ezigbo ihe akaebe.
Ị na-ekwu na ị nwere mgbu na aka ekpe gị - kedu ụdị mgbu ọ bụ? Ha na-adịgide adịgide, ma ọ bụ na-adịgasị iche na ibu - ma ị nwere mgbu abalị? Ị na-enwekwa mgbu na ikpere gị?
Esela foto n'aka gị? A nyochala gị maka ọrịa ọwara carpal?
Gụkwuo ebe a:
Na-atụ anya ịnụ gị ọzọ. Olileanya na anyị nwere ike inyere gị aka ọzọ.
Ndewo na daalụ maka azịza!
Edela m ogologo posts atọ na nzaghachi ebe a ugbu a
taa, mana webụsaịtị a na-emelite mgbe m
na-eru nso na njedebe, na mgbe ahụ post-apụ n'anya na
M ga-amalite ọzọ. Ugbu a, iwe na-ewe m nke ukwuu nke na anaghị m eme ya
Orc na-amalite ọzọ.
Ndewo ọzọ, nkwojiaka.
Ndo maka nhụta nke onye na-ahụ maka webụsaịtị anyị. Ọ bụ n'ụdị mmelite akpaka nke ọdịnaya ibe kwa nkeji asaa ọ bụla. Emezizila mperi ahụ ugbu a. Ọ ga-abụrịrị na ọ na-ewe iwe na ịdere akwụkwọ nkwado naanị ka ọ pụọ. Anyị na-atụ anya ịnụ gị ozugbo ị nwere ohere.
Monica BJ ekwu, sị:
Gụọ ibe ebe a gbasara Plantar Facitt.
Na-eche banyere mmega ahụ inversion nke a kpọtụrụ aha, aghọtaghị otu esi eme ya. Mgbe ọtụtụ afọ nke nhụjuanya gasịrị, ọ na-achọsi m ike ime ihe na-arụsi ọrụ ike iji gbalịa ka m dịkwuo mma…
Daalụ maka ajụjụ gị gbasara mmega ahụ nke plantar fasciitis (gụọ: https://www.vondt.net/ovelser-og-uttoyning-av-plantar-fascia-haelsmerter/)
Ntugharị nke ụkwụ pụtara ịdọrọ ọbụ ụkwụ ụkwụ n'ebe ibe ha nọ (n'ime) site na ịnọpụ iche. Na mbido, ị nwere ike ime nke a na-enweghị nguzogide ọzọ - wee mee ka ahụ ike dị mma rụọ ọrụ nke nwere ike inye aka belata ọbụ ụkwụ ma kụọ fascia gị. Ka ị na-adọkpụrụ ụkwụ gị n'ime n'ime ibe gị, ị kwesịrị ị na-eche na ị na-etinye uru ahụ n'èzí nwa ehi (peroneus).
Ị nwere ike ime ya?
Ụfọdụ obere ajụjụ na-esochi:
1) A kwadoro gị ma ọ bụrụ na ị nwere fasciitis plantar nwere ma ọ bụ na-enweghị ikiri ụkwụ? Ọ bụrụ na e nwere mkpali ikiri ụkwụ, ọ nwere ike igosi na nsogbu ahụ adịgidela nwa oge nakwa na ọ ga-esi ike karị imeri.
2) Ị nwalela nkwado ikiri ụkwụ a na-emegharị emegharị nke ọma iji wepụ nchichi ụkwụ na agụba ụkwụ (ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị na-akwado nke a: https://www.vondt.net/behandling-plantar-fascitt-plantar-fascitt-haelstotte/)?
3) Kedu usoro ọgwụgwọ ị nwalarị? Ị nwalela usoro ọgwụgwọ ebili mmiri?
4) Olee otú nsogbu ahụ si malite? Ọtụtụ ihe na-emebiga ihe ókè na elu siri ike na-enweghị ezigbo akpụkpọ ụkwụ na-akwado, ma eleghị anya?
Mmega ahụ: ya bụ, ịnọdụ ala n'oche, dịka ọmụmaatụ, ka ụkwụ gị kwụ ọtọ, na mkpịsị ụkwụ ukwu / ụkwụ gị na-ehulata n'akụkụ ibe gị?
Achọpụtabeghị ya na ọ na-agba ikiri ụkwụ, ọ naghị eche na ọ bụ ya.
2. Anwabeghị nkwado ikiri ụkwụ. Ọ bụrụla onye na-ahụ maka ahụike physiotherapist megharịrị ọbụ ụkwụ. Ọ bụghị nkwado ikiri ụkwụ maka ọrịre na Norway?
3. Ọbụ naanị.
4. Ibu ibu na oke ibu na-abawanye ngwa ngwa, jikọtara ya na oke ibu.
Ee, dị mfe ma dị mfe. 🙂
Enwere ike ịchọpụta spurs ikiri ụkwụ site na RTG, MRI ma ọ bụ ultrasound diagnostic.
2. Ọtụtụ ndị a na-ere bụ ụdị gel nke ị na-etinye na ikiri ụkwụ akpụkpọ ụkwụ. Anyị ahụbeghị nkwado zuru oke yiri nke a ebe a na ụlọ ahịa, mba. Ma o nwere ike ịdị adị.
Ọ dị mma, mgbe ahụ, ị ​​​​nwere ike ịchọrọ inwe ntakịrị uche dị elu na mgbatị ahụ na ọzụzụ ugbu a - cheta na a ga-enwe izu ole na ole siri ike n'ihu gị (karịsịa nke anọ mbụ), ka ị na-agbaji akwara (ya mere obere nkwado) n'ihu gị. nweta ihe a na-akpọ 'supercompensation' n'ime akwara dị mkpa.
Gụọ gbasara ọgwụgwọ nrụgide nke plantar fasciitis ebe a:
Ga-abụrịrị nke kachasị dị irè dịka nyocha siri dị. Ejikọtara ya na ọzụzụ akọwapụtara.
4. Ghọta. Na-agba ọsọ na asphalt?
Mgbe ahụ, m kwesịrị ịnwale mgbatị ahụ?
Nwere ike lelee maka ike ikiri ụkwụ nwere ike ime obere oge ma ọ bụrụ na ọ meghị mma.
Ọ nwara gel mpe mpe akwa n'okpuru ikiri ụkwụ, merụrụ ahụ nke ukwuu. Ugbu a enwere m ọbụ ụkwụ na-akwado n'okpuru mgbaba ụkwụ, ọ na-adịkwa mma. Akpụkpọ ụkwụ nwere obere ikiri ụkwụ dị elu na-arụkwa ọrụ nke ọma, na-arụ ọrụ na ndị dị otú ahụ.
Agaghị m agba ọsọ na asphalt, mana ọ nwere ike na-agụsi m agụụ ike mgbe m malitere 🙁
Na-atụ anya na mmega ahụ, ịgbatị, enyemaka na mbelata ibu ga-enyere aka ugbu a.
A na m arị gị nke ọma! 🙂 Gwa anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ - ma nweere onwe gị ịgwa ndị enyi na ezinụlọ na ha nwere ike ịjụ ajụjụ ebe a ma ọ bụ na ibe Facebook anyị.
Ndewo, azụ na ụkwụ aka ekpe na-enye m nsogbu. Ugbu a, ọ gbadara na ukwu ukwu, n'ebe ahụ, m na-enwe oké mgbu mgbe m na-eje ije, ugbu a, m na-aṅụ ọgwụ siri ike, ọ naghị enyere m aka.. Ana m eche ka m gaa MRI. M na-eche ihe mere ọgwụ anaghị arụ ọrụ. .
Na-enwere onwe gị ịgwa anyị ntakịrị ihe n'ụzọ zuru ezu banyere nsogbu gị na mgbu - mgbe ahụ, anyị nwere ike inye gị ntakịrị nkọwa zuru ezu ma eleghị anya nyere gị aka ntakịrị n'ụzọ.
- Kedu mgbe na kedu ka mgbu azụ si malite?
- Kedu ụdị ọgwụ ị na-eji? Ọ na-eme ka ahụ dị jụụ? Na-ebelata mgbu? Ihe mgbu akwara? Gịnị ka a na-akpọ ha? O nwere ike bụrụ na edeela gị ụdị ọgwụ mgbu na-ezighi ezi gbasara nsogbu gị?
- Kedu ka ị ga-esi kọwaa mgbu ahụ? Dị ka igbu mgbu ọkụ eletrik? Ọnwụ anwụ? Ị nwetala adịghị ike akwara n'ụkwụ aka ekpe gị?
- Ihe mgbu na ukwu na hip na-akawanye njọ mgbe ị na-ehulata n'ihu? Ọ nwere ike ịdị ka ị nwere mgbaàmà sciatica (gụọ: https://www.vondt.net/hvor-har-du-vondt/vondt-i-korsryggen/isjias/)
Na-ele anya ịnụ gị.
RR ekwu, sị:
Ndewo! Nwee ajụjụ ụfọdụ gbasara mgbu ikiri ụkwụ. Mgbe m mechara afọ ime, enweela m mgbu n'ikiri ụkwụ abụọ. Site n'inwe mgbu pelvic na obere mmegharị ahụ gaa na wheelbarrows, ụfọdụ asphalt na gravel. Enwere m mmetụta na ọ na-ewute m n'èzí ụkwụ m, ma ọ dịghị ewute m. Na mberede otu ụbọchị enwere m obi ụtọ n'okpuru ikiri ụkwụ abụọ. Agakwuru dọkịta onye kwuru na enwere mbufụt nke pad abụba na ikiri ụkwụ n'ihi oke ibu yana na m na-arụsi ọrụ ike karị. Agụrụ m banyere fasciitis osisi, ma dọkịta ahụ chere na ọ bụghị mgbe mgbu dị n'okpuru na n'akụkụ nke ikiri ụkwụ. Enwetara Orudi ka mmanu. Nweta ọbụ ụkwụ naprapat. O chekwara na ọ bụghị plantar fasciitis ebe ọ bụ na mgbu adịghị anya n'ihu ụkwụ. Ebee ka ihe mgbu kwesịrị ịbụ n'ihi nsị sebaceous gland na ikiri ụkwụ? 2 izu gara aga enwetara m mgbu ikiri ụkwụ na ọ bụghị naanị ma ọ bụ enyemaka na-enyere aka. Ana m ajụ oyi na-ebuli mkpịsị ụkwụ m kwa ụbọchị. Na-aga na sneakers n'ime na n'èzí. Ogologo oge ole ka nke a nwere ike ịdị? Nwere nkwekọrịta na ọgwụgwọ ebili mmiri nrụgide na-emecha na naprapat. Amụma ga-adị mma?
Ihe mgbu gị ka dịgidere ruo izu abụọ, yabụ ị ka nọ na nnukwu nsogbu nke nsogbu ahụ. Abụọ fasciitis osisi na ọnya ikiri ụkwụ nwere ike were izu, ọnwa ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ogologo afọ zuru ezu tupu ọgwụgwọ. Ihe niile dabere ka ihe si dị n'ime ụkwụ gị. Nke a na-ewetara anyị ajụjụ mbụ anyị:
- Ewerela RTG ma ọ bụ MRI n'ụkwụ gị? Na RTG, n'ọtụtụ ọnọdụ, ị ga-ahụ spurs ikiri ụkwụ ma ọ bụrụ na ọ bụ fasciitis osisi. Na MRI, ị nwere ike ịhụ nhụsianya nke plantar fascia ma ọ bụrụ na enwere fascia osisi.
- Ọ dị ka ị na-eme usoro ziri ezi site na ibuli mkpịsị ụkwụ gị na icing kwa ụbọchị. Ị na-agbatịkwa plantar fascia?
- GỤKWUO: https://www.vondt.net/ovelser-og-uttoyning-av-plantar-fascia-haelsmerter/
Ị na-ekwu ma ọ bụghị na ị kwadoro ọgwụgwọ nrụgide na-efe efe na naprapat'. Nke a na-ada ntakịrị ihe na-enweghị isi ma ọ bụrụ na ị jụọ anyị, ebe ọ bụ na a ga-eji ọgwụgwọ ebili mmiri mee ihe kpọmkwem megide nchoputa (dịka mgbe nyochachara ultrasound na MRI imaging). N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na-eji ọgwụgwọ nrụgide nrụgide dị ukwuu na-amaghị ihe ọ dị na ụkwụ gị - ya mere enwere ohere dị elu na ha agaghị emetụ ebe kwesịrị ekwesị na ị na-atụfu ego na windo. Naprapath enweghị nkwụghachi. N'iji ya tụnyere, ọgwụgwọ nke ma ndị chiropractors ma ọ bụ ndị na-ahụ maka akwụkwọ ntuziaka na-akwụghachi ụgwọ. Ọ nwekwara ike ịba uru ịlele ma ị nwere mkpuchi ahụike na-ekpuchi ụdị ọgwụgwọ ahụ.
- GỤKWUO: https://www.vondt.net/trykkbolgebehandling-av-fotsmerter-grunnet-plantar-fascitt/
Ndị dọkịta GP, chiropractors ma ọ bụ ndị na-agwọ ọrịa ntuziaka niile nwere ike na-ezo aka na nchọpụta onyonyo dị otú ahụ - na nke abụọ nwekwara ọzụzụ dị ukwuu n'ịgwọ ọrịa ndị a kpọtụrụ aha, nke n'aka nke ya nwere ike ibute nyocha ngwa ngwa na ọgwụgwọ dị irè karị.
Anyị nwere ndụmọdụ gbasara nkwado ikiri ụkwụ plantar fascia:
- GỤKWUO: https://www.vondt.net/behandling-plantar-fascitt-plantar-fascitt-haelstotte/
Ị nwalela nkwado ikiri ụkwụ a ma ọ bụ ihe yiri ya?
Kari-Anne Strøm Tvetmarken ekwu, sị:
Nnọọ. M na-alụ ọgụ na ihe mgbu n'ahụ m nile kemgbe 2010. Olu kacha njọ, ọ na-egbu mgbu kemgbe 2005. Ma ihe bụ na mgbe m na-azụ ọzụzụ na igwe elliptical ma ọ bụ na-aga ije, enwere m tingling n'okpuru ọbụ ụkwụ m. ụkwụ na ọ "rapara" n'aka m na ogwe aka . Gakwuru dọkịta ma enyochabeghị ya. Anọwokwa na MRI nke olu, nke onye naprapath kwadoro. Ọ dịghị prolapse nke olu, naanị eyi. Kedu ihe m ga-agwa dọkịta m, n'ihi na ugbu a ike gwụrụ m nke mgbatị ahụ adịghị enyere m aka mgbu m nwere.
Ọ nwere ihe pụrụ iche mere tupu 2005 ma ọ bụ 2010? Trauma ma ọ bụ ihe mberede ma ọ bụ ihe ndị yiri ya? Ka ihe mgbu ahụ ji nwayọọ nwayọọ bịa?
Enwere ike ịkpata 'Tingling' site n'ọtụtụ ihe, mana enwere ike jikọta ya na akwara ma ọ bụ ọrụ akwara. Ị nwere akụkọ ihe mere eme ezinụlọ nke ihe omume / nchoputa obi?
Echiche dị n'azụ MRI nke olu dị mma, ma e nwere ihe ndị ọzọ karịa nkwụsịtụ nke nwekwara ike ịkpata mgbaàmà yiri nke ahụ.
Kedu ka ị siri meghachi omume na ọgwụgwọ? Onye na-ahụ maka ọgwụgwọ gị anwalela usoro dị iche iche dị iche iche?
Dị ka nleba anya nke onwe, anyị na-akwado ka ịmalite site na mmega ahụ maka mkpokọta n'elu igwe ụfụfụ, n'ihi na ndị a nwere ike imeziwanye ọrụ akwara ozi (nke a gosipụtara na ụlọ ọgwụ).
Anyị na-atụ anya ịnụ gị ọzọ, yana inyere gị aka n'ihu.
Monica Pedersen ekwu, sị:
Ọgọstụ 2012; MR thoracal kọlụm; diski ọkụ na-agafeghị oke C5 / C6. Obere mgbanwe mmebi Th6 / Th7 mana ọ bụghị okwu ọ bụla a ga-ahụ na kọlụm thoracic. Ọ nweghị mgbanwe mgbaama ga-ahụ na Medulla. MR LS - Kọlụm: diski atọ dị ala akpọnwụwo mmiri mana ọnụ ahịa Inge belatara nke ukwuu. Obere diski na-agbawa na ọkwa atọ a yana yana akara nke anulus fibrosus rupture na nke abụọ dị ala. Na ọkwa L5 / S1, diski ahụ na-emetụ mgbọrọgwụ S1 aka ekpe ma ọ nweghị mmetụta doro anya na ya. N'ọkwa ndị ọzọ, ọ nweghị ihe ịrịba ama nke mmetụta na akụkụ neurogenic. Kedu ihe ị ga-atụ aro na m nwere ike ime nke a, enwere m nnukwu mgbu mgbe m nọ ọdụ ma na-eje ije, enyerela m oche nkwagharị. Nwee klas physio kwa izu ma na-eme yoga onwe m, mana ọ dị mwute na ọtụtụ ihe mgbu na-eme ka m ghara ịga n'ihu karịa nzọụkwụ ole na ole. Na-eme ka m pụọ na ọgwụ mgbu dị ka o kwere mee kama ọ naghị akpalite nke a. Mana ọ na-agwụ m ike ma rịọ gị maka echiche aka nke abụọ. Daalụ Monica
Anyị ga-agbalị inyere gị aka na nke ahụ, ma mgbe ahụ, anyị chọrọ ntakịrị ozi zuru oke ebe ọ bụ na anyị enweghị ike nyochaa gị n'onwe gị.
- Nke mbụ, kedu ebe mgbu na ogologo oge ole ka ị nwere ya? Ha mere nke ukwuu (dịka ọmụmaatụ mgbe ihe mberede ma ọ bụ mmerụ ahụ gasịrị?) Ka ha ji nwayọọ nwayọọ bịa?
Ị kwuru na diski ahụ metụrụ mgbọrọgwụ S1 - nke a ga-apụtakarị na ị nwetara mmetụta ịhụnanya. Ị nwere ọkụ eletrik, mgbu na-egbu mgbu ruo n'ụkwụ na ụkwụ n'akụkụ aka ekpe? Ị nwere adịghị ike anụ ahụ n'ụkwụ aka ekpe gị?
- A na-ekwu na ị gaghị aga n'ihu karịa nzọụkwụ ole na ole tupu ị merụrụ ahụ. Ọ na-adị gị ka ụkwụ gị na-ada ada ma ọ bụ ihe ndị yiri ya, yabụ ị ga-anọdụ ala maka ezumike? Azu na ụkwụ gị ọ na-afụ ụfụ mgbe ị na-ehulata n'ihu?
- Ị na-ede 'Mr thoracal kọlụm', nke a agaghị agụnye olu, mana ị ka na-ede banyere ọkwa C5 / C6 - nke ahụ ọ pụtara na ị werewo foto MRI nke olu?
- Yoga dị mma, mmega ahụ dịgasị iche iche, yabụ ọ dị mma ịme nke a. Ma ọ bụghị ya, a na-akwado mmegharị ahụ n'ozuzu ya, ọkachamma na-eje ije n'ụzọ dị mfe na ala siri ike.
- Ị na-aga physio 1x kwa izu. Kedu ka ị siri meghachi omume na ọgwụgwọ? Onye na-ahụ maka ọgwụgwọ gị anwalela usoro dị iche iche dị iche iche?
- ọgwụgwọ oyi, dịka ọmụmaatụ. Biofreeze (gụkwuo / zụta ebe a: http://nakkeprolaps.no/produkt/biofreeze-spray-118-ml/) nwere ike ibelata ahụ mgbu, nkwonkwo na akwara.
SG ekwu, sị:
ISCHIOFEMORAL IMPINGEMENT; Ndewo, enwere m mgbu mgbu na-egbu mgbu na oche na ala azụ apata ụkwụ na-adọga kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ na-atụrụ ka agịga n'okpuru ụkwụ. Agara m onye ọ bụla nwere ike ịtụrụ ime. Achọpụtara mmerụ ahụ Labrum na 2012. A na-agwọ m maka mmerụ ahụ labrum arthroscopically. Ha chọpụtara n'oge arthroscopy na m nwere osteoarthritis na nkwonkwo hip. Atụrụ m anya na ihe mgbu na-agba n'ụkwụ m ga-akwụsị, ma ọ bụghị mgbe ahụ. Na 2014, ma X-ray na MRI gosipụtara obere oghere maka quadratus femoris, nke kwekọrọ na impingement ischiofemoral. Enwetabeghị m enyemaka maka nke a. Chọta obere ozi gbasara nke a na Norway, naanị na saịtị ndị mba ọzọ. Otu afọ gara aga, GP m mechara nye m neurontin. Tupu nke a, m na-ehi ụra kacha awa 2 kwa ụbọchị n'ihi mgbu ahụ. Nke a na-emebi ụdị ndụ m, ndụ akwụsịla. Ajuju m bu; enwere enyemaka ọ bụla maka mgbochi ischiofemoral na Norway?
Anyị ga-enyere gị aka na nke a. Anyị ezipụla ajụjụ ugbu a na ọgbakọ ndị ọkachamara ka ịchọta enyemaka kacha mma maka gị.
Anyị ga-aza ajụjụ ọzọ ebe a ụbọchị ole na ole.
daalụ nke ukwuu, ọ dị mma nke ukwuu !!
Ndewo ọzọ, SG,
Anyị echefubeghị gị, mana o were ogologo oge iji nweta azịza n'aka ndị ọkachamara. Anyị na-arụ ọrụ inweta ozi site na otu ndị ọzọ ugbu a, gụnyere ọkachamara na England. Anyị na-ekwu mgbe anyị nụrụ ihe.
Na-atụ anya azịza gị ee!
Anyị onwe anyị kwa. Anyị na-ekwe gị nkwa na anyị ga-eme ka ị mara ma anyị nụrụ ihe. 🙂 Ma ọ bụghị ya, anyị na-atụ aro ihe ị nụla otu narị ugboro tupu mgbe ahụ - na-agbatị ahụ ike na piriformis, kwa ụbọchị, 3 × 30 sekọnd. Ọ nwekwara ike inye aka iji ihe mkpuchi ụfụfụ na mpụga apata ụkwụ iji wepụ nrụgide na ischium na glutes. Ọ bụrụ na ị chere na ọgwụgwọ oyi na-arụ ọrụ nke ọma, mgbe ahụ, anyị anụla ọtụtụ ihe dị mma gbasara ya Ihe nraghachi azụ site na ndị nwere nsogbu oche na sciatica / sciatica.
Dagmar T. ekwu, sị:
Na-alụ ọgụ na polyoneuropathy (eriri dị nro). Dọkịta m kwuru na o nweghị ihe ga-eme ya. Nwere ọtụtụ ihe mgbu / na-eje ije na okwute okwute na mmanya dị n'ala. Na-enwe mgbu ruo n'oke ukwu wee zaa elu. Ọ nwere ike ịdị iche na 4 cm. Enyemaka. Dagmar T.
Ọ naghị ada ka ahụ na-adị gị mma. Iji nwee ike inyere gị aka, anyị chọrọ ozi ndị ọzọ gbasara ọrịa gị, dịka ihe kpatara ya, mmalite, oke mgbu na foto gara aga. Ọ mara mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike dee ntakịrị karịa gbasara ọrịa gị.
Ị nwetara ya? Anyị na-atụ anya inyere gị aka n'ihu.
PS - Ị na-ede "iche 4 cm". Kedu ihe ị chere? Nke ahụ ọ bụ ogologo ụkwụ ị na-ekwu? N'okwu ahụ, anyị nwere olile anya na ị nwetara naanị mgbanwe site n'aka ọkachamara (!)
Patrick J. ekwu, sị:
Enwere m naanị otu ajụjụ: Enwere m mgbu n'akụkụ aka nri nke azụ azụ m n'elu isi nri m. Nke a mere mgbe otu izu nke ọzụzụ gasịrị, echere m ma ọ nwere ike ịbụ eriri anụ ahụ, ebe ọ bụ na ọ bụghị ọkpụkpụ m na-egbu mgbu, ma n'otu oge n'akụkụ ya. Enwere m ike ịgba ọsọ gaa ije nke ọma, ma ọ bụ mgbe m hulatara azụ ma ọ bụ dabere n'ụkwụ aka nri m ka ọ na-ewute m. Ejila m ụfụfụ ụfụfụ gbalịa ime ka ọ dị nro, mana ọ ka na-ewute ya nke ukwuu. Ya mere, m na-eche ihe m kwesịrị ime?
Enwere ike ịnwe mkpọchi na nkwonkwo iliosacral gị yana akwara akwara / myalgias jikọtara ya na quadratus lumborum na akwara gluteal. Ọ ga-ekwe omume na ị nwetara ibu na-adịghị mma mgbe ị zụrụ ọzụzụ? Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ebuli ala? Ọ nwere mpaghara pụrụ iche ị chọrọ ime ka oge a sie ike?
Ọ dị mkpa icheta na mọzụlụ jikọtara na nkwonkwo - na nkwonkwo na-alaghachi azụ na mọzụlụ. N'ihi ya, nsogbu a abụghị 'naanị akwara akwara'. Ya mere, ọ dị mkpa ịnweta ọgwụgwọ maka nkwonkwo na mọzụlụ - yana ịmalite site na njiri onwe (dịka i mere) na mmega ahụ kpọmkwem.
Ị nwere ike ịgwa anyị ntakịrị gbasara ụdị mmega ahụ ị na-eme na ọzụzụ? Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịgafe na mmega ahụ nwere ike adịghị gị mma - ma ọ bụ nke nwere ike inye gị ntakịrị nrụgide na azụ azụ.
Omume ndị a nwere ike ịbara gị uru iji mee ka nkwụsi ike lumbosacral:
Kedu ka esi esi ịwa sinus tarsi? Gịnị bụ nkwa na ọ na-aga nke ọma?
N'isiokwu a, ị nwere ike ịgụtakwu banyere ọgwụgwọ na-agbanwe agbanwe na nke na-emerụ ahụ (ịwa ahụ) nke ọrịa sinus tarsi:
Na nke a - na-adịbeghị anya - akụkọ (daalụ maka ichetara anyị na anyị na-efunahụ ozi gbasara ọnọdụ a na weebụsaịtị anyị) ị ga-ahụ ozi gbasara ma ịwa ahụ na-emeghe na arthroscopy.
Gwa anyị ma ọ zaghị ajụjụ gị nke ọma.
Anyị dịkwa site na facebook na: https://www.facebook.com/vondtnet
Lise Kristin Johre ekwu, sị:
Ndewo. Enwere m crps, ana m eche ihe kpatara na ị nweghị ihe ọ bụla gbasara ọnọdụ a? achọpụtala ọtụtụ ihe n'onwe gị, mana ịchọrọ ndụmọdụ ndị ọzọ.
Ndewo Lise Kristin,
Daalụ nke ukwuu maka nzaghachi. N'ezie anyị ga-ede banyere Mgbagwoju anya Regional Pain Syndrome (CRPS) - anyị ga-emekwa miri emi na-emikpu n'ime nnyocha Archives ịhụ ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla nnyocha na-adịbeghị anya na ọgwụgwọ, nri ma ọ bụ ihe ndị yiri nke ị nwere ike irite uru na.
Ọzọ, daalụ nke ukwuu maka ikwupụta okwu.
Anyị na-achọ gị ọmarịcha ụbọchị!
PS - Ị chọrọ ma ndụmọdụ izugbe na nke siri ike? Ma ọ bụ ị chọrọ karịa ifbm ọgwụgwọ ozugbo?
afọ ekwu, sị:
M nwetara mgbajikwa ike ọgwụgwụ site na oke mberede escalation na ọzụzụ mgbe ime ime wee soro ya maka ọnwa 2-3. Enwere mgbaji n'ebe abụọ n'otu ụkwụ ma ndị dọkịta kwuru na ọ bụ ebe a na-adịghị ahụkebe n'otu mgbaji. Ọ ka na-enwe nkụda mmụọ na ahụ erughị ala na mpaghara mgbaji ahụ mana ọ naghị ewute ya. Ugbu a enwere m ọrịa Plantar Fascitis na m na-eche ihe m kwesịrị ime ugbu a! Amaghị m ihe mgbajiri ahụ dị ma na-eche ma enwere m ike kpọchiri m n'ime ụkwụ m n'ụzọ ụfọdụ? achọpụtawokwa na amụtala m ụzọ na-ezighị ezi iji otu ụkwụ na-eje ije. Kedu onye m ga-akpọtụrụ maka enyemaka kacha mma enwere ike? enweghị ikike ma ọ bụ ọchịchọ ịfụfu nnukwu ego na ụdị ọgwụgwọ na-ezighi ezi nke ọma. Daalụ maka azịza 🙂
Plantar fasciitis bụ ihe na-agwụ ike - nke mbụ ị kwesịrị ịmalite na ndị a 4 omume (ma ịgbatị na ike ọkụ). Nhazi onwe onye na ọgwụgwọ onwe ya anaghị efu otu penny. N'ụzọ dị mwute, ọ bụkwa ikpe ahụ na ị ga-achọgharị ole na ole (2-4x) na ọgwụgwọ nrụgide nrụgide - nke a bụ n'ihi na ikiri ụkwụ na ihu ikiri ụkwụ na-aga n'ihu plantar fascia chọrọ enyemaka na vascularization (circulation) iji kwalite ọgwụgwọ. .
Ee, mkpọchi nkwonkwo na-emekarị n'ụkwụ n'ihi nbudata na-ezighi ezi. Onye na-ahụ maka chiropractor ma ọ bụ onye na-ahụ maka akwụkwọ ntuziaka kwesịrị inwe ike inyere gị aka na ọgwụgwọ nrụgide nrụgide abụọ, jikọtara ya na nkwonkwo nkwonkwo ụkwụ - ya mere ị gaghị aga na 2 dị iche iche na-agwọ ọrịa maka nke a.
Ị chọrọ ndụmọdụ sitere n'aka onye na-agwọ ọrịa?
Gina ekwu, sị:
Ndewo, Right mgbe Ista m tetara n'abalị na oké mgbu na otu ụkwụ, na n'ime n'okpuru arch. Ọ dị gị ka ị ga-eche ka a tụrụ mma. Ihe mgbu ahụ dịgidere ruo sekọnd ole na ole, mgbe ahụ ha apụọ. Ha bịara wee gaa ihe dị ka ugboro 7-8. Mgbe ahụ, ọ dịghị ihe ọzọ ruo abalị ihe dị ka otu izu mgbe e mesịrị. Mgbe ahụ, otu oké ihe mgbu ahụ kpọtere m ọtụtụ ugboro. N'ehihie ụnyaahụ, ha na-abịa mgbe niile, ma ọ bụghị ike dị ka ha na-eme n'abalị gara aga. N'abalị ụnyaahụ ọ gara nke ọma, mana enwere m mmetụta n'ụkwụ m ụdị nrịanrịa. Taa, agara m ịhụ GP m, ọ maghị ihe ọ bụla. Ọ gwara m ka m were ibux tee mmanụ.
Ị nwere echiche ọ bụla ihe nke a nwere ike ịbụ na gịnị ka ị na-akwado m ka m mee?
Dị ka ị na-akọwa ya, enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ya. Ị nwekwara mgbu ụkwụ ma ọ bụ mgbu azụ? Ọ dị ka mgbakasị akwara mpaghara ma ọ bụ distal - anyị na-akwado ka ị jiri igwe ịhịa aka n'ahụ ụkwụ, gbatịa ogwe ụkwụ (lee mmega ahụ n'isiokwu anyị 'mmega 4 megide plantar fasciitis') wee mee mmemme ịgbalite / ike maka ahụ. ụkwụ. Ọ bụrụ na ị nwekwara mgbu radieshon n'ụkwụ, ọ nwere ike ịbụ mgbakasị akwara na azụ azụ nke na-enye mgbu / ihe mgbaàmà na ụkwụ, mgbe ahụ na mgbọrọgwụ akwara L5 ma ọ bụ S1. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọgwụ mgbu anụ ahụ karịa, anyị nwere ike ịkwado ọgwụgwọ oyi Biofreeze.
Ị nwere ntakịrị ozi miri emi gbasara ihe ndị ọzọ ị maara? Ị na-eme nke ọma taa?
Ida Christine ekwu, sị:
M na-ede n'aha nna m onye nwere mgba isi ọwụwa, eze mgbu na oké nrụgide na ntị aka ekpe, temple na cheek.
Ọ na-agakwuru ndị dọkịta na-awa ahụ ọnụ, ndị dọkịta, ndị isi dibịa, ndị dọkịta ezé, ndị na-ahụ maka akwara ozi wdg. O werewo MRI, CT na-enweghị ụdị nchọpụta ọ bụla .. Anatala ya ntụtụ n'azụ isi iji hụ ma nke a na-ebelata ihe mgbu ihe ọ bụ. adịghị. Ndị dọkịta ezé na-ahụghị ihe ọ bụla mgbe ha nyochachara nke ọma ma n'oge a na-enyocha ma na X-ray. Ọ ga-esetịpụ eze ọzọ ụbọchị ole na ole gara aga, bụ nke o nwere oke mgbu. Ọ gbanyere mkpọrọgwụ nke ọma. Ị nwere echiche ọ bụla na ihe nke a nwere ike ịbụ? Ma ọ bụ banyere ndụmọdụ ọ bụla na ihe ọ nwere ike ime? Ọ na-egbochi nke a nke ukwuu. Ọ na-aga itinye akwụkwọ maka uru nkwarụ ka ọtụtụ afọ gachara na AAP.
Ọ gbalịrị ọtụtụ ọgwụ dị iche iche maka mgbu na-adịghị ala ala, gbalịa ụfọdụ ọgwụ maka migraines na ọgwụ ndị ọzọ. Ọ ga-enwerịrị Pinex Major kwa ụbọchị (nke bụ ihe na-egbu mgbu siri ike). Ọ na-aga na physiotherapist, naprapath, chiropractor na-enweghị enyemaka ọ bụla. Ọ na-ewute ya ịhụ nna ya ka ọ na-agbasi mbọ ike otú o si eme ya. Amaghị ma ọ nwere ike inwe njikọ ọ bụla, mana mgbe ọ dị obere ọ gbajiri azụ ya, ọ gbajiri azụ ya ọzọ ọtụtụ afọ gara aga mgbe ọ na-arụ ọrụ. Ndị dọkịta kwuru na mgbaji ahụ enweghị ihe jikọrọ ya na ọrịa ndị a o nwere ugbu a, mana m na-etinyekarị mana ebe ahụ.
Maka nwa nwanyị na-achọsi ike.
Nke a adaghị ụtọ ma anyị ghọtara na ọ ga-abụ ihe na-akụda mmụọ ịhụ nna ya n'ọnọdụ dị otú ahụ. Ọ bụrụ na nna gị karịrị afọ 50, echiche m na-emegide ozugbo trigeminal neuralgia - nke nwere ike ịkpata oke mgbu na mpaghara ị kwuru. Ekwurula nchoputa a na nyocha?
- ọgwụgwọ maka trigeminal neuralgia
Enwere ike kewaa ọgwụgwọ ahụ na ọgwụgwọ ọgwụ, neurosurgery na ọgwụgwọ Conservative. nke ọgwụ ogwu anyị na-ahụ ọgwụ ndị a na-ere ahịa, kamakwa ọgwụ ndenye ọgwụ, gụnyere ọgwụ mgbochi epileptic (tegretol aka carbamazepine, neurontin aka gabapentin). Nke painkiller A na-ejikarị clonazepam eme ihe (-pam bụ otu njedebe dị ka diazepam, Valium, ie antidepressant na mgbochi nchegbu) nke ekwuru na ọ ga-enwe ike inye ihe mgbu na-ejikọta ya na ọgwụ ndị ọzọ. A na-ejikwa ọgwụ antidepressants na-agwọ ọrịa neuralgic mgbu. N'ọnọdụ ụfọdụ dị oke njọ, usoro ọgwụgwọ neurosurgical nwere ike ịdị mkpa, ma mgbe ahụ, ọ dị ezigbo mkpa - n'ihi nnukwu ihe ize ndụ nke mmerụ ahụ na ihe ndị yiri ya - na ị gbalịrị ihe ọ bụla ọzọ nke ọgwụgwọ mgbanwe na ihe ndị yiri ya na mbụ. N'ihi ịwa ahụ, ọgwụgwọ mgbochi nwekwara ike ịbụ nhọrọ.
Av treatmentzọ ọgwụgwọ ọgwụgwọ ya mere kwuo banyere aha ọma National Institute of Neurological Disorder and Stroke usoro ndị a; agịga akọrọ, ọgwụgwọ anụ ahụ, mgbazi nkwonkwo chiropractic na hypnosis / ntụgharị uche. Ọgwụgwọ ndị a nwere ike inyere onye ahụ metụtara aka mgbaka akwara na / ma ọ bụ mgbochi nkwonkwo na agba, olu, azụ elu na ubu - nke nwere ike inye enyemaka mgbaama na nkwalite ọrụ. O kwesịkwara ịnata ọgwụgwọ maka myalgias jikọtara ya na agba na n'olu nke nwere ike ime.
PS - Kedu ọkwa dị n'azụ ka ọkpụkpụ ahụ mere? Olu kwa?
Papa m akarịala afọ iri ise. Ọ nwere mgbaji mkpakọ na L50. A na-enyocha ya maka neuralgia trigeminal na nke ahụ abụghị ihe o nwere. Ọ nwalere ọtụtụ ọgwụ mgbochi ịda mbà n'obi na ọgwụ mgbochi nchegbu na-enweghị ọganihu ọ bụla. Ọ na-aga ọgwụgwọ ebe ọ na-"agbajikwa" na ịhịa aka n'ahụ n'olu / azụ na agba ebe. N'ebe ahụ kwa na-enweghị ọganihu ọ bụla. Naanị ihe ọ na-ekwu na ọ nwalebeghị bụ ọgwụgwọ maka myalgias metụtara na agba na olu.
Ndewo ọzọ, Ida Christine,
Ọ dị mma, n'ọnọdụ ya - na ọrịa ndị dị ogologo oge - ọ ga-abụrịrị na ọ kwadebere maka eziokwu ahụ bụ na ọ nwere ike ịme ọgwụgwọ 8-10 iji mee na agba tupu ya achọpụta na myoses na muscle esemokwu na-apụ - ọgwụgwọ ahụ kwesịkwara ịgụnye. ọgwụgwọ megide isi ihe na-akpata intraoral (ya na pterygoideus na pterygoideus umengwụ) - ee, nke a gụnyere uwe aka latex na ọgwụgwọ n'akụkụ eriri akwara dị n'ime ọnụ (ọ nwere ike ịdị irè). Ọgwụgwọ nkwonkwo na-ada ụda ezi uche dị ka ọ na-aga - ma ọ bụghị ya, ọ ga-adị ngwa ngwa ka ọ sie ike ọbụna karị, nke ga-eme ka ọ nwekwuo mgbu na njedebe.
- Enweela mbọ maka ọgwụgwọ agịga nkụ / muscular akọrọ megide agba? Nke a nwere ezigbo ihe akaebe.
- Ejila ọgwụgwọ mgbochi megide nkwonkwo agba, ka ị kwuru? Ka ọ bụ naanị ọgwụ mgbochi mgbu?
Iris Wage ekwu, sị:
Enwere m agba gbagọrọ agbagọ. E nyochara ya otu ugboro, wee were ya otu ugboro iji mezie nke a. Ihe si na ya pụta adịghị m mma. Ugbu a enwere m ahụ ike siri ike n'agba, n'olu, olu na ala azụ. Enwere m isi ọwụwa otu ugboro n'ụbọchị. Nke kachasị njọ, enwere m migraine. Afọ ole na ole gara aga achọpụtara m fibromyalgia. Enwere olile anya ịzọpụta agba dị ka m, ma ọ bụ ka m ga-aga igwe igwe dum ọzọ na nyocha na ịwa ahụ? M mara na ọ na-esiri ike ikwu ihe na-ahụghị m, ma eleghị anya ọ ga-ekwe omume ịza n'ozuzu ndabere? Daalụ, Iris
Dị ka ị maara na-edu fibromyalgia Ọtụtụ mgbe ka enwekwu uche na mọzụlụ na irighiri akwara. A hụla nke ahụ LDN (pịa ebe a iji gụkwuo maka obere dose naltroxen) nwere ike ịbụ ọgwụgwọ bara uru iji belata mmetụta a - nke nwekwara ike jikọta ya na nsogbu agba gị na akwara. Ị nwalela ụdị ọgwụgwọ a? Ọ bụrụ na ọ bụghị ebe a bụ ngwaahịa ọhụrụ maka naanị gị!
Ebe ọ bụ na ị gaferela ọtụtụ igwe igwe a, anyị na-ahọrọ ịrịọ gị ka ị mee ya gbatịa obi na thoracic spain, ka mee ka ubu di ike - nke a ga-ewepụ ụfọdụ nrụgide n'olu na agba. Ọ nwere ike inye aka ileta ọkachamara nkwonkwo (chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka) ma ọ bụrụ na ị siri ike n'elu olu. Nkwekọrịta a na-emetụta kpọmkwem na agba na ọrụ ya. Ma ọ bụghị ya, a na-atụ aro njem kwa ụbọchị na ala siri ike.
A na m eji LDN kwa ụbọchị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ. O nyewokwa m aka n'akwụsịghị akwụsị. Ọtụtụ ihe mgbu ebelatala, enwetaghachikwa m ume. Ihe mgbu n'agba bịara ogologo oge tupu fibromyalgia, n'ihi ya, ndị ọkà mmụta na-arụrịta ụka ma ihe mgbu niile dị n'ime ahụ sitere na nsogbu agba ma ọ bụ na ọ bụghị. 😉
M na-agakwuru onye na-ahụ maka chiropractor mgbe niile, ma enwekwara m enyemaka na nke ahụ. Ma m ga-agbalị ịgbatị onwe m ma hụ ma ọ na-enyere aka. Daalụ nke ukwuu maka ndụmọdụ dị mma, na ọ dị mma ịnụ na unu ndị ọkà mmụta anụwo maka LDN 😉
Ahụrụ m ajụjụ gị ebe a gbasara agba. Ị nwere MRI / CT nke agba gị? (Ọ nwere ihe adịghị mma n'ime nkwonkwo agba gị?)
Ihe kpatara m na-ede bụ maka na mụ onwe m ka a wala ịwa agba m nke atọ! =)
Uff! Ihe mgbu jaw dị egwu! Afọ 10 nke oke mgbu na m na enwere m ihe mgbu ugbu a! M eleghị anya, a obere "ihe itunanya" na Norway .. Ha weere muscle si n'isi m tinye ya na agba nkwonkwo dị ka ikpeazụ resotu tupu a agba prosthesis nwere ga-atụle! Obi dị m ụtọ nke ukwuu! Enwere m m, ihe ala dị ka fibro fọrọ nke nta ka ọ bụrụ .. Ị nwere ọmịiko m na m ga-achọ gị chi ọma na ka ụzọ gị na-egbuke egbuke! Ekele na etiti twenties ndị na-adịkarị ka nwanyị na 80s ya! :p
Ị dị ka onye nwere obiọma na ọmịiko, Ida Christine - onye na-eche banyere ndị ọzọ n'ezie. Anyị nwere olile anya ịhụ ọtụtụ n'ime unu na nke anyị Facebook Page ọzọ! Daalụ nke ukwuu maka post gị ma na-arịọ nna gị mgbake nke ọma.
Ajuju mara mma dị ka anyị chọkwara ịjụ gị, Iris - ma ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ka ihe si na ya pụta?
PS - Ọ dị mma ịgwa ndị dọkịta na-awa agba abụọ ọzọ okwu, n'agbanyeghị - ọ bụghị kwa ụbọchị. M nwere ezigbo mmetụta nke nkwonkwo ọgwụgwọ megide elu olu nkwonkwo na mgbanwe n'etiti thoracic spain / olu, nakwa dị ka mpaghara akpalite ebe ọgwụgwọ nke agba, nakwa dị ka olu mọzụlụ.
Enwere m agba gbagọrọ agbagọ. Ma ọ bụ cross-bit ha akpọwokwa ya 🙂 Huff .. 3 arụmọrụ? Echere m na m kwesịrị ibido agba nke abụọ m. Ọ bụ ugbu a afọ 20 kemgbe ikpeazụ m ọrụ, na ihe na ihu ọma adịghị mma.
Ọ dị mma, ogologo oge ole ka ị were eserese? Ọ bụghị afọ 20 gara aga, enwere m olileanya! 🙂 N'ọnọdụ ahụ, a ga-ezigarịrị gị maka nyocha ọhụrụ.
Nnabata Mgbu 🙂 Anyị ọ bụ ndị dọkịta na-awa agba atọ ebe a ugbu a? Ọfọn, ọ bụ n'ezie ihe karịrị afọ 20 ebe mmadụ ga-enyocha m maka nke a, ya mere gburugburu abụọ nwere ike ịdị ogologo. Mana enwere m olileanya na mmadụ ga-ebuga m n'oge adịghị anya. 🙂
Ọ dị mma Ida Christine 🙂 Ọ dị mma na ị nwetara enyemaka. 🙂 Adị m afọ 40 ozugbo ma ọ dị m ka m dị afọ 80 kemgbe m bụ 16 😉
tove ekwu, sị:
Ndewo Ida Christine, enwere m ike ịjụ ebe ị wara ahụ? Nwa m nwanyị na-aga ịwa ahụ agba na St. Olavs, ọ na-enwekwa obi ụtọ ma hà nwere ikike dị mma n'ihe ha ga-eme.
Monica ekwu, sị:
A bụ m nwata nwanyị dị afọ 29 nke na-agba mgba n'olu / azụ, isi ọwụwa (migraine), mgbu n'afọ, na mgbu na akwara / nkwonkwo. M nwekwara a agba na-adịghị emekọ ihe ọnụ (ọ na-adị ka ọ kwesịrị a nke nkwonkwo ọ bụla oge). na-efe efe tụrụ na ntị nke na-agaghị efu, yana erughị ala na sinuses.
Enwere m ike gwụrụ / ike gwụrụ m n'anụ ahụ, na-agbasi mbọ ike na itinye uche ma nwee ọnwụ ebe nchekwa.
Oyi kpọnwụrụ nke ukwuu, nwere ike ịgagharị na uwe mgbe ndị ọzọ yi uwe elu.
Mkpọtụ na ọnọdụ nrụgide na-achụpụ m, ana m anọkwa ogologo oge na-agbake.
Ọrụ ụlọ na-aga n'ihu otu nzọụkwụ na 4 azụ, ka ụda abụọ sitere na igwe nhicha na ọkwa ume na-ada: p
Nwere ike ihi ụra ma hie ụra ma hie ụra, mana echela izu ike.
Urk, ike gwụrụ ya 🙁
Ndewo Monica. Abụ m “onye ọrụ” oge niile nke saịtị a mara mma. Yabụ na m na-ekwu ntakịrị ihe na-adọta mmasị m, ihe m nwere olileanya dị mma! Ih hihi .. Abum onye ga-enwe mmasị inyere ndi ozo aka.
Mgbaàmà ndị dị otú ahụ ị na-akọwa na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu m nwere .. Enwere m m na otu ahụ ka m nwere ya. Ị nwela ule ọbara ọ bụla, Mr, ct? M na-enwekwa ike ọgwụgwụ n'ahụ, enweghị itinye uche na enweghị ncheta. (ME bụ nchoputa ha nwere ike ime ma ọrịa ndị ọzọ niile bu ụzọ wepụ ya)
Mgbe ọ na-abịakwute agba gị (enwere m nsogbu agba maka afọ 10. Enwere m ịwa ahụ 3) mgbe ahụ enwere m nsogbu na sinuses, mmetụta na ọ na-aga nke a site na nkwonkwo wdg). Dọkịta na-awa ọnụ enyochala agba gị, dịka ọmụmaatụ? Agara m afọ 4 na mbufụt n'agba m (n'ihi ME) nke ha achọpụtaghị ruo mgbe 'oge na-adịghị' na nkwonkwo agba m gbajiri. Naanị ịjụ ma ị nwere ajụjụ ọ bụla 😀 Agụrụ m ọtụtụ ihe n'ụzọ ọ bụla enwere ike ma a bịa n'agba 😛
Ezigbo ajụjụ, Ida Christine! Daalụ nke ukwuu maka ọnụnọ gị na saịtị anyị - ị na-eme ka ọ dị ndụ n'ezie site na ntinye gị niile magburu onwe ya na ezigbo mma. Anyị na-echere nzaghachi sitere n'aka Monica tupu anyị ewepụta ntinye nke anyị.
Ndewo Ida Christine 🙂
Ọ dị mma na ị kwuru 🙂
Enweela m ọtụtụ ule ọbara, na ule na nke gị na nke m - enwechaghị ike ịchịkwa ihe m nwalere na anwaleghị m: / yabụ iwe na-ewe m nke ukwuu.
ma amaghi m ihe m ga-aza ajuju gi:/
Banyere agba, naanị m kwuru ya na dọkịta eze, wee nweta splint.
Ma anaghị m eji ya mgbe ọ na-ewute ya, ọ na-esiri m ike ịkpọ dọkịta eze ka m mara (nakwa mgba na ịda mbà n'obi na nchekasị mmekọrịta ọha na eze).
Ma eleghị anya, m dị nnọọ mkpa ka ata n'ime utoojoo apụl na-akpọ dọkịta eze echi ?! 🙂
Ee, amaara m na mmetụta nke ịla n'iyi nke ihe ị were na-ewereghị! Ma eleghị anya, gaa na dọkịta, chọpụta ụdị ule ndị ị mere na ikekwe mee ụfọdụ ule ndị ọzọ nwere ike inye azịza maka ọrịa gị. Enwere ọtụtụ ihe nlele ị nwere ike iwere ya mere ọ nwere ike bụrụ nzọụkwụ mbụ n'ụzọ ziri ezi? 😀
Ị na-eche na ị na-akawanye mma site na splint ata? Enwere m ya onwe m ka agba ekpe m dị "ala" karịa aka nri na aru m bụ ntakịrị gbagọrọ agbagọ. Ọ dị mma na ị nwere splint n'ihi na nke ahụ bụ ihe mbụ ha 'na-anwale'. N'ihi ya, m na-adụ ọdụ ka ị na-ata n'ime utoojoo apụl na-akpọ dọkịta ezé ka ị nweta nyocha nke agba na / ma ọ bụ ikekwe na-ezo aka na ọnụ dọkịta na-awa. M na-aghọta gị egwu nke na-akpọ etc .. Na mbụ m mgba na « ekwentị nchegbu » .. Nwere ike ọdịdọ site nnọọ iche na m ga-akpọ ebe .. Ma m jumps na ya ọtụtụ ugboro na ọ dị nnọọ nwetara mma na mma. 'Ama m n'aka na ị nwere ike ijikwa ya! <3 Anyị niile bụ ụmụ mmadụ nwere 'ike nke ime' nke nwere ike ime ka anyị mee ihe anyị chọrọ / ga- .. mara na m ghọtara nke ọma mmetụta gị.
Ị nwere ụda ịpị ahụ n'agba gị mgbe ị metụrụ ya aka? Kedu oke elu ị nwere ike ịgha? Iji mkpịsị aka abụọ, ị nwere ike ị nweta mkpịsị aka abụọ n'elu ibe gị n'ọnụ gị na-enweghị mmerụ ahụ?
Ndo, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% ijide n'aka na m zara gị. Iju.
Ee ọ na-akụ ọtụtụ ihe, ọ naghị adịrị ya mma ma na-ewute ya nke ukwuu. Enweghị ike ịme mgbatị ahụ ị kwuru na-emejọghị ya 🙁
Agbalịrị m na splint ahụ n'abalị ụnyaahụ, mgbe m na-ejighị ya kemgbe m nwetara ya, n'ihi na ọ na-egbu mgbu na ahụ erughị ala. Ma n'abalị a, m chere na ọ dị mma iyi. Echere na a na-ahapụ agba ka ọ zuru ike ntakịrị.
Hehe. Enweghị nsogbu, Monica! Nwere ike ịga ọsọ ọsọ na ntụgharị maka m kwa! 🙂
My dum "jaw akụkọ" malitere na ịpị na agba .. Mgbe m na-na kasị njọ, m ike ọbụna ịsa ezé m. O wutere nke ukwuu. Ị na-ahụta ata gị? Ezé gị ọ̀ kwụ ọtọ mgbe ị na-ata ọzọ, ka ọ dị ka ọ gbagọrọ agbagọ? Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe m na-ekwu! N'ebe m nọ, ata m ezighị ezi. Naanị ezé azụ m abụọ dị n'akụkụ aka ekpe nọ na ata nri, ebe ezé ndị ọzọ ezighi ezi kpamkpam! Ọ dị mma ịnụ na ị nwere splint ị nwere ike iji. Ọ nwere ike ịfụ ụfụ ntakịrị na mbụ, mana ọ na-akawanye mma ma ọ dị mma maka mọzụlụ ị na-eji splint, nweere onwe gị ịga n'ihu na ya mgbe ị nwere ike.
Ọ fọrọ nke nta ka m nwee ntakịrị "nchegbu" mgbe m gụrụ otú ọ dị gị n'ihi na amaara m na ọ nwere ike imerụ ahụ nke ukwuu inwe nsogbu na agba! Ingen Ọ dịghị onye na-eche banyere ya otú ahụ ka m na-akwadosi ike na ị na-aga gị GP ma ọ bụ dọkịta eze ka kpọga gị na orthodontist. Ọ bụrụ na ịchọrọ, enwere m ike iji obi ụtọ wepụta ụfọdụ ụzọ ọzọ maka ndị dọkịta na-awa maxillofacial / ndị dọkịta na-awa ọnụ ị nwere ike ịchọ / a ga-ezo aka gị - ọ dabere na ebe obodo ị bi!
Carmen Veronica Kofoed ekwu, sị:
Na ibi na mgbu ọ dịghị onye na-achọpụta ihe bụ maka ihe ...
Ndewo, a bụ m nwa agbọghọ nke dị afọ 30 nke birila ọtụtụ afọ na mgbu na-adịghị ala ala. Emeela ihe nlele n'akụkụ niile, mana ọ nweghị onye na-achọpụta ihe ọ bụla, a hapụrụ m onwe m, n'ihi na ndị dọkịta ekwenyeghị m!
M na-ala azụ ịkpọ mgbe ọ na-ewute nke ukwuu na enweghị m ike ịga ije, n'ihi na m na-enwe mmetụta na ha chere na m bụ hypochondric!
Nke ahụ, abụghị m.
M na-ata onwe m ahụhụ site na ụbọchị ndị siri ike ma na-akwali onwe m nke ukwuu, ọ na-emekarị ka m nọrọ n'ihe ndina ruo ọtụtụ ụbọchị, naanị echiche nke ịga ụlọ ahịa bụ obi ọjọọ kpamkpam, n'ihi ya, m na-enweta ọtụtụ taxi!
Na kasị njọ, m nwere ike iguzo n'àkwà na niile 4 na-eti mkpu, n'ihi na m na-amaghị ebe na-aga, ọgwụ adịghị arụ ọrụ ma na-enweta ntakiri mgbu enyemaka .. Gịnị mere na ọ dịghị onye nwere ike ige m ntị?
Mgbe ọ dị njọ kwa, ọ dị arọ ma na-ejide ndụdụ, na na n'ezie na-eguzo ọtọ na-eme efere bụ nnọọ echiche, m ga-akpọ mama m na-arịọ ya ka o nyere m aka, ma ọ na-alụ ọgụ na mgbu.
Enwere m fibromyalgia, ma n'afọ ndị na-adịbeghị anya, naanị ihe mgbu na ike ọgwụgwụ na-akawanye njọ, m na-agbanye onwe m mgbe niile ma ọ dịghị onye na-ege m ntị ..
Ọtụtụ ndị na-ekwu, ọ gafere .. EE, ọ dịghị agabiga, ọ gaghị agabiga ..
Ọ na-ewute m ịnọdụ ala, dinara ala, guzoro na-eje ije .. Gịnị ka m ga-eme mgbe ahụ? Kedu otu m ga-esi mee ka ụwa niile na a ga-ahụ ya ma nụ?
M na-ekere òkè na nyocha maka mgbu na-adịghị ala ala, ma ọ naghị enyere m aka otú ọ dị m taa. Enweghị m ike ịnweta ọrụ na enweghị m ike gụchaa akwụkwọ, n'ihi na amaghị m otú e si enweta ume.
Ana m ehi ụra nke ọma, na mgbe mbụ m na-ehi ụra ma teta, ike na-agwụ m dị ka mgbe m lakpuo ụra, na nke kachasị njọ m nwere ike ihi ụra ruo awa 15, ma mgbe ahụ, a ga-akụtu m kpamkpam, anaghị m arụ ọrụ. .
Ọ dị ka a kụrụ m ihe mgbe ụfọdụ, na ahụ m kpọnwụrụ akpọnwụ, gịnịkwa ka ndị dọkịta na-eme?
Ọ bụghị n'efu, ha na-anọdụ ala ebe ahụ na-ele gị anya dị ka onye nzuzu, na-eche ka klaasị gị kwụsị. A sị na m nwere ike ị were cortisone n'ahụ m niile, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịmụmụ ọnụ ọchị.
Kedu ihe ọ na-ewe mmadụ ịhụ m, ọrịa m, ihe mgbu m, ndụ m kwa ụbọchị bụ́ ebe m na-enwekarị ike ịnọdụ ala na-ebe ákwá n'ihi na anaghị m enweta ihe ọ bụla, n'ihi na ọ na-adị m ka erughị m eru maka ihe ọ bụla, mgbe mmadụ rịọrọ m maka enyemaka. na m ga-asị mba n'ihi na m na-enwe nnukwu mgbu.
Enweghị m ike ịzụ n'ihi na ọ na-eme m kpamkpam nwụrụ anwụ ọzọ, ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ kwesịrị ịbụ a ọrụ ebube ọgwụgwọ, ma ọ bụghị dị ka onye ọ bụla. Enweela m PT, ee, ọnọdụ m katara mma, mana mgbu m apụghị…?
M mgbe ụfọdụ nke ukwuu iwe na m na-na-n'ime ukwuu mgbu, na ọ na-aga karịa ndị m hụrụ n'anya, ma ọ bụ n'ihi na m na-adịghị na-eche hụrụ ma ọ bụ ghọtara, M nwere ike ịbụ a mama ma.
Mgbe m ga-achọta ebe ihi ụra, m ga-ewuli ọtụtụ ohiri isi n'ihe ndina, n'etiti ụkwụ m, n'okpuru azụ m, n'akụkụ m, n'okpuru ogwe aka m ka m wee nwee ike ịnweta ọnụ ụlọ ohiri isi ... Ihe mgbu na ike ọgwụgwụ na-adịghị ala ala bụ Ọ bụghị ihe ị na-achị ọchị, ndị dọkịta na-eme nke ahụ na egwuregwu, ọ dị ntakịrị ihe ọmụma maka nke a.
Otu ma ọ bụrụ na e nwere ihe ole na ole ndị ọzọ dị oké njọ, ha na-enweghị ike idi ka m juputara enyocha, otu ma ọ bụrụ na ọ na-akawanye njọ na m nwere ike akpatre mgbe na-aga?
Enwere m nnukwu nkụda mmụọ.
Ndewo Carmen Veronica,
Ọtụtụ ndị dọkịta na ndị ọkachamara na-esiri ike ịkọrọ fibromyalgia na ME n'ihi na nsogbu ndị a nwere ike ịkpata ọtụtụ mgbaàmà dị iche iche - ya mere ọ na-esiri ike ikwu ihe ọ bụla gbasara ya.
Ikwu ihe doro anya: Ị nwalela ọgwụgwọ LDN (Obere dose naltrexone)? A na-ekwu na LDN (Naltrexone dị ala) nwere ike ịbawanye ọkwa endorphin ma si otú a na-enye ahụ efe maka ọtụtụ ọrịa na-adịghị ala ala. Tinyere ihe ndị ọzọ, fibromyalgia, ME / CFS na ọrịa ike ọgwụgwụ na-adịghị ala ala. Ị nwere ike ịgụkwu gbasara ya ya.
Kedu ka LDN si arụ ọrụ?
- Naltrexone bụ onye mmegide nke na-ejikọta ndị na-anabata opioid na sel. N'usoro iwu, LDN na-egbochi nnabata endorphin nke ụbụrụ nwa oge. Endorphins bụ ihe na-egbu mgbu nke anụ ahụ ma ụbụrụ n'onwe ya na-emepụta ya. Nke a nwere ike ime ka ụbụrụ kwụọ ụgwọ site n'ịbawanye mmepụta endorphin nke ya. Ihe si na ya pụta bụ ụbara ọkwa endorphin nke nwere ike ibelata ihe mgbu ma mee ka ahụ dịkwuo mma. Mmụba mmepụta nke endorphins nwere ike si otú a nyere aka na mgbu, spasms, ike ọgwụgwụ, nlọghachi azụ na mgbaàmà ndị ọzọ, ma usoro nke ime ihe na njedebe ikpeazụ na-anọgide na-ahụ ya.
Nke a nwere ike ịbụ ihe nye gị, Carmen Veronica?
A nwalere LDN ee afọ ole na ole gara aga - Ọ ga-ebili n'ụtụtụ na 1 na mgbede, ọ naghị enyere m aka dịka m tụrụ anya 🙂 egosila ya ọzọ.
LDN nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche dabere na afọ na ọkwa nke fibromyalgia / ME. Anyị na-akwado ka ị nye ya ọzọ. 🙂
Ndewo Carmen <3
N'agbanyeghị na m amaworị gị na akụkọ gị, m na-ahọrọ na agbanyeghị ma kwuo obere okwu!
Ebe ọ bụ na nke a bụ saịtị ebe ndị ọzọ nwere ike dee na-agụ ndị ọzọ kwuru otú "ga-" m na-ewere ya na Bokmål .. Hihi.
Achọrọ m ka ị mara na m ghọtara nke ọma mmetụta gị na ihe ị na-enwe.
Site n'ihe anyị kwuburu na mbụ, akwadoro m gị ma nyochaa m ka anyị nwere mgbaàmà yiri nke ahụ ma ị nwere ụfọdụ mgbaàmà nwere ike ịdị ka m dịka m nwere. Ọ bụrụ na GP gị achọghị' inyocha gị ma ọ bụ chee na enyochala gị, ị nwere ike ịrịọ ka kpọgara gị ọgwụ anụ ahụ na nhazigharị n'ụlọ ọgwụ, ebe ha nwere ike nyochaa gị wee kpebie. Ị nwekwara ike ịrịọ GP gị ka ọ were ọbara ọzọ n'aka gị ka mmalite na nyocha ọ ga-ekwe omume maka ME. Mgbe ahụ, a ga-ewere ọtụtụ ọbara dị ka ọrịa shuga, HIV / AIDS, metabolism, vitamin na mineral na ọrịa ndị ọzọ nwere ike ime. na-ebute otu akara ngosi dị ka nke m nwere ike, dịka ọmụmaatụ, lelee ndepụta a na-akpọ "usoro Canada" nke ọtụtụ ndị mmadụ na-agbaso mgbe ha na-ekpebi nyocha. Enwere ike ịkpọ gị onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ dịka ọ bụkwa akụkụ nke nyocha nke ME.
Ọbụna ma ọ bụrụ na a chọpụtabeghị gị na ME, ị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, gbalịa mee obere nzọụkwụ maka ndụ dịtụ mma kwa ụbọchị. Ndụmọdụ m dị n'okpuru akụkọ ị gụrụ! 😀 Ọ nwere ike ime ka ọ dịkwuo mfe ..
Ma ọ bụghị ya, achọrọ m ikwu na m ghọtara mmetụta gị na ị maara ebe m nọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikwu okwu ..
Ndewo ebe 🙂
Ọbụna echela m banyere m, ma eleghị anya na-arị elu karịa na ọ bụ ihe m nwere, ugbu a, m na-akwaga Rogaland, ma enwere m olileanya ịnweta akụkọ ziri ezi mgbe m kwagara, n'ihi na n'ebe ugwu ha nwere ike ọ gaghị eme n'ezie. ihe ọ bụla banyere ya 🙁
Ihe dị njọ bụ mgbe ị naghị esi n'àkwà bilie, ị maghị ebe ị ga-atụgharị ma ọ dị gị ka mmadụ na-adụ gị mma, ọ na-ewute ya nke ukwuu.
Ụbọchị niile m na-achọ ka m na-arụsi ọrụ ike mana ike ọgwụgwụ na-akwụsị m kpamkpam, dị ka ugbu a, m gaara anọ n'ụlọ ahịa mana ọ na-esiri m ike iguzo n'ụkwụ m 🙁
Mgbe m na-ekiri ndụ na ọnwụ na TV, hụ otú Sweden dị, ọ na-adịkarị m ka m nweta ọgwụgwọ ebe ahụ 🙂
Olileanya ịhụ gị tupu m ahapụ Ida, makụọ!
rønnaug ekwu, sị:
Nke a dị ka ebe nrụọrụ weebụ dị egwu na ibe Facebook nwere ọrụ nkeonwe. Ụda kpamkpam pụrụ iche.
Chere ka iwepụta ajụjụ.
Enwere m ọrịa na-adịghị ala ala ruo afọ 26. Ọ dị afọ 46 ugbu a, ma nwee ọrịa anụ ahụ na-ejikọta ya na mkpụrụ ndụ ihe nketa, Ehlers-Danlos syndrome, ọ na-enwekwa nnukwu nsogbu ahụike. Onye m na-achị, dịka ọmụmaatụ. ọrịa obi nke m gbaworo ọgwụ, migraines nke a na-achịkwa, ihe mgbu maka nkwonkwo na akwara. Ọ dị ihe na-adịghị mma na akụkụ ahụ ọ bụla dị n'ahụ. Agakwara m n'ọtụtụ ngalaba ụlọ ọgwụ na akụkụ ahụ dị iche iche, ka ha na-ada. E gosipụtala ihe, mana ọ nweghị enyemaka enyere maka ya. Ọmụmaatụ. achọpụtara POTS, postural orthostatic tacycardia syndrome. E zigarala UNN na Rikshospitalet onye nyochara m, yana nwa m nwoke nke dị afọ 19 ugbu a, yana EDS na POTS. Mana Riksen na-ekwu na ọ nweghị ọgwụgwọ maka ya, na ọzọkwa, ọ bụ ọrụ UNN ịgbaso m ebe m bụ onye Helse Nord. Ya mere enweghị enyemaka. E zigara m na ngalaba mmekọrịta na ụlọ ọgwụ Østfold nke nwere ọrụ mba wee gwa onye na-ahụ maka ahụike m na ọ ga-ezigara m naanị ebe ahụ maka nsonye, ​​ọgwụgwọ, site na POTS. Got jụrụ iru ebe ahụ. Nwa m nwoke nwere POTS enweghị ihe nleba anya maka nke ahụ. Na mgbe onye ọkachamara na London nyochachara EDS, a tụrụ aro ka ọ hụ ọkachamara n'ebe ahụ maka nkwụsị nke autonomic, ya na ọkachamara a ma ama. N'ebe ahụ, anyị abụọ nwere ike nweta enyemaka. Edere m akwụkwọ maka ahụike north iji kpuchie ọgwụgwọ ya na mba ofesi. Dị ka m kwuru, ọ nweghị onyinye enyemaka ebe a. Ma ike n'ebe ugwu jụrụ, n'ihi na anyị nwere a zuru enye ọgwụgwọ nke ite ke Norway.
Ee, otu ahụ ka ọ ga-esi gaa. Yabụ na anyị enweghị dọkịta, ndị dọkịta, ụlọ ọgwụ, ndị ga-ebipụ n'ọnọdụ anyị. Ọrịa na-adịkarị obere, anyị na-arịakwa ọrịa. ma nọrọla n'ụra ụfọdụ n'ụra ruo ọtụtụ afọ. Anaghị m akpọkarị ekwentị maka ndụmọdụ na o nweghị ihe ọ ga-enye aka. Ọ nụtụbeghị banyere ite, ọ chọpụtaghị na e nwere onye nọ na Norway nke nwere ike inyere aka. Kpọmkwem otu ihe ahụ m chọpụtara.
Ị nwere ezigbo ndụmọdụ? Ndụmọdụ ọgwụgwọ maka nke ahụ achọpụtala m onwe m, site na weebụsaịtị, na site na mmekọ na otu American POTS, ya mere, m maara ọtụtụ ihe banyere ọgwụgwọ, mana ọ dị m ka "Ana n'ime ọhịa", bụ onye a hapụrụ na owu ọmụma niile na ọrịa siri ike. hapụrụ ịnwụ.
Enwekwara mwepu nke mmiri ụbụrụ cerebrospinal na-esi na imi pụta. Ọ na-agbanye n'isi, na-amụba ihe mgbu na azụ nke isi, n'azụ anya na n'azụ imi, ọ na-asọbawanye n'azụ imi. Nke a dị ize ndụ ma nwee ike ibute mbufụt nke ụbụrụ. Ma dọkịta m nwere ezumike, ọ nweghịkwa enyemaka. A wala m ahụ m mbụ maka etuto ụbụrụ ma nwee etuto fọdụrụnụ. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ n'ihi ọrụ a na 2012 nke mere ka ọ bụrụ ihe na-adịghị ike nke na-eme ka ọkpụkpụ njikọ dị n'ụbụrụ na-agbapụta oge, nke mere na ọ na-esi na imi pụta kwa ụbọchị.
M na-enwekwa gastroparesis, nke na-enwe nrịanrịa mgbe niile na mgbidi afọ, ọ na-afụkwa ụfụ nke ukwuu. eriri afọ m anaghị arụ ọrụ n'ihi EDS, na n'ihi mgbaasị spina bifida, na mmebi ndị ọzọ dị n'azụ, na enwere m ike inwe ọrịa chiari, ụdị hernia n'olu.
Enwere m nnukwu ihe mgbu n'ahụ m niile, enwere m m, ike ọgwụgwụ na ihe mgbu kemgbe ihe dị ka afọ 2000. Ọ na-adị m ka m na-agwụ ike, ma ụmụ nwoke abụọ ahụ nwere EDS, ọ dịkwa m mkpa nleba anya, ọ na-esiri m ike isi nri. onwe m. Nwa nwoke nke kacha nta nwere EDS, POTS nwekwara M, ma gbakee site na afọ ole na ole dị ka onye na-ehi ụra nke ọma, kpamkpam n'ụlọ, ọ bụghị n'ụlọ akwụkwọ, ọ dịghị ihe ọ bụla, afọ anọ gụchara akwụkwọ, ma ugbu a ọ nọ n'ụkwụ ya ọtụtụ ụbọchị, mana ọ nwere ụra. mkpa ndị dị oke oke. Nwere ike na-ehi ụra awa 17 n'ụbọchị maka oge oyi… ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge niile n'ezie. Ma mgbe ahụ ọ nwere ike inwe ezigbo awa mgbe ọ gbakere. Amaghị m ihe m na-eme n'oge adịghị anya.
A na-esote m ụlọ ọgwụ mgbu na Oslo, enwere m oge ọhụhụ n'izu na-abịa. Ma n'ebe ahụ ka m na-enweta naanị enyemaka iji mee ka ihe mgbu kwụsị. Ahụ na-achọkarị ịdaba, ọ na-atụkwa egwu mgbe ma ụbụrụ, sistem ụjọ, nkwonkwo, mọzụlụ, afọ na eriri afọ anaghị arụ ọrụ. amaghị ma ọ bụ n'ihi MS n'ọdịnihu, (nke na-abịakarị na EDS), ma ọ bụ na ọ bụ ịgbalite adenoma pituitary, nke nwere ike inwe ihe jikọrọ ya na usoro urinary, ma ọ bụ na ọ bụ n'ihi spina. bifida, nke mere tupu eriri afọ "akpọnwụ akpọnwụ", nke nwere ike ugbu a mee ka usoro urinary "adịghị mma".
Agaghị m enwe ike ịme nyocha ọzọ n'oge adịghị anya. Ọgwụgwọ. Ịga ụlọ ọgwụ. Ebe a na ebe. Ọ dịghịkwa ihe na-arụ ọrụ. Achọrọ m ị dinara n'ihe ndina m. Ma enweghị ike ịgha ụgha n'ebe ahụ a ntapu na ụbụrụ, na na ara afo mgbu, wdg… Ị nwere Atụmatụ maka gastroparesis ọgwụgwọ na Norway.? Mara na Haukeland na-ahụ maka ya na Norway. UNN na-esokwa m n'ihe gbasara eriri afọ m nwụrụ anwụ .. mana ọ ga-abụrịrị na m si na sistemụ pụta… Achọrọ m onye nhazi…
Ọ bụrụla ịwa ahụ maka ọtụtụ etuto ahụ, wepụ akpanwa, ovaries abụọ n'ihi etuto ahụ, nwere hematoma na azụ, nwere obere etuto anọ na gland thyroid ugbu a… amụrụ ya na etuto anụ ahụ connective na ikpere nke a wara ya mgbe m dị afọ 5. Ọ dị ọnwa ole na ole, ugbu a nwere etuto fọdụrụ na pituitary gland, ma nwee etuto abuba abuba n'ọkpụkpụ ọkpụkpụ. Ọ na-esiri ike mgbe ahụ nwere ọtụtụ ntụpọ.
Na-na-na-na-na! Nke a adaghị nke ọma. Anyị ghọtara na nke a na-agbagwoju anya ndụ kwa ụbọchị nke ukwuu. emoticon na-ejighị n'aka Ọ bụ dịka ị na-ekwu na ọ bụ ọrịa na-adịghị ahụkebe na-emetụta gị - na ọbụna ọtụtụ ndị ọkachamara na Norwegian nwere obere nka na ya.
- A na-emekwa ọgwụgwọ gastroparesis n'ụlọ ọgwụ outpatient gastromedical dị na Ullevål, ọ bụrụ na ọ nwere ike bụrụ isiokwu maka gị? Ka nke a ọ ga-esi ike ebe ị bụ onye Helse Nord?
- Anyị ma ọ bụghị maara na ihe na-arụ ọrụ bụ inupụ na-ekwu. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na ọ ga-abụrịrị, mana echefuru gị n'ezie ma ọ bụrụ na ị jụọghị "olee ebe akụkọ m ga-adị?" ma ọ bụ "kedu ụdị ọgwụgwọ m ga-enweta na olee mgbe m ga-enweta ya?" - karịsịa mgbe ọ bụ isiokwu na-esiri ha ike ịkọrọ ya.
- Kedu ka ihe a niile si metụta ọkwa ọrụ gị? Ị nwere ike ịga ije ntakịrị wee na-aga n'ihu, ka ọ bụ naanị ihe na-egbu mgbu maka nke ahụ?
- Kedu maka ndụmọdụ nri? Ị nwetala ndụmọdụ ọ bụla gbasara ihe ị ga-eri / ịṅụ ka ị ghara 'flares' na ihe ndị yiri ya?
Cici ekwu, sị:
Enwere m ọrịa ogbu na nkwonkwo psoriatic ma na-alụ ọgụ nke ukwuu na vertebrae elu cervical.
Nke a na-eme kemgbe ọtụtụ afọ. A nwalere X-ray na-enweghị atụ, ul, physio. Ọ dịghị onye na-achọpụta ihe na-ezighị ezi. Isi ọwụwa na-agba m mgba nke ukwuu n'ihi nke a.
Ọbụna echere m na nkwonkwo ndị a agbasiwo ike ma na-akawanye njọ mgbe niile.
M fụrụ akpụ nke na ọ dị ka m na-akụ olu m.
M na-echekwa nkwesi ike na obi mgbakasị na-eduga na-adịghị mma mgbasa nke ụbụrụ na nke na-echegbu m nke ukwuu.
Ị nwere ike ị nyere m aka,
Nke mbụ, anyị ga-akwado ka ị na-arụsi ọrụ ike ma zụọ ọzụzụ n'ike gị - nweere onwe gị ịnwale ụfọdụ mmemme ndị anyị depụtara na ibe a. Ị na-ekwukwa na e meela ma x-ray na diagnostic ultrasounds, ma na-enweghị nchoputa. Emeela nyocha MRI?
Isi ike na akụkụ elu nke olu na akụkụ ala nke olu nwere ike inye ihe ndabere maka ihe a na-akpọ isi ọwụwa cervicogenic. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe mgbu nkwonkwo bụ isi nsogbu, mgbe ahụ, anyị na-akwado ka ị gbalịa onye na-ahụ maka chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka nke ga-elekwasị anya ma nkwonkwo n'olu na akwara ndị na-ejikọta ebe ahụ.
Ị nwere ike ịkọwa isi ọwụwa gị? Ọ dị ka nrụgide n'azụ isi, mgbe ụfọdụ megide ụlọ nsọ na ọbụna dị ka nrụgide na anya mgbe ụfọdụ?
Nwachukwu ekwu, sị:
Nwere mbufụt nke akwara Achilles. Nwere ya na mbụ ma nyere aka na ọgwụgwọ nrụgide nrụgide. Ọ na-enwe mkpali ikiri ụkwụ mgbe ụfọdụ na ọgwụgwọ nrụgide ebili mmiri nyere aka nke ọma. Amaghị ma ọ nwere ike inwe njikọ ọ bụla. Na-eji snịịka eme ihe maka ịgbapụta.
Gakwuru dọkịta ọkpụkpụ ka ọ nụ ma ọ nwere ike inye aka na ịwa ahụ. Ọ bụ nnukwu mma na azụ ikiri ụkwụ, ma ọ dịghị enyemaka iji pụọ na mgbatị ahụ m na-eji ọtụtụ ugboro. Ugbu a, ọ dị ka ọ 'dọrọla'. Ọ dịghị ihe na-enyere aka. Enwere ya ngwa ngwa maka afọ 2 ugbu a. Nwere 5 mgbali ife agwọ ọrịa afọ gara aga, ịgbatị na ọzụzụ nwa ehi. Agbalịrị ọgwụgwọ Naproxen, mana ọ ka na-egbu mgbu.
Ọ na-ewute gị ịga ije, mana were Voltarol nke na-enyere aka nwa oge. Ngwụrọ mgbe m na-eje ije nke ọzọ na-ebute ibu na-ezighi ezi na ikpere, hip na azụ. Onye nzuzu n'ihi na ọ na-amasị m ịga ije n'ọhịa na ubi.
Site n'ụzọ, m na-enwe ọtụtụ ihe mgbu na akwara na nkwonkwo, karịsịa n'ụtụtụ na mgbe m nọ ọdụ jụụ ruo ogologo oge.
Atụmatụ ọ bụla maka ihe ọzọ m nwere ike ime?
Tendonitis na Achilles na nkwụsịtụ ndị ọzọ na ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ na-enwekarị njikọ. Tinyere ihe ndị ọzọ, a hụwo na nrụrụ nke Haglund (bọọlụ ọkpụkpụ na ikiri ụkwụ) na ikiri ụkwụ nwere ohere dị elu nke ime ma ọ bụrụ na onye ahụ nwere ihe na-adịghị mma na nkwonkwo ụkwụ na ụkwụ (dị ka nfefe ma ọ bụ ụkwụ dị larịị) - nke a bụ n'ihi ụbara ibu n'ihi na ụkwụ anaghị ebelata ibu ujo. Nke a nwekwara ike iduga na fascia siri ike dị n'okpuru ọbụ ụkwụ n'ihu ikiri ụkwụ, nke a na-akpọ fasciitis plantar, a na-ewerekwa ya na ọ bụ ihe kpatara ikiri ụkwụ. Osisi fascia na-adọta na ọkpụkpụ ọkpụkpụ ruo mgbe ahụ ahụ na-amanye ya ịkwado ebe ahụ site n'itinye calcium n'ebe ahụ, nke na-aghọ ihe e ji mara ikiri ụkwụ anyị nwere ike ịhụ na X-ray.
Nnukwu bọọlụ dị n'ikiri ụkwụ gị ka a na-akpọkwa nrụrụ Haglund ma jikọta ya ozugbo na ọnọdụ dị elu nke tendonitis na Achilles (!) Ị nwere ike ịgụkwu banyere ya n'isiokwu anyị na nrụrụ Haglund - ebe a ị ga-ahụkwa ndụmọdụ na usoro.
Uff, ọ dị ka ị banyela n'ime ajọ okirikiri (!) Usoro ọgwụgwọ nrụgide ga-enyere aka - mana ọ dị oke ọnụ.
Onye dọkịta, chiropractor ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụgwọ ejirila aka gị zigara gị maka mmegharị naanị ọha (Ọ BỤGHỊ na nzuzo)? Site na ntinye aka ọha, ị nwere ike kpuchie akụkụ buru ibu nke ihe a na-akpọ naanị akwa ma ọ bụ akwa ụkwụ - ihe nwere ike ịdị ka ọ dị gị mkpa. Nke a ga-enye gị ohere ịkwaga karịa ma na-arụsi ọrụ ike.
Anyị na-akwado ka ị nwaa ụfọdụ mmega ahụ dị iche iche anyị nwere na webụsaịtị anyị (lee njikọ site na ibe FB anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya) yana ikekwe yoga ahụike nwekwara ike ịbara gị mma?
Ị na-eji usoro / mmega ahụ oge niile megide ọrịa ụkwụ gị, n'agbanyeghị?
Turte ekwu, sị:
Ndewo na daalụ maka nnukwu onyinye! Adị m afọ 47 na nkwarụ n'ihi mgbu na ogwe aka na ubu m. Umengwụ n'abalị karịsịa na ogwe aka ma na-ehi ụra nke ukwuu n'ihi nke ahụ. Enweela ọtụtụ ihe mberede na azụ / olu (nkụkọ na ọdịda) ma nwee olu na-adịghị "arụ ọrụ" mgbe m gbadara isi m azụ. Mgbe ahụ enwere obere ahụ ike dị n'ebe ahụ, isi ya dịkwa mfe "ịda" kama ịbụ onye a na-achịkwa ya. Nke a bụ mgbe chiropractor na-eme nyocha a. Agbalịla ọzụzụ èbè na-enweghị ọtụtụ nsonaazụ.
M na mbụ na-arụsi ọrụ ike na ọtụtụ ọzụzụ / egwuregwu, ma taa, m nwere ike na-eje ije naanị. Ihe ọ bụla m ji aka m na-emegharị ahụ́ na-eme ka ahụ́ sie m ike ma na-akwara m ahụ́ nke ukwuu n’echi ya. Na mgbe ahụ, m laze a otutu ihe n'abalị ma ọ bụrụ na m na-arụsi ọrụ ike na ogwe aka m ụbọchị gara aga.
A na-ewere MRI nke olu n'enweghị ihe ọ bụla. Emeela ịwa ahụ mbụ maka mwepu n'etiti diski 2 na 3 na azụ azụ. Mgbe ahụ enwere m radieshon n'ụkwụ aka nri wee kwụsị ọrụ mmamịrị. Ọchịchọ ịdaba ụkwụ mgbe a wachara ya ahụ, mana ọ dị mma ugbu a. Enwere nsogbu na ubu mgbochi, nke mbụ aka nri, emesia aka ekpe.
Agbalịrịla chiropractor, physio, onye na-agwọ ọrịa ntuziaka, acupuncture, mgbatị ahụ na ọ dịghị ihe na-enyere aka ma ọ dịghị onye na-achọpụta ọrịa m. Naanị ihe nwere ike ime ka m nwekwuo ọganihu bụ chiropractor, mana ọ na-ejedebe ihe ọ na-enyere aka. Mee yoga n'ụlọ ma gbatịa ọtụtụ n'ime obi m / ubu, ogwe aka na azụ kwa ụbọchị, mana enweghị m ike ịme ihe ọ bụla ruo abalị na ụbọchị na-esote.
Ọ na-ada ka ị nwere ọrịa ụfọdụ mgbe ihe mberede èbè na-egbu mgbu. Ihe mberede ndị dị otú ahụ nwere ike ime ka ọtụtụ "adịghị ahụ anya" mebie akwara, mgbakwunye muscle na fascia - ihe mgbu adịghị adị mgbe niile ozugbo, ma ọ nwere ike ịpụta ebe ọ bụla site n'izu na-abịa ruo ọtụtụ afọ mgbe ihe mberede ahụ n'onwe ya gasịrị.
Nnwale nke chiropractor mere ka a na-akpọ ule Jull - nke a bụ ule na-enyocha ike nke olu dị omimi nke na-emegharị olu (DNF olu olu), ndị a nwere ike ịzụ ọzọ site na mmega olu kpọmkwem - ị gbalịrị nke ọ bụla n'ime ihe ndị a? Ọ bụrụ na ọ bụghị, a na-atụ aro ya nke ukwuu maka ịgbatị olu. Ọzụzụ èbè ga-enwe ike inyere gị aka na ubu na mgbu obi, ma m ga-ma eleghị anya na mbụ nwere ike ikwu na ị na-eji ìhè knitting omume dị ka ihe mgbakwunye kwa ụbọchị iji rụọ ọrụ niile mọzụlụ na ubu na ubu agụba mpaghara - ndị a ga-ahụ olileanya na-arụ ọrụ maka. ogwe aka gị - o yikarịrị ka enwere arụ ọrụ n'akụkụ ala nke olu na n'elu agụba ubu nke na-enye gị ọtụtụ mgbu n'ubu.
Ọ dị mma ịnụ na ị nwere ike nweta nkwalite ụfọdụ site n'aka chiropractor, ma ọ dị mwute ikwu na ọ bụ n'ihi enweghị nkwụghachi ụgwọ, a ga-enwe nnukwu ego, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere nkwarụ. Mana anyị na-akwado ka ị gaa na chiropractor mgbe ịchọrọ ya. Ọ dị oke mma na ị gbatịa ma na-arụsi ọrụ ike dịka i nwere ike - nke a na-egbochi mmebi.
Ị na-eji ihe ọ bụla ọzọ nke onwe ma ọ bụ ihe ndị yiri ya - dịka ọmụmaatụ. igwe na-afụ ụfụ? A nwalela gị ka ịhụ ma ị nwere obere vitamin D, vitamin B6 ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na nyocha ọbara?
Ndewo, daalụ nke ukwuu maka azịza! M ga-ajụ chiropractor maka mmemme mkpuchi ọkụ maka mmerụ ahụ whiplash, anwalebeghị m na mbụ. M na-eme mgbatị ahụ abụọ iji mee ka akụkụ elu, nke dị n'ime azụ rụọ ọrụ, mana enwere m ike ịmekwu nke na-eche ozugbo na whiplash.
Ee, ọ dị oke ọnụ na chiropractor, ọ dị mwute ikwu. Naanị ndị ọrụ ahụike ghọtara ihe nnukwu ọrụ ha na-arụ….
Enweghị m ihe mkpuchi ụfụfụ, ma emewo m mpịakọta nke tube (nke a na-ekpuchi akwa) nke m na-atụgharị ma gbatịa elu azụ, yana ịgbatị "nkịtị" ọ bụla na spine maka mma njem.
Ma ọ bụghị ya, enyochabeghị m nyocha ọbara ndị ị kwuru, mana m ga-arịọ dọkịta ka ọ lelee ya.
Ọ dị mma, ọ dị ka mmega ahụ dị mma maka gị - anyị na-akwado ka ị na-eme ihe ndị a mgbe niile. Ọ dị mma na ị mekwara nke ọma igwe na-afụ ụfụfụ nke gị, emela nke ọma! Ọ ga-amasị gị ma ọ bụrụ na anyị edee otu akụkọ gbasara otu esi ewusi akwara na akwara olu dị omimi nke dị mkpa n'olu olu? Anyị ga-agafe mkpịsị aka anyị na a ga-enwe nkwụghachi ụgwọ ka mma maka chiropractors n'afọ ndị na-abịa - nke a nwere ike ime ka ọrụ ha dịkwuo mfe maka ndị chọrọ ya. Ị dị ka onye nwere mkpali na ihe ịga nke ọma - anyị na-echetara gị na anyị ga-anọnyere gị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Chetakwa iso anyị na Facebook, Turte, ma ọ bụrụ na ị debanyere aha ebe ahụ. Nwee ọmarịcha mgbede!
M ga-enwe mmasị na otu isiokwu na-ewusi akwara ike mgbe mmerụ ahụ whiplash gasịrị. Achọla m ma gụọ ya n'ịntanetị, mana ọ na-esiri ike ikewapụ "ọnụ ọnụ na ọka wit" na ozi niile ị nwetara. Isi mkpịsị aka na-ekele gị nke ukwuu!
Mgbe ahụ, anyị na-amalite ide akụkọ banyere nke a, Turte. 🙂 Lelee azụ n'oge mgbede ma ị ga-ahụ na ebipụtala akụkọ ahụ.
Mmelite: Ugbu a mmega ahụ adịla njikere, Turte - ị ga-ahụ ha HER. Jisie ike!
Ya mere, incredibly ukwuu na isiokwu e mere ngwa ngwa! Daalụ nke ukwuu, ihe a masịrị m. 🙂
Ps, webụsaịtị ebe a na-emelite ma ị ga-atụfu ihe ị dere ma ọ bụrụ na ị dee ma ọ bụrụ na ị naghị agba ọsọ 🙂
Anna Møller-Hansen ekwu, sị:
Nnọọ. Nwere ajụjụ ọ ga-amasị m ịza.
Ana m anụ "mgbawa" mgbe m na-akwagharị isi ma ọ bụ olu m. Gịnị nwere ike ịbụ ihe kpatara nke a. Kedu onye m nwere ike ịnweta enyemaka? Ọ nwere ike ịdị gị ka mọzụlụ / akwara siri ike. Ọ dị n'ụdị dị mma.
Mgbawa n'olu, ubu na azụ nwere ike igosi adịghị arụ ọrụ na mọzụlụ na / ma ọ bụ nkwonkwo dị nso. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ nkwonkwo dị nso na-aghọ hypermobile wee si otú ahụ cavitates ("na-agbaji") na mmegharị n'ihi enweghị mmegharị na nkwonkwo dị nso na akwara siri ike. Ọ nwere ike ọ dị mma iji obere ịdọ aka ná ntị ahụ kpọrọ ihe tupu ọ ghọọ nnukwu nsogbu ma emechaa. Onye na-ahụ maka chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka (onye na-agwọ ma mọzụlụ na nkwonkwo - ọ bụghị naanị nkwonkwo) ga-enwe ike inyere gị aka na nyocha ọrụ dị otú ahụ ma kwuo ihe ị ga-eme ọzọ. Anyị na-akwado ọzụzụ akwara olu dị omimi na rotator cuff gbakwunyere ịgbatị olu na azụ azụ azụ.
Nwee ọmarịcha mgbede!
Tussa ekwu, sị:
Nnọọ. Enwere m fibromyalgia na Artosis. Na-emega ahụ mgbe niile na physiotherapist, ọ na-aga nke ọma. Eji m LDN mee ihe afọ abụọ, ma ọ tụfuru mmetụta ya, ya mere m kwụsịrị ọdịda ikpeazụ. Ọ na-aga…. Nsogbu kachasị m bụ ahụ mgbu nke ukwuu karịsịa n'apata ụkwụ na n'ụzọ niile ruo na ukwu mgbe ụfọdụ. Ọ na-ewute nke ukwuu na m na-eti mkpu, di m na-eburu Natron nke m na-aṅụ, ọ na-arụ ọrụ mgbe ihe dị ka 1 min ... ewereghị ihe ọzọ, mgbe ahụ afọ na-ada. Ọ nwere onye nwere ndụmọdụ ọ bụla?
Ọkpụkpụ ụkwụ nwere ike ịbụ n'ihi mgbasa ọbara na-adịghị mma, akpịrị ịkpọ nkụ ma ọ bụ ụkọ nri. Ụfọdụ n'ime ụkọ ndị a kacha mara amara bụ thiamine (vitamin B1), vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, ụkọ ígwè, magnesium, calcium ma ọ bụ potassium.
Ọ nwere nke ọ bụla n'ime ihe ndị a ị nwere ike were dị ka mgbakwunye - ikekwe nwaa multivitamin? Ị nwara ịnwale ọbara ka ị wee hụ erughị eru ị nwere?
Heidi ekwu, sị:
Ndewo, na-enye nsogbu maka azụ ruo ọtụtụ afọ, ọ bụ maka ime ka nkwonkwo abụọ dị ala sie ike, ọ nwere ihe ọ bụla m nwere ike ime iji kpochapụ nke a?
Nyere na ọrịa gị na-ada ụda nke ukwuu, anyị kwenyere na ọzụzụ na ọgwụgwọ dị ukwuu ga-achọrọ iji zere ịwa ahụ azụ. N'ihi nnukwu ihe egwu dị, a ga-eji ịwa ahụ mee ihe dịka ebe ikpeazụ. GP kpọgara gị na physiotherapy ọha?
Sarah ekwu, sị:
Enwere m spondylitis ankylosing na fibromyalgia. Ịgba mgba nke ukwuu na mọzụlụ gbadaa azụ n'akụkụ aka ekpe ma na-eme ya ihe karịrị otu afọ. Ọ dị ka a ga-asị na ha na-agba ọkụ ma ọ bụ na-agbatị ma ọ bụrụ na mmadụ nwaa imetụ ha aka, m na-agbaji. Na-ehi ụra nkezi nke 3-4 ụbọchị nọ ọdụ n'ihe ndina n'ihi na enweghị m ike ịgha ụgha n'ihe ndina dị ka ọ na-adị m ka enweghị m ike iku ume. Na-alụ ọgụ na ya na-adọka na mọzụlụ dị n'azụ azụ gburugburu nkwonkwo ice. Nke a ọ bụ ihe nwere ike idozi?
Nke a dị ka nsogbu nke ga-achọ ọgwụgwọ dị ukwuu na ọzụzụ nhazi - nke a ga-achọ ọtụtụ mgbalị na ume nke onwe, nke nwere ike isi ike ịkwali onwe gị. Akpọgara gị onye na-ahụ maka ahụike ahụike ọha maka ọrịa gị? Site na rheumatism amara, ị ga-enweta ọtụtụ n'ime ọgwụgwọ dị otú ahụ kpuchie. Site na ọrịa ogbu na nkwonkwo, nkwonkwo IS nwere ike kpasuo oke iwe ma na-emetụta ya, ya mere ọ nwere ike ịbụ nkwonkwo ị maara ebe ahụ.
Ndewo, ee, amalitela m ịgakwuru onye na-ahụ maka ahụike physiotherapist, mana ruo ugbu a ọ naghị enyere m aka nsogbu azụ. O nyere aka ruo oge ụfọdụ maka ọrịa na nkwonkwo ice, ma ugbu a, anọwo m n'oge ọjọọ ruo ogologo oge. Ọ nwere ọgwụgwọ ọ bụla ọzọ nwere ike inye aka na mgbakwunye na physiotherapy?
Onye na-ahụ maka ahụike ahụike kwesịrị iji ọtụtụ ụzọ ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na usoro akwara ọ na-eji anaghị arụ ọrụ. Kedu ụdị ọgwụgwọ anwalela ugbu a? Kedu usoro ọgwụgwọ ị chere nwere mmetụta na nsogbu azụ gị?
Enwere ụzọ ndị ọzọ, mana ha na-enwekwa ego dị elu - dị ka, dịka ọmụmaatụ, chiropractor zuru oke nke na-agwọ ma mọzụlụ na nkwonkwo. O nwekwara ike ịbụ na ọgwụgwọ agịga nwere ike bụrụ ụzọ ọgwụgwọ dị mma maka gị. Anyị ga-eburu n'uche na ankylosing spondylitis (nke a na-akpọbu ankylosing spondylitis) bụ nchọpụta na-aga n'ihu. Ya mere ọ dị mkpa ka ị tinye mkpụrụ obi gị n'ezie na ọzụzụ ahụ ma mee ihe ị nwere ike ime iji kwụsị mmepe ahụ.
Kedu mgbe e mere foto nke gosiri na ị nwere AS / Bekterevs? Ọ bụ ogologo oge gara aga? Ọ bụrụ otu a, esere foto na-esochi?
izu ekwu, sị:
Anọ m na-enwe ihe mgbu kemgbe Oct.15, malitere na igbu mgbu nkwojiaka / aka na ubu. Mmetụta dị mma nke paracetamol na ibux, mana nke nta nke nta, mmetụta ahụ na-ebelata. Malite na Tramadol na December, na-enwe mmetụta dị mma, ma na Jenụwarị mmetụta ya belatara. Na mgbakwunye, ihe mgbu gbanwere agwa. Enwetara oke mgbu n'akụkụ aka niile (site na Jenụwarị). Dọkịta ahụ na-ezo aka na MRI nke nkwojiaka, nke gosipụtara mgbanwe mmebi gburugburu isi mkpịsị aka, na nnukwu edema gburugburu mkpịsị aka na mkpịsị aka, na mgbọrọgwụ mkpịsị aka. Ọ nọkwa na dọkịta na-ahụ maka ahụike na-ahụghị ihe ọ bụla, naanị na-ezo aka na MRI dị mma maka ọrịa rheumatic.
N'ihi nnukwu ihe mgbu, dọkịta ahụ chọrọ ịnwale ọgwụgwọ prednisolone, ma n'otu oge ahụ na-ezo aka na ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ọrịa rheumatology. Ngwọta Prednisolone nwere mmetụta dị ukwuu, na ihe dị ka otu izu enweghị m ihe mgbu ọ bụla otu ugboro. Ka prednisolone na-ebelata, mgbu ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-abawanye.
Enwetara oge n'ụlọ ọgwụ rheumatology outpatient 4-5 ụbọchị mgbe emechara ọgwụgwọ prednisolone, na nyocha nke ultrasound na ya gosiri na ọ dịghị mbufụt. Dọkịta ahụ zoro aka na ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ọrịa akwara ozi wee lelee "nke dị ugbu a" na irighiri akwara ma ọ bụ ihe ọ bụla. Onye na-ahụ maka akwara ozi nyochara ogwe aka abụọ ahụ, wee kwuo na akara ngosi ahụ dị n'ogo kwesịrị ekwesị na ogwe aka abụọ ahụ, mana ọ na-esiwanye ike na ogwe aka ukwu.
Ọ na-eche ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe rheumatic ebe ọ bụ na ihe mgbu na-abụkarị na nkwonkwo (ubu, nkwojiaka, mkpịsị aka, mkpịsị aka). Ọ na-adị ka ịgba bọọlụ n'ime sistemụ.
Nlele ọbara niile adịla njọ (rheumatic).
Site na dọkịta FMR - Ihe rheumatic
Site na Rheumatologist - Ihe gbasara akwara ozi
Site na Neurologist - Ihe rheumatic
Ka ọ dị ugbu a - Anọla na ezumike ọrịa maka ọnwa 4-5 ugbu a, gr. mgbe ụfọdụ oke mgbu.
Gịnị nwere ike ịbụ???
Kedu ka mgbu si malite? Ha bịara mgbe trauma, daa ma ọ bụ ihe ndị yiri ya? Ka hà ji nwayọọ nwayọọ bilie? Ndị na-egbu mgbu na-eme ihe dị ka teepu mkpuchi (ọ naghị edozi nsogbu ahụ, kama ọ na-ezobe ya) na mmetụta ha ga-ebelata ka oge na-aga, dịka imeju na enzymes na-adị irè karị n'ịkụda ha.
Ị nwekwara ihe mgbu na mgbanwe n'etiti olu na thoracic spain / kwupụta ubu? Ịgbawa na igbu mgbu n'ogwe aka nwere ike igosi na ị nwere prolapse ma ọ bụ ọrịa diski n'olu. Dọkịta ahụ kwesịrị ịtu aka na MRI nke spine cervical iji hụ ma ọ bụrụ na enwere mgbakasị megide mgbọrọgwụ akwara na mpaghara a. Nnwale nyocha eletriki dịkwa mma na ogwe aka a na-ajụ, ya mere o doro anya na ihe na-emetụ n'ahụ akwara. Anyị chọrọ ka ị gaa na GP rịọ MRI nke olu ka ị lelee maka ọrịa prolapse / diski ebe ahụ. Nke a bụ, ka emechara, nyocha "ọla edo" maka ọrịa ndị dị otú ahụ.
Anyị na-atụ aro na ihe mgbu gị bụ n'ihi cervical prolapse na nrụgide na mgbọrọgwụ akwara C6 ma ọ bụ C7 - na usoro ahụ ike nke a tụbara n'ime ya echefuola iji nyochaa ebe ihe kpatara ya ma tinye uche na mpaghara ebe mgbaàmà ahụ dị. .
Sonush ekwu, sị:
Were MRI olu n'olu na apr. Enweghị prolapse. MRI nke nkwojiaka na aka ewepụtara na February na-egosi mgbanwe mmebi (osteoarthritis yiri).
Enwere m mgbada olu ugboro abụọ gara aga, yana n'etiti C6 na C7. Ihe mgbu ndị a siri ike mana ha dị iche. Kpọọ maka prolapse sep-14
Ihe mgbu malitere na October bụ naanị na nkwojiaka na aka na ubu (njikọ). Mgbe ahụ, ha nọ na-agba ara ozugbo. Enweghị ike iburu ihe ọ bụla n'aka ahụ, n'ihi na mgbe ahụ, ọ na-amasị ya ịkụnye na nkwojiaka. Ebe dị n'akụkụ nkwojiaka ahụ bịara fụrụ ntakịrị fụrụ akpụ na agba na-acha anụnụ anụnụ.
Radiation si n'ubu ruo n'ọnụ aka bịara na Jenụwarị. Mgbe ahụ, ọ malitere inwekwu ihe mgbawa na ogwe aka dum. Mgbe ahụ, amalitere m iji oxynorm, ebe ọ bụ na paracetamol, ibux, tramadol anaghịzi arụ ọrụ. MRI nkwojiaka na feb
Prednisolone eji na February, rheumatic outpatient ụlọ ọgwụ na March. Ya mere, ọ dịghị ihe ọ bụla n'agbanyeghị ezigbo MRI. Prednisolone nwere mmetụta dị mma na mgbu. Ọgwụgwọ ọrụ ebube
Ihe mgbu ahụ gbanwere àgwà ọzọ. Mma ntọn̄ọ ndikop ubiak ke ofụri idem mi. Mmetụta akpụkpọ ahụ.
MRI cervical spine nyere iwu, ọ dịghị prolapse ọhụrụ, mana ọnya ochie mgbe a wachara ya ahụ. Oge awa na onye na-ahụ maka akwara ozi, enyocha ya na ụgwọ eletriki, azịza nkịtị, mana mgbama adịghị ike. Ihe o chere na ọ bụ ogwe aka a na-ekwu kpatara ya fụrụ ntakịrị. Ma ọ bụghị ya, ihe niile dị mma. Nyocha akwara - adịghị mma, ule spurlings - adịghị mma.
MRI ọhụrụ, nke ubu oge a, were izu gara aga, amabeghị m azịza ya.
Onwe m, ejiri m bọtịnụ na nsogbu rheumatic. N'ihi na: prednisolone na-arụ ọrụ nke ọma (na-egosi na mgbu ahụ bụ n'ihi mbufụt n'anya m), enwere m otu awa 3-4 ụbọchị mgbe prednisolone jiri ya mee ihe, ọkụ nke nwere ike ịbụ ebe ahụ agabigala nyocha. Na ịghara ichefu azịza MRI dị mma.
Ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ gara aga, ezoro m nkwojiaka m n'ime igbe drawer dị na kichin. N'ime sekọnd, enwere m mgbu na fụrụ akpụ na ọbara ọbara. Ezobela ọtụtụ ihe na ndụ m, n'emeghị ka ọ dị mma na sekọnd. Na-egosi m na enwere mbufụt na-aga n'okpuru.
Ihe mgbu radieshon na ogwe aka na ahụ mgbu adịghị akpata mmerụ ahụ, n'anya m, ha nọ ebe ahụ naanị n'ihi na n'ime ọnwa 8, enwetaghị m ọgwụgwọ maka isi nsogbu, naanị maka mgbu.
Nnọọ. Ị nwere echiche ọzọ / ọzọ. Ka na-egbu mgbu.
Naanị ihe ọhụrụ bụ na m malitere na Chiropractor na ọ na-arụ ọrụ na ahụ mgbu. Obere mgbu ahụ. Obere mmetụta anụ ahụ.
Mana ihe dị ịtụnanya bụ na nkwojiaka na mgbu ubu na-apụtakarị. Nke siri ike karị.
Ndewo Sonush, lee, ị ga-enwe ndidi. Ọ bụghị mgbe niile ka enwere "ndozi ngwa ngwa" maka nsogbu ahụ - ihe ọ na-adịghị ka ọ na-eme n'ọnọdụ gị.
Anyị nwere ike ịkwado naanị ka ị nọgide na-emega ahụ, nweta ọgwụgwọ anụ ahụ ma nwee olileanya na nsogbu ahụ na ihe kpatara ya ga-eji nwayọọ nwayọọ gwọọ ya.
Eleghị anya anyị kwenyere na mmetụta anụ ahụ gị bụ n'ihi ojiji cortisone (Prednisolone bụ ọgwụ cortisone). Ị nwere ike ịgụ gbasara mmetụta ndị dị na katalọgụ nkịtị:
Ọ bụ i.a. 1% ohere (1 n'ime 100) ị ga-enweta mgbaàmà / ọrịa akpụkpọ ahụ. Ihe ọzọ bụ 1% ohere nke muscle atrophy / muscle ọnwụ - nke n'aka nke ya nwere ike ịkpata mgbu na ahụ. Ya mere ee, n'agbanyeghị na ọ na-arụ ọrụ ebube na-efe efe na mbufụt, ọ dịghị ọrụ ebube ọgwụgwọ na-enweghị mmetụta - ọbụna Roses nwere ogwu. Enwere onwe gị ịgụ site na njikọ dị n'elu wee gwa anyị nke n'ime mmetụta ndị a ị nwere ike nweta.
Ị nwekwara ike iji saịtị interaksjoner.no ịhụ ma ị na-aṅụ ọgwụ ọ bụla na-ekwesịghị ịgwakọta.
Merethe Furuseth Rammen ekwu, sị:
Hey ndewo. Otu nwanyị dị afọ 55 na-arụ ọrụ oge niile na-agbasi mbọ ike na ụkwụ aka ekpe ya, site n'úkwù ya ruo n'ụkwụ ya. Ịgakwuru dọkịta ugboro ole na ole, ma ọ chọpụtaghị ihe ọ bụla. Ihe mgbu ahụ dị ntakịrị na-agbanwe, mgbe ụfọdụ enwere m mgbu na hip na n'èzí apata ụkwụ, na oge ndị ọzọ na ụkwụ na n'èzí nke ụkwụ n'akụkụ aka ekpe . Mgbe ụfọdụ ọ na-egbu mgbu na-eje ije, na-agbatị na ọkụ na ụkwụ. Na-enwe ntakịrị nkụda mmụọ site n'ịga otu ahụ ma ghara ịchọpụta ihe ọ bụla. Daalụ Merethe?
Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara mgbu ị na-akọwa, mana ọtụtụ mgbe ọ bụ ngwakọta nke nsogbu na mọzụlụ, irighiri akwara na nkwonkwo na-enye foto mgbu n'ozuzu ya. Anyị na-akwado ka ị nweta nyocha site n'aka onye chiropractor maara nke ọma na akwara na nkwonkwo - ọ pụkwara ịbụ na a na-ezigara gị MRI nke azụ azụ iji nyochaa ma enwere nrụgide na mgbọrọgwụ akwara ọ bụla na mpaghara ahụ.
Ọ bụkwa ikpe na-arụ ọrụ na-adịghị mma na nkwonkwo pelvic / lumbar spain na mgbagwoju anya muscle na hip na glutes nwere ike inye ihe ndabere maka ihe a na-akpọ. ụgha sciatica. Nke a bụ ọnọdụ ebe akwara na nkwonkwo na-adịghị arụ ọrụ 'na-akpasu' akwara sciatic nke na-agafe ebe oche - nke na-ebute mgbu ụkwụ na mgbaàmà dị iche iche nke akwara ozi, na-enwekarị mmetụta na ọ na-ere ọkụ ma ọ bụ na-agbatị na mpaghara ahụ. Anyị na-akwado na mgbakwunye na ịchọ ọkachamara chiropractor (anyị nwere ike inye ya nkwanye ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa) gbalịa usoro ndị a na ị na-etinyekwa uche dị elu na ịgbatị ụkwụ gị.
Grethe Skogheim ekwu, sị:
N'ihi na 5 afọ m na-eje ije na mgbu na ubu ogwe aka mkpịsị aka aka ekpe n'akụkụ. Enweghị enyemaka iji nweta. Ọ ga-agafe. Enwere gout fever mgbe ọ dị afọ 15. Lymph ahụ na-egbukwa mgbu. Nwee ọrịa celiac.
Ebe a nwere ike anyị chọrọ ozi ndị ọzọ ka anyị nwee ike inyere gị aka. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike dee ntakịrị karịa gbasara ọrịa na mgbu gị.
1) Kedu ihe ị chere bụ ihe kpatara mgbu ahụ ji malite afọ 5 gara aga?
2) Kedu ihe na-eme ka ọnọdụ ahụ dịkwuo mma na ihe na-eme ka ọ dịkwuo njọ?
3) Ị maara nsogbu lymphatic? Ị nwere ọzịza n'ihi lymph?
4) Emeela nyocha onyonyo diagnostic nke ọnọdụ gị? Ọmụmaatụ. MRI nke olu?
5) Kedu ihe ị chọrọ enyemaka? Ndụmọdụ? Atụmatụ? Emega ahụ?
Na-ele anya inyere gị aka n'ihu.
Adara m n'ubu m afọ 10-12 gara aga. Bilitere afọ 5 gara aga akil2. Mgbe ahụ enwere m ihe mgbu n'isi, olu, ubu, ikpere aka elu, ogwe aka, nkwojiaka na mkpịsị aka mpụta atọ. Anọla na chiropractor, physiotherapist, nwere nrụgide nrụgide, wdg. echere m na enwere mbufụt na akwara ma ọ bụ ụkwụ. Enweghị mgbu mgbe m na-ehi ụra ma ọ bụ zuru ike. Imetụ aka na-eme ka ọnọdụ ahụ ka njọ. Ọ dị afọ 3 ugbu a na enwebeghị mgbu mbụ.
Kedu ihe ị pụtara site na ọrụ 'akil2'?
Anọ m na chiropractor ụbọchị ole na ole gara aga wee chọpụta na sciatica na ụkwụ abụọ + merụrụ ahụ n'akụkụ aka ekpe. Enwekwara m tendonitis na ogwe aka abụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ, m ga-amalite na ọgwụgwọ laser maka nke a na ụkwụ m n'ime izu ole na ole. M na mbụ na-arụsi ọrụ ike ma na-azụ mgbe nile bodyweight ike ọzụzụ na yoga, ma ugbu a, m na-adịghị arụ ọrụ maka 3-4 izu n'ihi mmerụ na ụkwụ m na nke a na-enwe mmetụta ọjọọ ma anụ ahụ na n'uche. A gwara m chiropractor ka m ghara ime ihu n'ihu (gbatịa akwara apata ụkwụ n'azụ) ma ọ bụ squats, ihe na-egbu egbu na mmega ahụ. O kwuru na m nwere ike ịga ije (ọ bụ ezie na nke a nwere ike imerụ ahụ), igwe kwụ otu ebe ma mee ọzụzụ ike ọkụ. M na-eche: Kedu ihe omume (ọzụzụ ike ọkụ) m nwere ike ime na sciatica na mmerụ ahụ merụrụ ahụ, enwere m ike ịzụ anụ ahụ dị ala ma ọlị? Agbalịrị m ịchọpụta ihe m nwere ike ime, mana enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla na ịntanetị. Enwere m ike ịzụ ahụ m elu, mana enwere m tendinitis na ogwe aka m na enweghị ike ịbanye nke ukwuu n'ihi nke a. M na-agụ online na ọ bụrụ na ị na-agaghị efunahụ ike / agagharị / ogologo na hoarding bụrụ na nke mmerụ, mgbe ahụ ọ dị mkpa ime pụrụ iche omume pụtara ngwa ngwa mgbe nnukwu na-adọ gafere (Nordic hoarding ka ihe atụ). A ka nọ m n'ahụhụ, ọ dịla ihe dị ka otu ọnwa ka m merụrụ ahụ m n'apata ụkwụ - na dịka m kwuru, m ga-amalite ọgwụgwọ laser n'ime izu ole na ole. M ga-ahapụ ya ruo mgbe m ga-amalite ọgwụgwọ?
Daalụ n'ọdịnihu 🙂
Ihe mere chiropractor ji gwa gị ka ị zere mgbatị mgbatị ahụ siri ike na-agbagọ n'ihu bụ na ọ na-eme ka nrụgide dị n'ime ime ime ihe ike megide diski intervertebral (nke nwere ike imerụ ahụ n'ikpeazụ, nke a bụ otu n'ime ihe kpatara ihe a na-akpọ ndị agha nọ ọdụ. -elu bụ kpamkpam nke oge a ọzụzụ mmemme) - nke a bụ ndammana nnọọ adịghị mma mgbe ị na-ewe iwe megide sciatic akwara. Otú ọ dị, ụzọ ọzọ nke ịgbatị hamstring na-enweghị oke mgbanwe na azụ ka a ka ga-emerịrị - dabere na ogo mmebi.
Ị nwere ike ime mgbatị ahụ na bọọlụ ọgwụgwọ ma ọ bụ ihe omume ndị a ya - ha na-etolite mtp ndị nwere sciatica / sciatica. Anyị na-akwadokwa ka ị nwaa usoro ndị a.
Ya mere ee, ị nwere ike imega ahụ, ma ị kwesịrị ịzenarị mgbanwe dị ukwuu ma zere mmega ahụ na-enye nrụgide afọ dị elu.
Kedu ihe kpatara ị ga-eji chere ogologo oge tupu ịmalite ọgwụgwọ laser? Enwere ohere dị elu na nkwakọba ahụ ga-agwọ onwe ya n'ime izu ndị a - a ga-eji laser mee ihe ngwa ngwa o kwere omume mgbe mmerụ ahụ gasịrị maka mmetụta kacha mma.
Ọ dị m ka m ga-enweta bọọlụ ọzụzụ dịka nke a. Ọ bụ azụ azụ (azụ, yoga) ihe m ga-ezere na sciatica n'uche? Ekwesịrị m ịzenarị squats, mana enwere m ike iji mmerụ ahụ mee dịka ọmụmaatụ. mmega ahụ maka butt, ma ọ bụ na ọ na-ewe ihe dị ukwuu na nkwakọba?:
Mgbakwunye hoarding ọzọ na-enweghị oke mgbanwe na azụ - enwere ike ịnwe ihe dị n'okpuru ebe a? Enwere m m mgbanwe n'ezie, enwere ike ịgbada ụkwụ m n'ebe dị anya n'ihu m, mana ugbu a, ụkwụ na-akwụsị mgbe ọ kwụ ọtọ, ma ọ bụrụ na m buru ya karịa nke a, enwere m mgbu:
M na-atụ egwu ịnweta uru ahụ dị mkpụmkpụ na ịkwụsị ịdị nro yana ike. Ezere m ịgbatị ma na-azụ ụkwụ m kpamkpam n'ihi na achọghị m ime ka mmerụ ahụ dịkwuo njọ / kpasuo ahụ ike (agụọla na hoarding nwere ike ịgbawa ọzọ), ma ọ bụrụ na mgbatị ahụ dị n'elu dị mma ịrụ, a ga-eme ya kpamkpam n'enweghị mgbu. ? Ọ bụ ezie na ọ dịla oge kemgbe mmerụ ahụ nke ịkpakọba ihe mere, ana m enwekarị mgbu n'ebughị ụzọ kpalite ya. Ị ga-akwado mmega ahụ na-akpa ike nke Nordic iji wusie ya ike ma zere mfu ike?
Onye na-agwọ ọrịa laser anọghị mgbe m nọ n'ebe ahụ, ọ na-esikwa ike ma na-ewe ogologo oge iji ruo na site na saịtị ọgwụgwọ ọnụ gbakwunyere m na-amụ ma na-ebi n'akụkụ ọzọ nke mba ahụ- ihe ndị a niile pụtara na ohere mbụ. n'ihi na ọgwụgwọ bụ mmalite July. Ọ dị mwute ichere ogologo oge, n'agbanyeghị na ọ dị oke mkpa na m ga-akawanye mma ma nwee ike isonye na-emekarị na ndụ kwa ụbọchị.
Daalụ maka azịza
Ndewo ọzọ, Marie,
Ana m arụ ọrụ maka gị akụkọ nwere mmega ahụ akọwapụtara nke ga-abara gị uru ugbu a. Ekwesịrị ibipụta ya n'ime ụbọchị 2-3. Nkwụghachi azụ, ma na-enweghị mgbu, enwere ike ịrụ ọrụ maka azụ. Ihe kachasị mkpa bụ na ị na-aga n'ihu n'ụzọ dị nwayọọ n'ihe gbasara ọganihu na mmepe. Ihe kacha njọ ị nwere ike ime bụ ịkwụsị kpamkpam - akwara chọrọ ọrụ na mmegharị ahụ iji nwee ike ịgwọ onwe ha. Na-echetakwa na ahụ chọrọ mgbakwunye vitamin C maka ịrụzi akwara.
Ọ bụ ezie na mmadụ ekwesịghị inwe mmetụta nke ukwuu site na mmega ahụ, ya mere ọ dị mkpa ịmalite site na mmega ahụ ụfọdụ na-ewusi akwara ndị ahụ ike nwayọọ nwayọọ, ma nke na-adịghị ebute mmerụ ahụ buru ibu. Ọ bụrụ na izitere anyị PM na Facebook mgbe ahụ anyị nwere ike ịchọta gị onye na-agwọ ọrịa / therapist akwadoro.
Anita Larsen ekwu, sị:
Ndewo? Ọ ga-amasị gị iziga mmega ahụ megide sciatica. Nnukwu mmega ahụ m ga-enye di m!
Mgbe ahụ, anyị na-eji obiọma na-arịọ gị ka ị nwee mmasị na ibe anyị ma kesaa ya na ndị enyi - mgbe ahụ anyị chọrọ email gị iji zipu ha. 🙂
Elisa ekwu, sị:
Nnọọ. My dọkịta kwuru ụnyaahụ na m nwetara crystal na-arịa ọrịa, ọ bịara nnọọ acutely na m a obere mma taa, ma nwere a akpịrị / isiike olu. Enwere m mucositis abụọ n'ubu m n'ihe na-erughị otu afọ. Mgbe m nwere mucositis nke mbụ, mwakpo migraine malitere. Ma oge a ka m nwetara ọrịa kristal. Ọ nwere njikọ ọ bụla n'etiti mucositis, migraines na kristal melanoma? Gịnị nwere ike ịbụ ihe kpatara ya? Ọ nwere ihe ọ bụla m nwere ike ime ka m ghara ịdị na-enwe ihe mgbu na mgbe ụfọdụ nnukwu ihe mgbu, na ọrịa ndị ahụ na-abịaghachi? Daalụ Elisa.
Ndị nwere migraine na-enwe mmụba dị elu nke kristal melanoma dịka nyocha. Anyị na-akwado ka ị gụọ akụkọ anyị gbasara ọrịa kristal ma gụpụta gị n'ọrụ n'azụ nchoputa ahụ. Anyị ebipụtawokwa isiokwu ndị na-egosi ezigbo ndụmọdụ na usoro megide dizziness. Enwere onwe gị ịnwale ha.
Anyị na-akwado ka ị kpọtụrụ chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka maka ọgwụgwọ arụ ọrụ nke ọrịa kristal - n'ihi na nke a na-achọ naanị ọgwụgwọ 1-2 maka mgbake zuru oke - ụlọ ọgwụ gosipụtara.
Jisie ike; Elisa.
Markus ekwu, sị:
M na-alụ ọgụ na mgbu n'ime ime nke ọkpụkpụ olu aka ekpe m.
Ihe mgbu adịghị ebe ahụ mgbe niile. Ha na-apụta n'ọnọdụ ụfọdụ na mmegharị. Ihe mgbu ahụ kacha njọ mgbe m hiechara ụra nwa oge. Echere m na ọ bụ n'ihi na m na-edina mgbakasị ahụ na-ebuli ubu m elu, ogologo oge. Ọ na-aghọ ọnọdụ na-ezighị ezi maka ọkpụkpụ ọkpụkpụ na-akpata mgbu. M na-ebili ma kwụsie ike n'ubu m. Mgbe ahụ ọ na-afụ ụfụ. N'ime ụbọchị dum, ihe mgbu na-ebelata.
M na-enwetakwa mbelata ngagharị. Ntuli elu na ibuli aka ekpe na-enye mgbu na ọkpụkpụ olu, yana n'akụkụ oghere ubu. Agbalịrị m ụdị ọhụrụ nke push-elu ọnwa ole na ole gara aga. M na-eji ogwe aka m ekewa n'ubu, ma na-eme ka ikpere m nọrọ nso n'ahụ m. Mgbe izu ole na ole gachara, ihe mgbu na ọkpụkpụ ọkpụkpụ malitere. Echere m na nke a bụ ihe mere m ji enwe mgbu ugbu a, mana ka ọ dị njọ na ebe mgbu ahụ dị (anụ ahụ, na nkwonkwo n'onwe ya) Achọrọ m azịza ya.
Na mgbakwunye, ọkpụkpụ olu akwagharịwo mgbe mgbu ahụ malitere. Ọkpụkpụ olu aka nri m na-adị ma ọ dị ka ọ dị mma. Tụnyere aka nri m, ọkpụkpụ olu aka ekpe dị elu karịa. Ọ na-eguzoro kwụ ọtọ karia kehoraizin dị ka ọkpụkpụ aka nri m si ada. Nke a ọ̀ dị njọ? Ọ nwere ike ịdịru ogologo oge?
Kedu ihe nwere ike ịbụ ihe na-akpata mgbu na akụkụ dị n'ime nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ n'akụkụ obi? M na-enweta ọnya nrụgide gburugburu mpaghara a. Mgbe m pịa n'ime ime nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ, enwere m ụdị mgbu. Ọ na-egbu mgbu ma dị nro.
Kedu ihe m kwesịrị ime iji wepụ ihe mgbu a? Anọwo m na ahụ erughị ala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ. Enwere m olileanya na echebeghị m ogologo oge ka ọ dịrị ogologo oge.
Ụfọdụ na-ekwu n'ime akụkụ nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ mgbe ha pụtara n'akụkụ ubu na ndị ọzọ na-apụta n'ebe efere obi - dabere na mgbu ị na-ekwu na ọ dị ka ị nwere mgbochi nkwonkwo AC / mgbakasị ahụ, yana ibelata nkwụsi ike rotator cuff na. njikọ na ya ọzụzụ ị na-eme. Ya mere, anyị na-ekwu maka ahụghị ahụ na enweghị ike. Ihe ị ga-elekwasị anya kwesịrị ịbụ ọzụzụ nkwụsi ike nke rotator cuff + serratus anterior, na-agbatị akwara pectoralis, yana ịnweta enyemaka site n'aka chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka iji tọpụ ihe mgbochi nkwonkwo n'etiti eriri ubu na mgbanwe n'olu.
Ị ga-ahụ mmega ahụ dị mma maka eriri ubu gị ya.
Ụgbọ mmiri ekwu, sị:
Nnọọ. Achọpụtara ya na polyneuropathy. Na-achọ ibi ndụ na-arụsi ọrụ ike, ma ahụmahụ na-akawanye njọ nke mgbaàmà n'oge mgbatị ahụ (oke mgbu na ụkwụ n'elu ikpere na aka dum ruo nkwojiaka). Enwere ndụmọdụ dị mma?
N'ebe a, anyị ga-achọ ntakịrị nkọwa na ozi gbasara nsogbu gị tupu anyị enye gị ụfọdụ ndụmọdụ na ndụmọdụ. Ma omume ndị a megide mgbu akwara na ụkwụ nwere ike ịdị mma maka gị ọbụlagodi.
Inez ekwu, sị:
Nnọọ. Mgbe m nwesịrị epidural n'oge ọmụmụ, olu aka nri m na-ewute m nke ukwuu ugbu a na mgbe ahụ. Aksom ihe na-anọdụ ala na a agịga megide irighiri akwara ma ọ bụ akwara… Ọ Ome elu si n'ubu ka dị n'okpuru okpokoro isi… .. Ọ nwere ike ofu ma ọ bụ ihe ga-ebi?
N’ihi ya, daalụ nke ukwuu maka azịza ya, a pụrụ nnọọ ịgwa gị na ị maghị ihe ị ga-aza. Ugbu a abụrụla anyị dọkịta wee nweta enyemaka… ..
Ndo maka nzaghachi mbubreyo - nghọtahie maka onye kwesịrị ịzaghachi. Ị ga-enyocha nke a site na GP gị - ebe a ọ nwere ike ịbụ ajụjụ ị ga-ewere MRI iji nyochaa mmiri CSF na ma enweela mgbanwe nrụgide na ọkpụkpụ azụ azụ mgbe epidural e debere ebe ahụ.
O yikarịrị ka ọ ga-akawanye mma ka oge na-aga, ebe ọ bụ na a na-edochi mmiri azụ azụ mgbe niile, ma ọ nwere ike ịdịgide ruo oge ụfọdụ na-abịa.
Ndụmọdụ anyị bụ ka ị kpọtụrụ GP gị. Anyị na-achọ gị mma mgbake na chioma!
Sigrid ekwu, sị:
Ndewo, na-enye nsogbu n'olu na ubu mgbu. Na-eche na ọ bụ ihe a na-ahụkarị. Ọtụtụ akwara akwara n'olu na ubu. Amaghị onye ị ga-atụgharị, masseur ma ọ bụ chiropractor? Olu siri ike ma na-egbukepụ na ogwe aka kacha njọ. Na-arụsi ọrụ ike na mgbatị ahụ, nke na-eme nke ọma. Nke ka njọ ma ọ bụrụ na m na-eji ohiri isi n'abalị.
Anyị ga-akwado ka ị kpọtụrụ chiropractor nke ọha kwadoro nke bụ onye so na Norwegian Chiropractor Association na onye na-arụ ọrụ zuru oke - ya bụ na akwara na nkwonkwo, ihe ọtụtụ ndị chiropractors na-eme.
Ọ bụrụ na ị kpọtụrụ anyị na ibe Facebook anyị site na ozi nzuzo, anyị nwere ike ịnye gị ndụmọdụ maka onye na-agwọ ọrịa dị gị nso.
Aslaug Irene Espeland ekwu, sị:
Ndewo :-) Enwere m mmasị dị ukwuu gụọ gbasara ọgwụgwọ ọhụrụ maka ụkwụ na-adịghị ezu ike n'ihi na nke a na-ewute m nke ukwuu :-)
Na-etinye ego na ọgwụ kwa ọnwa ma ya mere ịchọrọ ọnụahịa maka ngwaahịa ọhụrụ a nke ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya ???
Anyị nwere ike inyere gị aka na nke ahụ, ị ​​maara.
Ị nwere ike ịgụtakwu banyere ngwaahịa ahụ na akụkọ anyị bipụtara ma ọ bụ na webụsaịtị ha - google 'RESTIFFIC' (nke ahụ bụ ihe a na-akpọ ngwaahịa ahụ). Ebe ọ bụ na egosila na ọ dị irè, ọnụahịa ahụ dị oke njọ (gburugburu 3000 krone m chere).
Gwa anyị ma ị hụghị ngwaahịa a.
Live ekwu, sị:
Ndewo, olee ụdị ọzụzụ a na-atụ aro na CMT? tumadi wakporo na ụkwụ. Na-aga na physiotherapist ma n'ebe ahụ ka m na-eme ọzụzụ nguzozi, nke dị mkpa ka m na-enwechaghị nguzozi. Ma olee ụdị mgbatị ahụ a na-atụ aro ya mgbe ọrịa a na-emetụta ya? ike, ntachi obi ka ọ bụ ihe ọzọ?
Ihe a maara bụ na ọrịa Charcot-Marie-Tooth na-anabata nke ọma na mmegharị ahụ na mmega ahụ, enwere ụfọdụ nghọtahie banyere ụdị mmega ahụ kachasị mma - ma a kwenyere na a ga-eme ya kwa ụbọchị na ọkachamma karịa ọtụtụ nnọkọ (ọzụzụ ike na nguzozi). ọzụzụ karịsịa) site n'ụbọchị.
Ị na-emega ahụ ọkụ ọtụtụ ugboro n'ụbọchị? Ee, ọ dị mma, ọ bụụrụ m ihe ọhụrụ. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na mgbu, ọ ga-adị mma mgbe ahụ, mgbe ahụ, ọ ga-amasị m ịzụ ọzụzụ kwa ụbọchị. Ị nwere ebe ọ bụla nke a na-ekwu? ọ gaara amasị m ịgụkwu gbasara ya :)
Ọzụzụ ike na nguzozi maka ndị okenye nwere neuropathy peripheral na nnukwu ihe ize ndụ nke ọdịda: ihe akaebe dị ugbu a na ihe ọ pụtara maka nyocha n'ọdịnihu.
Ihe nchoputa sitere na ihe omumu ndi ozo na-enye ezigbo ihe akaebe iji kwadoo iji ike na nguzozi nguzozi maka ndi toro eto n'ihe ize ndụ maka ọdịda, na nkowa ihe omuma nke mbu iji kwado ike na nguzozi nkuzi maka ndi mmadu nwere neuropathy peripheral.
Linda ekwu, sị:
Ndewo, enwere m mgbu na hip hip na bọọlụ hip nke na-agbadata apata ụkwụ mgbe ụfọdụ. Na-echekwa na mgbe m metụrụ ubu ụkwụ ọkpụkpụ aka, ọ na-ewute ya ma jwg pịa ebe ahụ ọ na-ewute ya ma na-agba ya ụta. Yana nsogbu na ikpere m mgbe m na-eje ije na dkogen downhill. Mgbu na ikiri ụkwụ nke abụọ n'ime ime ikiri ụkwụ nke na-abịa ma na-aga, mmetụta ahụ bụ na ọ na-agbatị n'ikiri ụkwụ. mma Linda
Ọ bụrụ na ị dị obiọma wee gaa na isiokwu gị ugbu a «apata ụkwụ» wee dejupụta ajụjụ gị n'ebe ahụ, anyị nwere ike inyere gị aka. threadi ikwu okwu a ebea aburula oke ibu (!) 🙂
Anyị na-akọwa na ka ị na-enyekwu ozi anyị, ọ na-adịrị anyị mfe ịnyere gị aka.
Nina Brekke ekwu, sị:
Nnọọ. Ịgba mgba nke ukwuu na mgbu na akwara / nkwonkwo. Ọ dị afọ 39, bụ Paramedic ma na-arụsi ọrụ ike. Ma mgba nke ukwuu n'ihi mgbu. Been to fys.med na Ullevål sh., Anatara cortisone, bụrụ onye na-ahụ maka ahụike physiotherapist, osteopath na-enweghị ọ na-akawanye mma. Kedu ihe m kwesịrị ịme? Nwere ụfọdụ osteoarthritis, wdg, meniscus na-emeghe n'otu ikpere, mepee hallux valgus na mgbagwoju anya, mepee otu nkwonkwo ụkwụ ugboro 3 na-enweghị ọganihu (mgbe ahụ dị ka nwata).
Ọ bụrụ na ị dị obiọma ma gaa na isiokwu gị ugbu a wee dejupụta ajụjụ gị n'ebe ahụ, mgbe ahụ anyị nwere ike inyere gị aka. threadi ikwu okwu a ebea aburula oke ibu (!) 🙂
N'ime ọnwa gara aga, ejirila m nke nta nke nta na-akawanye njọ n'okpuru bọọlụ ụkwụ na ụkwụ abụọ. Ihe mgbu na mbụ bụ naanị n'ụtụtụ na mgbe ọ nọdụrụ ala ruo nwa oge. Mgbe ahụ, o were nzọụkwụ ole na ole tupu m enwee ike ịga ije nke ọma. Ma ugbu a, m na-achọpụta ya ọtụtụ mgbe. Ihe mgbu dị na bọọlụ mkpịsị ụkwụ, nke na-adabaghị na fasciitis osisi (dabere na ihe m gụrụ). Mana ebe ọ bụ na mgbu ahụ kacha njọ n'ụtụtụ, ọ naghị adabara metatarsalgia. N'ụtụtụ, m na-enwekwa mmetụta ya n'okpuru ụkwụ, ebe n'ụbọchị ọ na-anọdụ naanị na bọọlụ ụkwụ. Ọ dịghị mgbe mgbu ikiri ụkwụ.
Enwere m ụkwụ dị larịị, yabụ enwere m insoles ruo ọtụtụ afọ. Agbakwunyere ụdị ọzọ tupu oge okpomọkụ n'ihi ọtụtụ nsogbu hip. Ebe ọ bụ na m nọ n'ụlọ na ezumike (nwa dị ọnwa 4), nsogbu dị na ụkwụ m abawanyela nke ukwuu site na ọrụ ụlọ ọrụ na-anọkarị. Ma m na-arụsi ọrụ ike mgbe niile, ma dị anya site na ibu ibu, ya mere echere m na ịmụ nwa kwesịrị ịnabata nke a. Ọ nwere ike ịdị njọ na akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ na-eme nke a? Ma ọ nwere ike ịbụ fasciitis osisi ọ bụrụgodị na enweghị m mgbu na ikiri ụkwụ?
Daalụ nke ukwuu maka ezigbo ndụmọdụ, ebe ọ bụ na ọ na-akụda mmụọ nke ukwuu na m gaghị enwe ike ịga ọtụtụ wheelbarrow dị ka m chọrọ.
Ebee na bọọlụ mkpịsị ụkwụ bụ ihe mgbu? More na ime ma ọ bụ n'èzí nke ụkwụ? Ọ na-ewute gị iguzo na mkpịsị ụkwụ gị ma ọ bụ ikiri ụkwụ? N'iburu n'uche na mgbu ahụ abawanyela mgbe ọkpụkpụ ọhụrụ ahụ gasịrị, ọ nwere ike ịba uru ịnwale nwa oge na-enweghị ihe ndị a. Akpụkpọ ụkwụ na-abụkarị ihe ngwọta dị ogologo oge maka ụkwụ ọnya, dịka ụkwụ na-adaberekarị na nkwado. Ọ bụ otu ihe ahụ na corset dị ala ma ọ bụ olu olu - ọ naghị arụ ọrụ ogologo oge n'ihi ụkọ anụ ahụ na arụ ọrụ.
A na-ahapụ ya ka ọ nwee ọtụtụ nyocha. Ọ nwere ike ịbụ ma metatarsalgia na plantar fasciitis. N'ihi ụfọdụ ihe na-adịghị mma, mgbu na-adịgide adịgide, anyị na-akwado ka ị nweta ntinye aka na MRI ka ị nwee ike ịkọwa usoro kachasị mma maka gị n'ihu.
Negin Heier ekwu, sị:
Ndewo, MRI achọpụtala tendonitis na nkwojiaka aka nri na ulnaris (nchoputa a kapịrị ọnụ: tendinopathy na-agafeghị oke dị ka extensor carpi na ụfọdụ mgbanwe edema gbara ya gburugburu, extensor nkịtị, flexor later and bones, triangular cartilage). Ihe kpatara ya: mgbagide ogologo aka na nkwojiaka site na ide ihe, ọrụ ụlọ, ibuli elu na ihe ndị ọzọ nwere ike imebi nkwojiaka. Abịara onye dọkịta na-ahụ maka ahụike nke kwuru na m nwere ike ịdepụta nkwojiaka m na teepu na-adịghị agbanwe agbanwe maka ọkara otu ọnwa na-atụ anya na ihe mgbu siri ike "na-ere ọkụ". Nke a ezuola / kwe omume ma ọlị? Kedu ọgwụgwọ ọzọ m nwere ike ịrịọ onye na-ahụ maka physiotherapist ka ọ nye m ma e wezụga ime mgbatị ahụ na mgbatị ahụ n'onwe m? jụkwa oyi na mmiri ice.
N'echiche nke onwe anyị, mgbata dị otú ahụ ga-eduga n'ịkwụsị muscle / impassivity na mpaghara, nke n'ikpeazụ nwere ike ime ka nsogbu ahụ ka njọ - anyị echeghị na ọ ga-adị irè karịsịa n'oge dị mkpirikpi. Anyị ga-akwado usoro ọgwụgwọ nrụgide nrụgide (ọgwụgwọ ọkọlọtọ ọla edo) nke ezubere maka mmebi akwara (tendinosis), ikekwe ọgwụgwọ Graston, ọgwụgwọ laser mgbochi mkpali, ọgwụgwọ agịga na / ma ọ bụ TENS / ọgwụgwọ ugbu a.
Nke ọ bụla n'ime ihe ndị a nwalere?
Sissel IB Eriksen ekwu, sị:
Ndewo, enwere m ọtụtụ nyocha. Mana m chọrọ ịjụ ihe m nwere ike ime iji melite olu / azụ na spinal stenosis. Emere na 2001-2004 mgbe ihe mberede okporo ụzọ gasịrị. Enweghị m ike ịzụ ọzụzụ n'ihi ME, mana na-eche echiche nke nlekọta ahụike chiropractor, osteopath ma ọ bụ masseur? M na-eme yoga ahụike. Ma ọ bụghị ya, ọtụtụ ịnọ ọdụ n'ihi mmerụ ahụ ike m ndị ọzọ.
Anyị ga-akwado mmega mgbanwe olu dị omimi (lee mmega ahụ HER), yana ọgwụgwọ sitere n'aka onye na-ahụ maka ahụike ọha nyere ikike (dika physiotherapist, chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka). Ọtụtụ ndị chiropractors na-eji ihe a na-akpọ ọgwụgwọ bench traction, nke a na-ewere dị ka ụdị ọgwụgwọ dị irè maka ọkpụkpụ azụ azụ na azụ azụ. Ọ dị mma ma ọ bụghị na ị na-eme yoga ahụike, nke a bụ ihe anyị na-akwado n'ezie dị ka ihe mgbakwunye onwe onye. Whiplash na osteoarthritis nwekwara ike ịdị irè n'ịgwọ ọkpụkpụ azụ ma ọ bụ nchịkọta site na chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka.
Ọ dị mkpa ka ị gaa na 'chiropractor nke oge a' - ya bụ onye na-elekwasị anya na ọgwụgwọ akwara na nkwonkwo.
Isi ọwụwa na dizziness ọ na-alụkwa gị?
Randi Odland ekwu, sị:
Nwere ọrịa strok na cerebellum n'akụkụ aka nri 5 afọ gara aga.
Ịgba mgba nke ukwuu na mgbu isi / olu / ubu na gafere ogwe aka.
Ọkara ihu adịghị agwụ agwụ. Metụ anya
Ihe niile dị n'akụkụ aka nri
Kedu beh ị kwadoro?
Anyị ga-akwado ọgwụgwọ ka gị onwe gị chere na ọ na-enye gị ahụ efe mgbaama (dịka ịhịa aka n'ahụ, physiotherapy ma ọ bụ chiropractic) yana mmega ahụ ahaziri ahazi. Ebee ka isi gị chere na isi ọwụwa kacha njọ? Ka ọ na-akwagharị?
Daalụ maka azịza gị! Ihe mgbu ahụ gbadoro ụkwụ n'okpuru bọọlụ mkpịsị ụkwụ, siri ike ikwu ma ọ na-abụkarị n'ime ma ọ bụ n'èzí ụkwụ. Ọ naghị ewute gị iguzo na mkpịsị ụkwụ gị ma ọ bụ ikiri ụkwụ gị. Ọ naghị ewutekwa m mgbe m na-agbalị ịpị n'okpuru ụkwụ ka m gbalịa ịchọta ebe ọnya. N'ụtụtụ, m na-ahụ ya nke ọma mgbe m dọtara mkpịsị ụkwụ mba 3 (nnukwu mkpịsị ụkwụ = mba 1) kwupụta nwa ehi. Mgbe ahụ ọ na-enwe mmetụta nke isi ike ma gbatịa nke ukwuu n'akụkụ ala ụkwụ.
Were ya dị mfe ma ghara iji naanị otu izu, yana na emela m ihe omume niile m chọtara online. Echere m na ọ nwetala ntakịrị mma, ebe ọ bụ na ọ naghị esiri ike kpamkpam na ọ gaghị ekwe omume ịga ije mgbe obere oge nọrọ ọdụ. Ma ọ bụghị nnọọ ọganihu m tụrụ anya ya, n'ihi na ọ ka na-egbochi m ịga ije.
Ị na-ede na m kwesịrị inwe MRI nke ụkwụ m. Ọ ga-ekwe omume ịchọpụta ihe nwere ike ịbụ na ultrasound? Ọ dị ntakịrị mfe ka onye na-ahụ maka ahụike na-eme ya.
Ndewo ọzọ, Eva,
Anyị ga-akwado MRI n'ọnọdụ gị - ọkacha mma na nyocha ụlọ ọgwụ site na chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka n'ọdịnihu; nke nwere ike zigara gị maka nyocha onyonyo. Ị nwela ihe mgbu ujo ma ọ bụ ihe yiri ya? Mgbe ị kwuru mkpịsị ụkwụ nke atọ, anyị na-eche ozugbo Nema Morton. Kedu mmega ahụ ị chere ga-abara gị uru? Ọ nwere ike inye anyị ntakịrị ozi gbasara ihe na-adịghị mma na ụkwụ gị.
Obere na-ejighị n'aka ihe ị pụtara site na mgbu ujo, mana ọ bụ ihe na-ere ọkụ n'okpuru mkpịsị ụkwụ. Ọ na-araparakwa n'okpuru ọbụ ụkwụ m niile mgbe m na-eme nzọụkwụ mbụ n'ụtụtụ.
Esetịla m ụkwụ m, steepụ ụkwụ m, were mkpịsị ụkwụ m were towel were dee mkpụrụ akwụkwọ n’ụkwụ m.
Chere n'onwe m na ọ nwere ike ọ bụghị neuroma Morton, ebe m chere na ọ bụ ihe ọhụrụ ị nweta ụkwụ abụọ n'otu oge?
Ị ziri ezi - ihe ọhụrụ (ma ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume) ịnweta neuroma Morton n'akụkụ abụọ. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-akwado ka e jiri nyocha MRI nyochaa nke a. Akpọbala gị ya ugbu a?
Jan Helge ekwu, sị:
Nnọọ. Na-eche ma ị nwere ike inye m azịza na ị nwere ike inyere m aka. Nwee mgbu n'azụ ikpere ikpere, na n'ikiri ụkwụ na ala / na n'akụkụ. Enweghị ike ịga ije. Gbalịrị ịga ụnyaahụ mana ọ merụrụ ahụ nke ukwuu. Emerụghị onwe m ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Ọ dị nnọọ na mberede mere. Jiri akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ m zụtara, na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ, wee nwee mgbu n'akụkụ aka ekpe. Amaghị ma ọ nwere ike ịbụ akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ ihe ọ nwere ike ịbụ. Onwere onye m nwere ike ime onwe m? Na-agbatị wdg? Ọ na-ewute m ma m nọdụkwa. Na-ewute m mgbe m pịa na mpaghara ikiri ụkwụ. Na-agbalị voltaren ude ụnyaahụ na taa ọnụ na mma ude, ma ihe mgbu ka dị. aghọtaghị ihe merenụ.
Ndewo Jan Helge,
Ọ dị ka mmerụ ahụ ikiri ụkwụ Achilles. Anyị na-akwado ka ị nweta nyocha nyocha nke ultrasound n'aka onye na-ahụ maka ọgwụgwọ nwere ikike ahụike ọha (chiropractor, physiotherapist, onye na-agwọ ọrịa ntuziaka). Achilles mmerụ ahụ nwere ike na-ezo aka na mgbu site na azụ nke ikpere ruo n'ókè ruo na mgbakwunye na ikiri ụkwụ - enwekwara ike inwe mmeghachi omume mkpali n'ihi nsogbu si na njem / akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ. Ị nwere ike ịwụda mmiri, zuru ike ebe ahụ (mee ka ụkwụ gị dị elu) ma jiri kinesio teepu na-akwado eriri Achilles - ọ bụrụ na enwere mmerụ ahụ, ọrụ akwara, ọgwụgwọ nrụgide ma ọ bụ ọgwụgwọ agịga na ụlọ ọgwụ nwere ike ịdị mma.
Ọ kacha njọ ma i bilie were ụkwụ gị zọọ ụkwụ? Enwere uhie / ọzịza n'azụ ikiri ụkwụ?
Camilla ekwu, sị:
Nnọọ. Achọpụtara m mbufụt nke ikpere ihe dị ka afọ 2 gara aga.
M na-aga na 4 dị iche iche dọkịta na-ahụghị ihe ọ bụla na MRI, ma ha efu efu n'ikpere maka mmiri mmiri. Egwuregwu ikpeazụ m nọ na-ekpochapụkwa ikpere mmiri, nke ahụ dị mma. Ha gbakwara cortisone. Ọ bụ mgbe ahụ ka ha chọpụtara na ọ bụ mbufụt. Enwebeghị ebe ahụ kemgbe. Ma, m ka na-agbasi mbọ ike imerụ m ahụ́. M na-agba ịnyịnya ụbọchị ole na ole n'izu. Mgbe m merụrụ ahụ ọ na-adị m ka ọ dị n'akụkụ ikpere ma ọ bụ n'okpuru patella. Ọ na-ewute m mgbe m na-arịgoro steepụ, mgbada ma ọ bụ ma ọ bụrụ na m nọdụrụ ala nwa oge. Ọ na-azakwa mgbe ụfọdụ, ma ọ bụghị nke ukwuu.
Naanị na-eche ma ọ nwere ihe m kwesịrị ịlele ọzọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọ bụla? Ha achọpụtaghị ihe mere e ji nwee mbufụt ma ọ bụ ebe mbufụt si bịa.
Trude Bjerved ekwu, sị:
agbaala mgba Fibromyalgia ruo ọtụtụ afọ, na-enwe ihe mgbu n'ime ahụ dum, na-enwekarị ọgbụgbọ ma nwee isi ọwụwa. Na adịghị onwe ike ike gwụrụ na ike gwụrụ mgbe niile. N'ịbụ onye na-enweghị ike tee otu iberibe achịcha mmanụ otu ugboro, enyi nwoke ahụ ga-eme ihe niile. Ga-eji oche nkwagharị mgbe m na-apụ n'ihi mgbu, kamakwa isi ọwụwa. Ebe ọ bụ na m na-enwekwa nsogbu anya ma nweekwa ụkwara ume ọkụ, enwere m ikike ịnweta ọgwụgwọ anụ ahụ, mgbe m chere ogologo oge, enwetara m ebe a na physiotherapy ebe a na Romsås n'oge opupu ihe ubi a, mana m kwụsịrị mgbe ọnwa 1 gachara mgbe ọ ga-aga n'ihu. ndepụta . Ugbu a nọ na ndetu echere na Ammerud, mana ndepụta echere dị ogologo. Emechara m ọgwụgwọ na chiropractor, ebe m nwere uru nkwarụ na enweghị m ike ị nweta ha. Ịga ụlọ ọgwụ rheumatism na Lillehammer, ma ọ bụghị ruo March 2017. Ya mere, achọrọ m enyemaka n'ezie.
Nke ahụ adaghị nke ọma. Ọ nweghị ihe enyemaka ma ọ bụ ụlọ ọgwụ mgbu dị gị nso? Ndị a na-enwekarị 'ọnụ ụlọ mberede' ole na ole - ihe nwere ike ịdị ka ịchọrọ. N'otu aka ahụ, GP gị kwesịrị iziga gị ebe ahụ. Ị mara ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa ike ọgwụgwụ na-adịghị ala ala / ME nchọpụta? Aghọtaghịkwa na onye physiotherapist 'chụpụrụ gị' - ọ dị ka enweghị ọrụ na enweghị nchebe na ọnọdụ ị nọ. N'iburu n'uche na ị garala ọgwụgwọ ebe ahụ, ọ gaghị abụ nsogbu na ị ga-alaghachi ngwa ngwa na gị. physiotherapist. Ma eleghị anya ị nwere ike ịkpọtụrụ onye na-ahụ maka physiotherapist echi?
Trude Bjerved. ekwu, sị:
Agwọbeghị m maka m, mana ọ ka njọ ka m gbachara ọgwụ mgbochi ezì. Opekempe, enyi m nwanyị achọpụtala ya, naanị m na-achọpụta na m na-akawanye njọ. Banyere physiotherapist, ọ dịghị ihe m nwere ike ime, ajụrụ m ma m nwere ike ịlọghachi ma emechaa, wee nweta azịza na ọ ga-ewe ọnwa 6 tupu m enwee ike nweta ebe ọzọ. Echere m na ọ na-aghọgbu ahụ ma na-aga Fysio maka ọnwa 1 wee kwụsị. A gwakwara m na ị na-aga Fysio naanị nwa oge, ọ bụghị ihe ị na-aga ogologo oge.
Mgbe ahụ anyị chere na a ga-enyocha gị maka ME na ọrịa ike ọgwụgwụ na-adịghị ala ala (CFS). Karịsịa ma ọ bụrụ na nke a bụ ihe na-akawanye njọ mgbe ọgwụ mgbochi ezì - dị ka a maara nke ọma, ọtụtụ narị ndị na-arịa ọrịa ME etinyela akwụkwọ maka nkwụghachi mgbe ọgwụ mgbochi ezì . Anyị na-akwado ka ịkpọtụrụ ndị otu Facebook "ME dị ka mmerụ ahụ n'oge mgbe ọgwụ mgbochi ezì gasịrị" wee gwa ha gbasara mgbaàmà gị na akara gị. Ha ga-enwe ike ịnye gị ụfọdụ ozi dị mma na nke dabara adaba.
Ị nwere ike ịgakwuru onye na-ahụ maka ahụike ọha na eze ma ọ bụrụhaala na ịchọrọ ya (ọnwa 1 dị mkpụmkpụ ma ị na-enweghi oge ime ihe ọ bụla n'oge ahụ) - ọ bụ physiotherapist n'onwe ya mere mkpebi ahụ. 'zipụ gị n'ahịrị'. Ọ dị ka ị ka chọrọ ọgwụgwọ physiotherapy iji rụọ ọrụ - yabụ ee, enwere ọtụtụ ndị na-aga na physiotherapist ọtụtụ (ụfọdụ ruo ugboro 60) kwa afọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa maka ya.
Lilly S ekwu, sị:
Site na afọ 18 na-ewute ya nke ukwuu ọrịa ọkpụkpụ na-enweghị nsogbu. Ugbu a, m lara ezumike nká ma ka na-eme nke a. Achọpụtara m na m nwere ụdị nsogbu a siri ike, ma nwee ọgwụ SIFROL depot mbadamba nke na-enyere aka ntakịrị na nsogbu ahụ, mana m na-enwekarị oge ọ naghị enyere aka ma ọlị na-arị elu hie ụra abalị ruo abalị. . Ugbu a, m na-amụba n’abalị otu ọnwa, na-ehikwa ụra ntakịrị ugbua, ma ọ dị ntakịrị. Na-enwe mmetụta karịa ike ọgwụgwụ.
M ga-ekwukwa na enwere m mgbu dị ukwuu na ụkwụ na azụ mgbe ihe a na-adọkpụ ehihie na abalị. Hụrụ ọhụrụ a ( ndetu onye ndezi: Ọgwụgwọ ọhụrụ maka ọrịa ụkwụ na-enweghị ezumike) onye a ga-ejikọta na ụkwụ ma na-eche ma ọ ga-enyere m aka? Ị nwere ezigbo nzaghachi na nke a?
Enwere enyemaka ndị ọzọ ma ọ bụ ụdị enyemaka ọ bụla maka nke a? Na-agba m mgba kpamkpam.
Daalụ maka azịza.
Ee, a kpọtụrụ m aha, mana amataghị mgbe klas ga-adị. Eji m n'aka nke nta nke nta na ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ na-akpata nsogbu ahụ. Ọ bụ ukwu ala, ma nwee insoles kemgbe obere ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Enwetara m ihe ndị a na Oslo Orthopedic Technology site n'itinye aka na igbe ụfụfụ. Ọnwa ole na ole gara aga enwere m akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ nke onye na-ahụ maka ahụike physiotherapist m mere. Nke a na-akpọ "Supersole". Ndị a welitere njide m nke ukwuu, wee gbatịkwuo ikpere m (site na ịdaba ntakịrị kwupụta ibe ya). Ọkpụkpụ ọhụrụ ahụ dịkwa ike karịa nke ochie, echere m na nke ahụ bụ ihe na-akpata mgbu mkpịsị ụkwụ ụkwụ. Alaghachigoro n'iji naanị akpụkpọ ụkwụ ochie eme ihe izu ole na ole ugbu a, ụkwụ m na-adịkwa m mma karị.
N'otu oge ahụ, m zuru ike karị ma mee ihe omume niile m nwetara na ịntanetị, n'ihi ya, ọ na-esiri m ike ikwu n'ezie ihe kpatara ọganihu ahụ. Naanị ihe dị ntakịrị utoojoo bụ na m chere na akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ mere ka nsogbu hip m dịkwuo mma, ya mere ọ na-adị m ka m ga-ahọrọ n'etiti ihe ọjọọ 2 site n'ịhọrọ nke ọhụrụ ma ọ bụ ochie ... .. Ochie ọbụ ụkwụ na-eme. adịghị ka ọ na-akwado ezuru, ebe ndị ọhụrụ na-akwụ ụgwọ nke ukwuu na-mere na nnọọ ike ihe onwunwe.
Eleghị anya ị nwara omume ndị a nakwa? Obere nsogbu ị nwere ebe ahụ. Anyị na-akwado ihe ngwọta nke etiti - ya bụ na ị na-adịgasị iche n'etiti ụkwụ abụọ; nke a nwekwara ike ịpụta na ụkwụ gị ga-adị ntakịrị ka ọ na-emegharị / na-ejikwa ụkwụ ọhụrụ. Kedu nke ga-adị mma maka hips / ikpere.
Kedu ihe ị chere gbasara ya?
Ee, emela m ihe omume ndị ahụ niile. Mmetụta mbufụt n'okpuru ụkwụ emeela ka ọ dịkwuo mma, n'ihi na ọ naghị esi ike ma na-egbu mgbu ịme nzọụkwụ mbụ n'ụtụtụ ọzọ. Mana bọọlụ mkpịsị ụkwụ na-afụ ụfụ ngwa ngwa ka obere ije / guzoro ọtọ. M na-eji naanị akpụkpọ ụkwụ ochie, dị nro na izu ndị na-adịbeghị anya, achọpụtara m na ozugbo m tinyere ụkwụ m n'ụkwụ ọhụrụ, ha na-etinyekwu nrụgide na football ebe m na-enwe mgbu. Ya mere, amaghị nnọọ ihe na-eme. Ọ na-atụ egwu na ụkwụ ga-aghọ nsogbu na-adịghị ala ala, n'otu ụzọ ahụ hips dị kemgbe ọtụtụ afọ ....
Sylvi Løwe ekwu, sị:
RA ọ na-aga ọgwụ nje, mana enweela tendonitis na ogwe aka elu kedu ihe omume m nwere ike ime ka ọ dịkwuo mma? Anatala ọgwụgwọ predisolone nke a na-atụ anya inye aka, mana mgbake na-egbu mgbu mgbe ụbọchị 14 gachara na ọgwụgwọ ahụ. Dọkịta hụrụ na ọgwụ gbakwunyere mmega ahụ ga-eme ka ọ dịkwuo mma?
Ị ji n'aka nke ọma na ọ bụ akwara akwara na ọ bụghị mmerụ ahụ akwara ma ọ bụ TERRATION akwara? Ị nwetara ya na ultrasound, ma ọ bụ? Anyị na-eche na ọ bụ ihe ijuanya na, ọ bụrụ n'ezie na ọ bụ tendonitis, na ọgwụgwọ siri ike dị otú ahụ enyebeghị aka. Nke a nwere ike igosi na ọ bụ mmerụ ahụ akwara.
Ebe ị nwere ike gụọ maka ọdịiche dị n'etiti ọnọdụ akwara dị iche iche.
Mmega ahụ akwadoro na-adabere na nke akaị na-emetụta - yana ma ọ bụ akwara na-ere ọkụ ma ọ bụ mebiri emebi. Ya mere, anyị na-akwado ka ị nweta nyocha nke ultrasound diagnostic iji kwado ihe usoro mmebi bụ.
Reka ekwu, sị:
Enwere m ọrịa erythema modosum n'ụkwụ abụọ ahụ maka afọ 2 ugbu a. Ndị ọrụ ahụike ahụbeghị ihe kpatara ọrịa ahụ, mana na-eche na ọ bụ ihe na-akpata autoimmune. Ọ bụ "n'ezie" na-esote onye ọkà mmụta ọrịa rheumatologist, mana ndepụta echere na-adị ogologo ma a gwara m na March na m ga-alaghachi na-esochi ọgwụgwọ metex na June. Enwetabeghị m ọkwa ọhụrụ maka nsonye a.
Ugbu a enwere m ndidi kpamkpam, achọrọ m inwere onwe m mgbu wee malite ịrụ ọrụ ọzọ. Enwere onye nọ na Norway ma ọ bụ ná mba ọzọ bụ ndị ọkachamara na nke a karịa ndị ọzọ? Enwere onwe gị ịgakwuru ndị na-eme ihe nkiri ma ọ bụrụ na ọ dị onye ọ bụla nwere ike inyere m aka! Ọ̀ bụ na e kwesịghị ịgba mbọ chọpụta ihe na-akpata ụkwara nta wee chọta ọgwụgwọ ziri ezi na nke kasị dị irè?
Ọ ga-abụrịrị na ezitere gị akwụkwọ ozi nwere ụbọchị kacha ọhụrụ maka nleba anya n'ezie. Ị nwetala nke a? Ọ dị ka ihe ijuanya na ị na-eche kemgbe March, mgbe ọtụtụ n'ime ngwaọrụ anyị nwere ndị ọrịa batara maka nyocha rheumatologist maka ọnwa 3. Anyị na-akwado ka ịkpọtụrụ ngalaba rheumatology ma chọọ azịza ụfọdụ mgbe ị banyere maka nyocha.
Enwetabeghị email ọ bụla karịa nke m nwetara azịza na ibe a. Kedu ngwaọrụ bụ nke ha? Nwere kọntaktị na ha (ọzọ) n'izu gara aga, mana enwetaghị ụbọchị ọhụrụ. Ha amaghị mgbe ọ bụ oge m ma… Rịọ mgbaghara na e nwere ndị dọkịta ọhụrụ na ọrụ ya mere ka ha gbuo oge. Ọ dị mma na onye na-ahụ maka ọrịa rheumatologist ọ bụghị ọkachamara n'ihe gbasara akpụkpọ ahụ bụ onye kwesịrị ekwesị ịgbaso nke a?
Ọ dị mma, mgbe ahụ, ọ dị mwute ikwu na ị ga-echere ruo mgbe ị nwetara oku, mana a na-ahapụ gị ka ịkpọ ha wee nụ mgbe ị ga-enweta oge / ndụmọdụ.
Anyị na-arịọ gị chi ọma na mgbake dị mma.
Nwere ike ịkpọ ha ọzọ, ma ọ dị mwute ikwu na ọ dịghị atụ anya azịza.
Ị maara ndị dọkịta ọ bụla nwere ike ime nke a na ụkwara nta na-adịte aka na Norway ma ọ bụ ná mba ọzọ? Afọ 2 nke oké mgbu emewo ka m nwee nkụda mmụọ!
Daalụ maka azịza!
Ha ga-aza ajụjụ gị. Rịọ ha ka ha kpọọ gị azụ ma ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike ịgafe - ha kwesịkwara ịma nke ọma maka ndị na-eme ihe nkiri na ngalaba a.
Inger Rogneflåten ekwu, sị:
Nwere ogwe aka na-egbu mgbu. Ebe ahụ dị elu megide ubu n'akụkụ aka nri .. M na-emezigharị ụlọ, na-ese ma gbanwee ọtụtụ aka. Echere m na ejiri m ogwe aka m rụọ ọrụ karịa. Enwere mmega ahụ nwere ike inye aka megide nke a ka ọ bụ naanị izu ike?
Anyị ga-enwe ike inyere gị aka na nke a, mana anyị chọrọ ntakịrị ihe ọmụma gbasara ebe mgbu na ọrịa ndị gara aga na mpaghara ahụ.
Ọ bụrụ na ị dị obiọma wee dee ntakịrị ntakịrị na mpaghara nkọwa site na njikọ dị n'okpuru ebe a, anyị gaara enwe ekele maka ya (n'ezie ọ bụ ebumnuche na ndị mmadụ kwesịrị ime ya, mana ọtụtụ ndị na-ajụ ajụjụ ha ebe a n'amaghị ama):
Pịa ebe a: - Mgbu na ogwe aka
Wee pịgharịa gaa n'ala ma dejupụta mpaghara nkọwa. Na-atụ anya inyere gị aka.
Ihe nkiri Agata ekwu, sị:
Ndewo! Enwere m mgbu n'olu n'ihi 3 diski degeneration na nrụgide na mgbọrọgwụ akwara na mgbu na azụ azụ 2 diski degeneration. Ọ nwere ihe ọ bụla nwere ike inye aka? Ọ nwere ike ịbụ n'ihi ọrịa?
Site na obere ozi, anyị enweghị ohere iji nyere gị aka. Biko dee n'ụzọ zuru ezu banyere nsogbu gị (ozi niile bara uru, otú ahụ ka ọ ka mma) - wee dee ya na mpaghara nkọwa n'okpuru isiokwu kwesịrị ekwesị:
Olu olu (pịa ebe a wee jiri ubi nkọwa na ibe ahụ)
Sayo ekwu, sị:
Ndewo! Enwere m mgbu n'ụkwụ aka ekpe m mgbe m dara. Eji m ụkwụ aka nri m zagharịa wee daa n’ụkwụ m. (Echere m) Enweghị m ike ibili n'ihi na ọ na-ewute ya nke ukwuu na ụkwụ. Mgbe m gbalịrị iguzo na mkpịsị ụkwụ m, ọ na-ewute ya, ọ na-adịkwa ya ka "jelii". M na-eche ihe nwere ike mere na otú a ga-esi meziwanye ya. Daalụ.
N'iburu n'uche na enwere ọdịda (trauma) na mgbu na-esote, ihe gbasara omume na-abawanye na ọ bụ mmerụ ahụ dị nro ma ọ bụ mmerụ ahụ. Ogologo oge ole ka mgbu ahụ dịgidere? Olee mgbe nke a mere? Ị nwere ike iguzo na mkpịsị ụkwụ gị ugbu a? Ọ nwere ike (n'agbanyeghị na o yikarịghị) na-etinyekwa anya n'akụkụ anyaka akwara n'ụkwụ.
A na-atụ aro ụkpụrụ osikapa n'oge nnukwu ọrịa ndị dị otú ahụ:
R - zuru ike
C - mkpakọ
Ị hụtụla ma ọ zara ma ọ bụ chifịa n'ebe ahụ?
O mere n'ụtụtụ a n'elekere asatọ nke abalị taa. M ka nọ na-egbu mgbu, ma na-agbasi mbọ ike iguzo na mkpịsị ụkwụ m. Enwebeghị ọzịza na ọnya na mpaghara ahụ.
Ọ dị mma, anyị na-akwado ka ị leba anya n'ụtụtụ wee jiri ụkpụrụ RICE mee ihe. Ọ bụrụ na enweghị nkwalite, anyị na-akwado ka ịkpọtụrụ onye dọkịta ka ọ chọpụta nsogbu ahụ. Dịkwa mma.
Julie ekwu, sị:
Ndewo, enwere m otu izu na-agbasi mgba ike na mkpịsị aka etiti m, emebeghị ihe ọ bụla pụrụ iche iji kpasuo onye nke ọzọ iwe. Taa ọ tụgharịrị bụrụ ihe na-egbu mgbu naanị imetụ mkpịsị aka m aka. Ọ dị ka enwere akwara nọ ọdụ ebe ahụ na-akpasu iwe. Enwere m ekele maka nzaghachi maka ihe ị chere na m nwere ike iji ya mee ya ma ọ bụ ihe ọ nwere ike ịbụ.
E nwere ọtụtụ ihe nwere ike ịkpata mgbu na mkpịsị aka etiti, mana otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị (karịsịa na-atụle na ị meela ọtụtụ knitting) bụ oke ibu nke akwara extensor mkpịsị aka na akwara extensor nkwojiaka, mgbe ahụ karịchaa akwara ndị ahụ nwekwara. tinye n'èzí n'ikpere aka. Ị na-eche na ị na-esi ike nke ukwuu na nrụgide na-agba gị n'ihu, ikekwe karịsịa n'èzí nke ikpere ụkwụ? Ihe ndị ọzọ nwere ike ịkpata bụ mgbakasị akwara n'olu n'akụkụ mgbọrọgwụ akwara a na-akpọ C7 ma ọ bụ mgbakasị ahụ n'akụkụ ọwara carpal.
Banaz ekwu, sị:
Ndewo, enwere m mgbu n'ubu na ogwe aka m. Enwere m prolapse n'olu na n'azụ.
Anyị ga-arịọrịrị gị nke ọma ka o dee ọtụtụ ihe gbasara nsogbu gị - ma ọ bụghị ya, ọ ga-esiri anyị ike inyere gị aka.
Ị nwere ike ịgụkwu gbasara mwepu n'olu ya.
Lena Irene Gjerstad ekwu, sị:
Na Septemba 2016, m dara site na elu nke 2 mita. Enwere mgbaji ọkpụkpụ na ọkpụkpụ olu. Nke a dị mma ugbu a. Ma ugbu a nwere ubu oyi / oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, nke a na-egbu mgbu. Gịnị nwere ike inye aka megide nke a?
Ubu oyi kpọnwụrụ / nrapado capsulitis / 'ubu oyi' na-emekarị ka ọ nwesịrị mmerụ ahụ. Ọnọdụ ahụ nwere ike ịdịgide ruo afọ 1-2 ma ọ bụrụ na ịnataghị ọgwụgwọ / ọzụzụ emezigharị. Anyị na-akwado ka ị lelee mmemme ndị a ya. Usoro ọgwụgwọ nrụgide egosipụtawokwa ịdị irè ụlọ ọgwụ na ihe dịka ọgwụgwọ 4-5 (Vahdatpour et al, 2014 - nke e bipụtara na International Journal of Preventive Medicine).
Ya mere, anyị na-akwado ka ị kpọtụrụ onye na-ahụ maka ahụike ọha (physiotherapist, chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka) nwere ngwaọrụ ọgwụgwọ nrụgide. N'ebe a, ị ga-enweta mmejuputa ya nke ọma na nchoputa, ọzụzụ na ọgwụgwọ nke a ga-emegharị na ebe ị nọ na ọkwa nke nsogbu ubu gị jụrụ oyi.
June Beckstrøm ekwu, sị:
Ebee ka m ga-enweta uwe mkpakọ "Restiffic" nke a nwalere na nsonaazụ dị mma na RLS?
Anyị na ha na-akpakọrịta na USA - a gwakwara anyị na a na-ere ha ugbu a na America. Ha na-eme atụmatụ ịgbasa na Europe na Scandinavia n'etiti 2017.
Morten okkenhaug ekwu, sị:
Ndewo, nwere ihe karịrị otu afọ nwere mgbu na mọzụlụ dị n'azụ apata ụkwụ abụọ, ọtụtụ ihe mgbu mgbe m nọdụrụ ala na ụgbọala. Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị ka akwara dị n'azụ dị n'elu ikpere na-agbatị ma na-afụ ụfụ nke ukwuu. Enweela ọtụtụ ihe na chiropractor onye chere na ọ na-esi ike / na-amanye site na irighiri akwara na-aga ụkwụ, ma ọ nwetabeghị mma mgbe ọtụtụ ọgwụgwọ gasịrị.
Na-agwụ ike ịnụ na ị na-enwe ihe mgbu maka otu afọ.
1) Esela foto nke azụ azụ gị ka ịhụ ma enwere ọnọdụ akwara dị warara n'ezie? Ọmụmaatụ. Nyocha MRI?
2) Ọ dị mma na ị gara chiropractor maka nyocha na ọgwụgwọ, mana anyị na-eche na enyerela gị mgbatị / mgbatị ahụ iji mee na mgbakwunye na ọgwụgwọ ahụ? Kedu ka ị ga-esi dị mma n'ihe gbasara ọgwụgwọ n'ụlọ?
3) Ọ dị njọ na otu ibe ka ị chere? Ọ ga-aka mma ka ọ dị njọ ma ọ bụrụ na ị na-ehulata n'ihu?
Rikke ekwu, sị:
Apụrụ m ụnyaahụ ka m gaa ịzụ ahịa na ịhazi ihe ụfọdụ, mụ na ụfọdụ ndị enyi m nọdụrụ ala na cafe mgbe m biliri wee jee ije ntakịrị n'ụzọ ụlọ wee malite ije ugwu, yabụ na ọ merụrụ ahụ na mberede / enweghị ahụ iru ala na ụlọ. ukwu / hips n'akụkụ abụọ mgbe m jere ije. ọ dị mma ịga ije nke ọma gbadaa na ala, mana ọ na-adị m mma mgbe m rigoro elu, ọ na-ewutekwa m mgbe m weliri ụkwụ m elu wee tụgharịa n'úkwù m. Ọ nwere ike na-afụ ụfụ ntakịrị / ahụ erughị m ala mgbe m nọdụrụ ala ruo oge ụfọdụ n'otu ọnọdụ. ihe dị ize ndụ 🙁 kedu ihe nke a nwere ike ịbụ maka ihe? a bụ m naanị onye nzuzu ka ọ bụ ihe ọzọ kpatara ya?
Otu onye ọrụ anabatala ajụjụ gị n'igbe ozi ibe Facebook anyị.
Anne Vinnes ekwu, sị:
Ndewo, ibe ndị a na-enye nkọwa nke ukwuu. Mana enweghị ozi gbasara ọhụụ Ehler Danlo na hypermobility?
Daalụ nke ukwuu, Anne. Anyị na-arụ ọrụ mgbe niile iji melite ma ị dị nnọọ mma - ebe a anyị nwere ọrụ anyị ga-arụ!
Daalụ nke ukwuu maka ntinye gị. Nwee ọmarịcha ụbọchị!
Nwere obi iru ala iso anyi na Facebook, dị ka anyị ga-achọkwu kọntaktị / na-ewuli elu nzaghachi. 🙂
Enweela m ọgwụ ogwu cortisone n'okpuru ọkpụkpụ azụ m, kpọmkwem n'elu ọkpụkpụ ọdụ m. Nkwado Ultrasound. The orthopedist / physiotherapist ga-ewere otu ọzọ, ọ dịghị ọzọ. Ihe mgbu akwara, ọ nweghị ihe gbasara akụkọ gị….
Kristina Wang ekwu, sị:
Ndewo, daalụ nke ukwuu maka ọtụtụ ozi na ndụmọdụ ọzụzụ na ibe ha na FB.
Enwere m ihe dị ka otu afọ mgbu na ikpere ekpe na akụkụ ọdịda anyanwụ nke hip. Ọ na-adị ka ezigbo eze mgbu na mgbu na hip bụ mgbe niile, mgbe na ikpere ọ na-abịa na-aga. Na hip, ihe mgbu na-abụkarị mgbe ị dinara n'ihe ndina, n'agbanyeghị akụkụ nke m na-edina, ebe ikpere na-anọdụ ala. Ọ na-adị ka ezigbo "ihe mgbu eze" na mgbu na-agbada n'ụkwụ ala. Eriela Voltaren tbl ọnwa isii, mana echeghị m na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Arịọla m dọkịta maka MRI, mana enwetaghị m nke a. Ị nwere ezigbo ndụmọdụ / ndụmọdụ?
N'iburu na ọrịa ndị ahụ na-adịte aka ma na-adịte aka, nyocha dị otú ahụ nwere ike ịba uru. Anyị na-akwado ka ị kpọtụrụ onye chiropractor nke nwere ike ma mee nyocha, mana onye nwekwara ikike ịtu aka na eg. MR.
Ndewo! Anọ m na-eje ije n'ụkwụ efu na taịlị ihe karịrị otu izu, ma ugbu a ka izu anọ gachara, enwere m nnukwu mgbu n'ụkwụ m n'ụkwụ aka ekpe m. Adị m obere mgbakasị ahụ, enweela m mgbaji agbaji n'obere ọkpụkpụ n'ụkwụ m ọtụtụ oge. Ihe mgbu ahụ siri ike nke na m nwere ike ịga ije n'ụkwụ m ma ọ bụrụ na m na-eyi sọks na slippers, na-enweghị m ike itinye nrụgide na ụkwụ m .. gịnị ka ị chere na nke a bụ? Muscular ma ọ bụ site na ọkpụkpụ? Daalụ
Mtp akara ngosi ị na-akọwa nke a nwere ike ịbụ gbasara nrụgide na-apịaji ụkwụ. Anyị na-akwado ka ịkpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ chiropractor wee nweta ntugharị maka X-ray.
Daalụ maka azịza gị. Mgbe ahụ, m ga-eme ya.
Eirik Kaspersen ekwu, sị:
Nnọọ. Na-eche ma ị nwere ndụmọdụ ọ bụla na ihe ị ga-eme ka ndụ kwa ụbọchị dị ntakịrị mfe? Enwetara m ihe mgbaàmà mbụ nke sciatica na June 2014, mgbe ahụ enwere m prolapse, nke a na-arụ ọrụ na June 2016, mgbe ahụ, prolapse ọhụrụ, nke a na-arụ ọrụ na October 2016.
Ọ na-enwekarị mgbu na ụkwụ aka ekpe dum. Ebe ọ na-agaghị nke ọma, ewetere m Mr. Ọ dịkwa ka ihe mgbu nke bụ ndụ m n'ehihie, ọ dịghị enye m udo. Agbalịrịla ọtụtụ ọgwụ mgbu dị iche iche, mana ọ nweghị ihe nyeere aka. Ịgbalị ịga ije na okporo osisi (enweghị ike ịga ije na-enweghị) ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla n'ime ọhịa. Ma zụọkwa ntakịrị na èbè na ma ọ bụghị ihe omume ụfọdụ nke physiotherapist nyere m. M nwekwara nnukwu nsogbu na enweghị ike ịgbatị azụ m. Ọ na-esi ike kpamkpam na mọzụlụ gluteal. Ọ mara mma nke ukwuu mgbe ịwa ahụ ikpeazụ, mana ọ na-akawanye njọ ma na-akawanye njọ. Ọzọkwa nwere ọtụtụ ihe mgbu n'okpuru ụkwụ, dọkịta chere na ọ bụ a plantar fasciitis, ma ọ bụrụ na ọ dịghị njikọ na sciatic akwara? Nke a dị ọtụtụ, mana ọ bụ ugbu a ka ọ dị .. Ọ dị mma ịgụ ibe ha. Ozi bara uru.
Nke mbụ, anyị ga-akwado omenala, mmega ahụ dị nro (ha na-emegharị maka ndị na-ahụ maka rheumatologists, n'ihi ya, ha dabara maka onye ọ bụla) maka gị. Ma ọ bụghị ya, n'ihi mgbu na nsogbu gị na-adịghị ala ala, anyị ga-adụ gị ọdụ na ntụgharị uche, yoga na uche. Ọtụtụ ndị nwere ihe mgbu na-adịghị ala ala nwere ike nweta enyemaka dị mma site na usoro ọgwụgwọ onwe onye ndị a.
Anyị na-akwado ka ị nweta ume ọhụrụ site n'aka onye na-ahụ maka physiotherapist ọhụrụ, chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka - ha nwere ike ịhụ gị n'ọnọdụ ahụike na ikekwe na-enye ndụmọdụ na ndụmọdụ dị mma ahaziri maka gị.
Asị gị chi ọma na mgbake dị mma, Eirik.
Ellinor Jamne Keskitalo ekwu, sị:
Ndewo .. Enwere m ma polyarthrosis na gulliain barre. Enweela m mgbu na-adịghị ala ala kemgbe m nwetara gulliain barre mgbe m dị afọ 20. Anụ ahụ na-efu efu na mkpịsị ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ niile. Enweghị ike iguzo n'ikiri ụkwụ. Ntụle adịghị mma. Mkpịsị ụkwụ na-abanye na akpụkpọ ụkwụ. Ọ bụghị dọkịta ọkpụkpụ na-edozi nsogbu. Ọ naghị adị mma. Yabụ ugbu a steeti ewepụla enyemaka ndị nwere obere ego nwere, ya bụ physiotherapy nke m nwetara n'efu na nke dị m mkpa. Ị nwere aro ndị ọzọ gbasara ihe m nwere ike ime na ihe m kwesịrị ime? Daalụ Ellinor
Janne Pia Thirstrup ekwu, sị:
Ndewo, ka m nyochachara CT enwetara m nkwenye na enwere m ma tendonitis na ogbu na nkwonkwo - ọ dị mma? M na-aga na Prednisolone ma nwee nke a maka afọ 3 ugbu a, mana ahụ adịghị m mma. A na-enye m ọgwụ nke ọma?
Heidi Molin ekwu, sị:
Nnọọ. Etetara m n'ụra taa na-egbu mgbu n'ubu aka nri m. Enwetụbeghị ya mbụ. Ekwesịrị m ịkpọtụrụ chiropractor taa ma ọ bụ ọ nwere ike ịpụ n'onwe ya? Kedu ihe nwere ike ịkpata? Ahụghị m ihe mgbu mgbe m lara ụra n'abalị ụnyaahụ .. Banyere Heidi Elvira
Ọ gaghị ekwe omume anyị ịkọ ihe mgbu gị na agụba n'ihi dabere na ntakịrị ozi. Mgbu n'ubu n'ubu nwere ike ịbụ n'ihi arụrụ arụ na akwara ma ọ bụ nkwonkwo, ma mgbe ụfọdụ akụkụ ahụ na ihe ndị yiri ya nwekwara ike na-ezo aka na mgbu na ubu na ubu.
Ọ bụrụ na ị maghị, m ga-akpọ chiropractor ma ọ bụ dọkịta - kọwaa mgbaàmà na mgbu - wee hapụ ha ka ha kpebie ma ị ga-ahụ ha, ma ọ bụ na nke a bụ ihe dị ka ọ ga-apụ n'ime ụbọchị ole na ole.
Enwere onwe gị ịgwa anyị kpọmkwem (karia, nke ka mma) gbasara mgbaàmà / mgbu gị. Mgbe ahụ eleghị anya, anyị nwere ike rụtụ aka karịa n'ịchọpụta nyocha.
Ezigbo izu ụka na mgbake dị mma.
Britt Sagmoen ekwu, sị:
Nnọọ. Achọpụtala m na m nwere polyneuropathy dabere na mgbaàmà ndị dị ka mmetụta nke ohiri isi n'okpuru ụkwụ m, ajị anụ na-ekpuchi ụkwụ m. Enweghị m ike iguzo na mkpịsị ụkwụ m ma ọ bụ gwọọ. Ọnwụ ruo n'etiti ụkwụ. Oge na-adịghị mma. Ọ bụghị ihe mgbu, mana ahụ erughị ala. Na-emega ahụ na ọdọ mmiri na-ekpo ọkụ ma na-eje ije nke ukwuu. Na-eche ma ị nwere ahụmahụ na ikekwe ndụmọdụ ụfọdụ. Daalụ. Britt.
1) Emeela nyocha onyonyo nke azụ gị? Mgbaàmà nke ị na-akọwa nwere ike na-esikarị na ya pụta spinal stenosis ma ọ bụ nnukwu diski herniation. Nke a ọ bụ ihe a nyochara?
2) Ị na-aga nyocha nke akwara ozi na neurography?
Hey, Alexander. Daalụ maka azịza gị. Enwere m MRI nke azụ m n'enweghị nchọpụta ọ bụla. Agaghị m onye na-ahụ maka akwara ozi. Onye dọkịta nwalere ya, ma ọ nweghị obi abụọ ọ bụla gbasara nchoputa ahụ. Ahụbeghịkwa ọrịa na-akpata ya. Mụ onwe m nọ na-eche na ọ nwere ike inwe ihe jikọrọ ya na metabolism dị ala na iji levaxin, mana nke ahụ bụ naanị echiche m nwere. Site n'ụzọ, malitere na ntuziaka therapist. Ma ọ bụghị ya, achọpụtara m na ihe niile dabere na onwe m. Mmega ahụ, ọtụtụ ịga ije ma ọ dịghị ihe ọzọ: Mee ka mmụọ gị dị elu. Site n'ụzọ, adị m afọ 71, mana ọ ga-ahọrọ ka m na-arụsi ọrụ ike ruo ọtụtụ afọ. Ọ dịghị mfe ịchọta onye maara ihe banyere nke a, n'ihi ya, ahụrụ m ya dị ka ohere iji chọpụta ntakịrị ihe n'aka gị. Daalụ. Britt
Liv marit håland ekwu, sị:
Ndewo! Enwere m nne nne nwere ALS. Mụ onwe m ejirila ntakịrị nsogbu ahụ dị ka o nwere malite. Ogwe aka nri m na-ada mbà nke ukwuu na mgbe ụfọdụ enweghị ike ijide ihe. Amaara m na ọ bụ ihe nketa na ọkwa nke atọ na ndị abụọ bu ụzọ m anwalela na ndị ahụ siri ike. M na ihe ndị ọzọ na-alụkwa… enwere m ike ịnweta ya?
Ndewo Liv Marit,
N'ụzọ dị mwute, anyị enweghị ike ịza ajụjụ a ebe a. Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị, anyị na-akwado ka gị na GP gị kparịta nke a - onye nwere ike zigara gị ọkachamara na nyocha ọzọ.
Hege Amundsen ekwu, sị:
Nnọọ. Enwere m isi ọwụwa pụrụ iche ruo afọ 17. Ọ malitere mgbe m tụrụ ime usoro m mgbe m dị afọ 40. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla m na-aga ski ma ọ bụ pụọ na okike, ana m enweta "ọdịdọ", ọgbụgbọ na ọgbụgbọ. Ọ dị m ka anaghị m enweta oxygen zuru oke na ụbụrụ m. Nke a na-agabiga ịdị mma nke ndụ na-egbochi m. Emeela nyocha ụfọdụ, mana ọ dịla anya. Kelee onye chọrọ ibili na pụta ọzọ
N'ebe a, anyị ga-ajụ ajụjụ ụfọdụ ma chọọ ka ị gụọ ha nọmba dị ka egosiri n'okpuru - zaa EE / Mba:
1) Ị na-enweta mkpụmkpụ ume / nke a na-ahapụ gị ka iku ume?
2) Ị daa mbà ma ọ bụ chee na ị na-ada mbà?
3) Ị na-enwe nchekasị?
4) Ị nwere nkụchi obi ngwa ngwa?
5) Ị nwere mgbanwe n'afọ nke obi?
6) adịghị ike n'ozuzu?
7) Agbọ agbọ? (Ee)
8) Ike agwụla gị?
9) Isi ọwụwa? Ọ bụrụ otú ahụ, ugboro ole?
10) Obi mgbawa obi?
Anyị na-atụ anya inyere gị aka n'ihu.
Anyị na-akọwa na n'ihe banyere dizziness na-adịte aka, ọ dị mkpa na GP na-enyocha ọrụ obi - ị mere nke a n'oge na-adịbeghị anya?
Ndewo, ka m jesịrị ije na taịlị ihe karịrị otu izu, enweela m nnukwu mgbu n'ụkwụ m.
Enweela m X-ray na MRI - ọ bụghị mgbaji ike ọgwụgwụ ma ọ bụ neuroma Morton. Achọpụtala ụfọdụ edema n'ihu ụkwụ, ma mgbe ihe dị ka ụbọchị 14 nke ọgwụgwọ Naproxen gasịrị, mgbu ahụ agbanweghị. Enwere m ihe mgbu kemgbe afọ ọhụrụ, ozugbo ọnwa 3. Ọ na-ewute m nke ukwuu na enweghị m ike ịga ije n'ụkwụ m ma jiri akụkụ nke ụkwụ na ikiri ụkwụ m mgbe m na-eje ije. Kedu ihe nke a nwere ike ịbụ? Enwere m fasciitis osisi na mbụ, mana nke a adịghị ka ụdị mgbu ahụ.
Biko ị nwere ike ịgwa anyị ebe i sere foto ndị a? Na mgbe a na-ewere ha ma ọ bụrụ na ihe mgbu mere? Ọkpụkpụ ike ọgwụgwụ nwere ike iwe oge tupu ya apụta na X-ray - ọ na-abụkarị CT ị na-eji mara nke ọma na ọ bụghị.
Onye chiropractor nke oge a enyochala gị (nke na-enweghị igwe X-ray na ụlọ ọgwụ!) Ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka? Otu ọrụ ndị a nwere ike ime ule (gụnyere nyocha ịma jijiji) iji lelee ma ọ ga-abụ na enwere mgbaji mgbawa n'ụkwụ gị.
M sere foto na Aleris ihe dị ka izu 3-4 gara aga. Ọ bụ ihe dị ka ọnwa 1,5 mgbe mgbu ahụ mere na m were X-ray na ọnwa 2 mgbe mgbu ahụ bịara na m weere MRI. Anọghị m na ọgwụgwọ maka ụkwụ, mana ugbu a (n'ikpeazụ) ezigara m onye orthopedist maka nsonye.
Kedu ihe kpatara na ịgaghị na ọgwụgwọ mgbanwe ma ọ bụrụ na enweghị nchọpụta pathological, degenerative ma ọ bụ traumatic na foto a? Mgbu ahụ nwekwara ike ịbụ n'ihi njigide, akwara na-adịghị arụ ọrụ na nkwonkwo ụkwụ (na ụkwụ ala) - n'eziokwu, nke a bụ ihe na-akpatakarị mgbu dị otú ahụ. Karịsịa n'ịtụle na ị nwere ma X-ray na MRI, nke a nwere ike ịbụ. O nwere ike ma ọ bụghị ya dị mkpa ike hip, nkwonkwo ụkwụ na nwa ehi, dị ka ndị a na-ejikọta na ụkwụ ọrụ - karịsịa ujo absorption na ọzọ ziri ezi ibu.
Elisabeth Berner Tørnblad ekwu, sị:
Nnọọ. Abụ m nwa agbọghọ nke afọ 39, enwetawo nchọpụta dị iche iche n'ime afọ ole na ole mgbe m kụrụ na 2000; metabolism dị ala, fibromyalgia, whiplash, ọrịa mgbu akwara na-adịghị ala ala, nchekasị / ịda mbà n'obi. Echere m na anwalela m ọtụtụ ọgwụgwọ na afọ 17 gara aga; acupuncture / reflexology. Ọzụzụ. Chiropractor, physiotherapist, onye na-agwọ ọrịa ntuziaka ọtụtụ oge, ụlọ ọgwụ ahụike 4 ugboro, ụlọ ọgwụ dị n'ụsọ oké osimiri na Stavern, Vikersund spa, ọtụtụ ọgwụ.
Mmega ahụ na-eme m ọrịa - na-eji oge ntụrụndụ na-ejegharị mgbe ụfọdụ. Mgbe ahụ enwere m mgbagwoju anya, ike gwụrụ m na ike gwụrụ m - enwere ike ihi ụra oge niile - mana enwere nwa nwanyị na ọ na-ewe ya. Mgbu 24/7. Isi ọwụwa gburugburu elekere. MRI, X-ray ect egosighi mmerụ ahụ ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Enweghị ume ma ọlị. Ọ dịghị ihe na-enyere aka. Acupuncture na reflexology na-ebelata mgbu ma emela ihe ọ bụla maka ihe kpatara ya. N'ihi ihe a nile, m ghọrọ oke ibu, underwent a slimming ọrụ na 2015, furu efu 30 n'arọ - ma na-eche na-adịghị arụ ọrụ na ọgwụ na-egbochi m na Max N'ihi. Na-eche na m na-ahapụ ntakịrị na ndị dọkịta na-ahapụ, ma na-achọ ka mma na ndị ọzọ na-arụ ọrụ ná ndụ kwa ụbọchị na-enweghị ihe mgbu / obere ume. Ị nwere ndụmọdụ ọ bụla maka m?
Ndewo ☺ N'ihe karịrị otu ọnwa, enweela m mkpịsị ụkwụ dị egwu / ọnya n'ụkwụ aka nri m. Nke na-esote Lilletåen. N'elu. Na ntu ma ọ bụ 1st nkwonkwo. Ọ na-enwe ahụ mgbu / nro n'ụzọ. Karịsịa na nhọrọ akpụkpọ ụkwụ "na-ezighi ezi", dịka snịịka. Mana nke kachasị njọ mgbe m yiri / yipụ sọks. Ma ọ bụ ịpịa ya aka? Enwere m Lupus, Fibromyalgia na Hypermobility ịkpọ aha ole na ole. Kedu ihe ọ bụ? Gịnịkwa ka a pụrụ ime?
Nke a nwere ike ịdị ka Nevrom nke Morton.
Neuroma Morton na-emekarị n'etiti metatarsals nke abụọ na nke atọ ma ọ bụ n'etiti metatarsal nke atọ na nke anọ. Mgbu ahụ nwere ike ịdị nkọ mgbe ụfọdụ, dị ka ujo na enwekwara ike ịnwe ahụ mgbu ma ọ bụ mbelata mmetụta na mpaghara ọ metụtara. Aha ọzọ maka nchoputa ahụ bụ ọrịa morton.
Ị nwere ike ịgụkwu gbasara ọgwụgwọ na usoro ndị nwere ike ime na njikọ dị n'elu.
Jannicke ekwu, sị:
Ndewo ? nwa agbọghọ nke 31 afọ.
Enwere m nsogbu na ọrịa ruo afọ 7 ma gwa m na enwere mgbu tendonitis mgbe nkwụsị pelvic kwụsịrị wdg ruo ọtụtụ oge. Mgbe afọ 2 gachara, agara m onye ọkachamara na-enye m naanị cortisone, na nchọpụta hypothyroidism (2010) na endometriosis (2010).
O nyere aka ọnwa ole na ole wee malite ọzọ. Ihe dị ka afọ 2 gara aga m dara n'ihi mmiri na mgbu na ikpere m, a kọrọ na m na-arịa ọrịa ma gwa m ka m zuru ike, ma ọ naghị enyere aka. Ọtụtụ oge na MRI na X-ray na-enweghị azịza sitere na GP.
Mgbe ahụ enwere m nnọkọ na martina Hansen (March 2017) wee zute ma kwere. Were MRI wee nweta nyocha 3 ọzọ! Ọrịa Morton, fibromyalgia, hla-b27 ziri ezi. Enwetara m naanị otu akwụkwọ ozi site n'aka dọkịta m n'enweghị nkọwa ọ bụla, naanị ihe nyocha. Akpọrọla m maka ịwa ahụ maka ọrịa morton n'oge mgbụsị akwụkwọ a na ndị ọzọ m googled onwe m. Ma gụọ m na ibe a! Daalụ.
Kedu ihe m kwesịrị ime ugbu a? M na-ata ahụhụ kwa ụbọchị na mgbu n'aka nri m, ụkwụ, ikpere, úkwù, olu na azụ. Ọ gaghị ekwe omume ịga ọrụ ugbu a na mgbe ahụ, mana m na-eme ya maka ya. A na-akwụkwa m ụgwọ ya na mgbede na n'abalị.
Achọrọ m ime mgbatị ahụ, mana na mgbu ugbu a, m na-aga yoga nke ọma, n'agbanyeghị na enweghị m ike ịme mgbatị ahụ n'ụzọ zuru ezu n'ihi njem. Enwere m ike ịga ije, mana enwere m mgbu n'okpuru ụkwụ m. Ana m agba mgba ugwu na mgbada.
Abụghị m nwa agbọghọ nke na-anọdụ ala ma ọ bụ na-ebi ndụ dị jụụ, mana ọ tụfuru ndụ ndụ n'ihi nke a.
Enyere m onye ọkachamara ọhụụ ọhụrụ na Julaị 3, 2017 ka m were nlele ọhụrụ, mana chere na ọ dị ogologo ichere na mgbu ndị a.
Kedu ihe m kwesịrị ịme? Ọgwụ, mgbatị ahụ?
Daalụ maka ajụjụ gị na nkọwa gị nke ọma.
Ọ bụ ọtụtụ ihe ozugbo na m ghọtara n'ezie na nke a ga-enwe ahụ dị ka incredibly nkụda mmụọ.
1) mgbu myofascial na-adịghị ala ala: Ọ dị ka ị nwere nnukwu mgbu myofascial. Ị chọọla ụdị ọgwụgwọ ọ bụla? N'oge gara aga, o nwere, na ihe ndị ọzọ egosila n'ụlọ ọgwụ na acupuncture nwere ike belata fibromyalgia. Anyị na-akwado ka ị jikọta ọgwụgwọ mgbu mgbu na mmega ahụ nke nta nke nta - ọgwụgwọ a nwere ike ime ka ọ dịrị gị mfe ịnweta ọnwa mbụ nke mgbatị ahụ.
2) Nzaghachi dị mma: Anyị nwere ekele n'ezie na ị na-ahụ na webụsaịtị anyị nwere ihe ọmụma. Cheta na ị nwekwara ike ịrịọ isiokwu anyị na-efu na ibe anyị nke ịchọrọ ịmatakwu gbasara ya.
3) Ọzụzụ na mmega ahụ: Yoga, pilates, iche echiche na ntụgharị uche bụ ihe niile dị mma. Njem n'ime ala siri ike (ọkachamma ọhịa na ubi) bụkwa ezigbo ọzụzụ, ọ na-arụkwa ọrụ ebube maka 'uche ike gwụrụ'. Anyị na-eche n'ezie na ị ga-emega ahụ - ntakịrị ụbọchị ọ bụla - mana cheta na n'ọtụtụ ọrịa dị ka ị nwere, enwere ohere na nke a ga-ewe nwa oge (ọtụtụ ọnwa) kpalitekwuo mgbu tupu ọ dịkwuo mma. Ike agwụla - wulite nwayọọ nwayọọ ma ọzọkwa.
4) Ọkachamara: Kedu ụdị ọkachamara gị na ya nwere oge ọhụhụ?
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị gụọ azịza dịka egosiri n'elu - nke a maka mkparịta ụka doro anya enwere ike. Anyị na-achọ gị mgbake dị mma ma na-atụ anya inyere gị aka n'ihu.
Kari Gro Tronstad Togstad ekwu, sị:
Adị m afọ iri asaa na anọ, enwekwara m ihe mgbu n'ụkwụ aka nri m site na ukwu ukwu. Enweghị ike ịzọ ụkwụ n'ụkwụ n'ụtụtụ mana ọ gafere. Mgbe ahụ ọ bụ naanị n'ọkwa ukwu. Kedu ihe nke a nwere ike ịbụ?
Ndewo Kari Gro,
Enwere ike inwe ọtụtụ ihe. Mana ị na-ekwu na ọ nweghị ihe mgbu yana asymptomatic ụbọchị ndị ọzọ? Nke mere na ọ na-ewute naanị mgbe ị na-azọ ụkwụ gị n'ụtụtụ?
Ihe mgbu ị na-enweta n'ụkwụ na-abụkarị n'ihi mgbakasị ahụ nke akwara sciatic - mana mgbu n'onwe ya nwere ike ịbụ n'ihi ọtụtụ nchọpụta, gụnyere. iliopsoas (mgbanwe hip) myalgia ma ọ bụ nsogbu hip (nwere ike ịkpata mgbu n'akụkụ ukwu).
O nwekwara ike ịbụ n'ihi ọnọdụ akwara siri ike na azụ. Ọ ga-akwado nyocha site n'aka onye dọkịta nwere ikike ọha (chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka), n'ihi na ndị a nwekwara ikike ịkọwa ma ọ bụrụ na enwere enyo nke spinal stenosis ma ọ bụ ihe ndị yiri ya n'azụ.
Eva Vasseng ekwu, sị:
Nnọọ. Kedu ka gout si emetụta ngụgụ? Emeela na Klitreklinikken ma ka ọ laghachiri n'ụlọ. Nwere nchoputa nke asthma na-akọwapụtaghị. Nwee gout n'emeghị ya site na nyocha ọbara achọpụtara ya ma werekwa x-ray a na-emebu. Enweela nsogbu kemgbe afọ 12-13, dị afọ 56. A na-enwe ihe isi ike n'azụ yana mgbu na nkwonkwo niile mgbe ụfọdụ. Paracetamol nkịtị anaghị enyere aka. Ike na-agwụkarị m na ike ọgwụgwụ. Nne m nwekwara gout, ya mere ọ dị n'ime ezinụlọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
1) Kedu ka esi achọpụta ọrịa gout ma ọ bụrụ na enwere nyocha ọbara na-adịghị mma? Ma ọ bụrụ otú ahụ, olee ụdị gout ọ bụ? Enwere ọtụtụ narị ụdị dị iche iche. Anyị kwesịrị ịma nke a ka anyị nwee ike ịma ma ọ nwere ihe jikọrọ ya na ụkwara ume ọkụ gị.
2) Kedu ụdị gout ka nne gị nwere?
Nne m na-arịa ọrịa ogbu na nkwonkwo na osteoarthritis. Dị ka m kwuru, amaghị m kpọmkwem ụdị gout m nwere. Ma nwere isi ike na mgbu na azụ ma ọ bụghị ihe mgbu na ikpere, ikpere, na nkwonkwo ndị ọzọ. N'oge na-adịbeghị anya, mgbọ incipient apụtawo na nkwonkwo mkpịsị aka
Amaghị m otú e si hazie ya mgbe e mere nke a mgbe m dị afọ 12-13. Afọ 1-2 gara aga m were X-ray nke azụ m ebe ọ bụ na enwere m mgbu na isi ike n'ebe ahụ. Mana a gwara m na akwa na akwa ahụ dị ka a tụrụ anya n'afọ m (afọ 56), ọ dịghị ihe ọzọ e mere karịa nke ahụ. Ma m mgbe ahụ na-enwe mgbu na ọtụtụ nkwonkwo dị ka ikpere, elbows, olu na n'oge na-adịbeghị anya okpu pụtara banyere obere mgbọ na mkpịsị aka nkwonkwo na. Mgbe ụfọdụ, m na-afụ ụfụ n’ahụ́ m, ọtụtụ mgbe mgbe ihu igwe na-agbanwe. Ma ọzọkwa. Mgbe ụfọdụ enwere m ike ịrịa oyi, na-enweghị ọrịa. paracetamol mgbe niile anaghị enyere aka na mgbu ahụ, mana ọ nweghị ihe ọzọ ị ga-ewere. Nke a siri ike ka m na-arụ ọrụ dịka nọọsụ, ike na-agwụ m mgbe ụfọdụ na ike gwụrụ m ụbọchị ole na ole.
Nne m na-arịa ọrịa ogbu na nkwonkwo na ọrịa ogbu na nkwonkwo
Ma olee otú gout nwere ike isi metụta ngụgụ?
Sisel ekwu, sị:
Nnọọ. Enwere m nnukwu mgbu n'okpuru ụkwụ m. Karịsịa ụkwụ aka nri. n'okpuru ikiri ụkwụ, gburugburu ikiri ụkwụ. Na mgbe m na-amalite ije ije, m na-enwe mgbu n'okpuru archa n'etiti obere mkpịsị ụkwụ na ikiri ụkwụ. Na ihe na-enye nsogbu na nkwonkwo hallux valgus. Na ihe mgbu na-ere ọkụ na ụkwụ. Ọ nwere fibromyalgia na metabolism dị ala. O nwere ihe jikọrọ ya na ya?
Evy Aune ekwu, sị:
Abụ m nwa agbọghọ dị afọ 27 nke chere na enweela m ọtụtụ ụdị ndụ m ma amalitela ịgwụ m. Amaghị ebe m ga-eme ọzọ, ndị gbara m gburugburu anaghị eche otú ọ dị m, ha anaghịkwa eche na dọkịta ahụ ejighị m egwu egwu. Achọrọ m ka ndụ m laghachi azụ.
Ịgba mgba na dizziness, mmetụta na ọ na-esiri ike iku ume, na-eche na ihe na-arapara na akpịrị (ihe dị ka otú ọ na-adị na akpịrị mgbe ọ na-akwa ákwá), isi ọwụwa, mmetụta adịghị ike (iche dị ka m kwesịrị ịdaba), mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka m. nweta mgbada ọbara mgbali ma nweta ntị n'isi. Na-agbakwa mgba nke ukwuu mgbu na hip / azụ / olu.
Nke a na-eme maka otu afọ n'oge adịghị anya.
Psych kwenyere na nke a bụ nchekasị na ịda mbà n'obi. Ekwetaghị m na nke a, Ee, ụjọ na-atụ m mgbe ahụ na-akpa àgwà dị otú a. Ya mere ana m ekweta karịa na nchegbu bụ ihe sitere na ọnọdụ m.
Ewere mr isi na olu, nke a dọkịta kwuru na ọ dị mma.
A na-enyocha obi ugboro abụọ n'ime awa 2 nke ọ bụla. Ihe niile dị mma. Obi na-amali iti otu oge, mana nke a bụ ihe a na-ahụkarị na ndị na-eto eto.
Nlele ọbara dịkwa mma, amaghị m ihe enyochala. Mana enwere usoro nlele ole na ole.
Agara ụlọ ọgwụ otu ugboro. mgbe ahụ, m na-ama jijiji nke ukwuu ma na-ada mbà, a na-enyocha ya na ụlọ mberede ma nwee ọbara shuga dị ala (echere m na ọ bụ). A na-enyocha nke a ọtụtụ oge n'ime izu ụka m nọ na ya. Mana ọ bụ naanị n'ime ụlọ mberede ka ha nwetara azịza "ọjọọ" maka ule ahụ. Ha chere na a ga-enwerịrị ihe gbasara mmụọ kpatara otu n'ime ule ahụ ghọrọ "jọrọ njọ". E wepụrụ na ozi na e nwere echiche na muscular mere m na-eche otú a.
Enwekwara m mammogram n'oge na-adịbeghị anya, ebe m na-enwekwa nnukwu mgbu n'ebe ahụ ma nwee mmetụta mgbọ ma hụ mgbanwe na ọnụ ara m. A chọtara cyst. A gwara m nke a n'ụlọ ọgwụ, ma dọkịta ahụ ekwughị cyst. Ha na-ekwu na ọ dịghị nsogbu.
Ewere X-ray nke azụ / pelvis dị ugbu a wee gwa m na m na-eyi na hip na n'etiti hip na ala azụ. Adị m arọ karịa, yabụ a gwara m na naanị ihe m nwere ike ime bụ ifelata.
A na-agbalị ịkwụsị ibu maka afọ 5 ugbu a, na-enweghị nsonaazụ ọ bụla. Ugbu a, m na-eji ihe mgbu na-eme m ihe mgbu. Ịgbalị ịga ije / mgbatị ahụ mana ọ na-enwetakwu mgbu na isi ọwụwa. Ya mere ọ siri ike ma na-egbu mgbu.
Enwere ike ịsị na a mụrụ m na dysplasia hip (dina na ohiri isi ruo mgbe m dị ọnwa 9) ma nwee mgbaji mgbaji na L1.
-Ihe m na-eche bụ ma enwere m ike inwe mgbaàmà ndị dị otú ahụ n'ihi uwe na akwa akwa?
-Gịnị ka m ga-eme ka mma?
Mats Andrén ekwu, sị:
Ndewo, enwetara m mmerụ ahụ n'ọrụ ihe dịka ọnwa iri na abụọ gara aga. Na-eyi ọtụtụ ihe mgbu n'etiti ubu ubu, mọzụlụ na ọkpụkpụ azụ. Ọ naghị adị mma. Zụrụ ọtụtụ ike tupu. N'ime afọ gara aga, ọ na-adị ntakịrị ma na-adịwanye mfe iji mee ihe omume. Ọtụtụ mgbatị ahụ m na-ebipụkwa kpamkpam. Atụrụ anya na ị hụla ihe yiri nke a ka ịmata ihe nke a nwere ike ịbụ?
Ndepụta nke nchoputa enwere ike dị ogologo na ozi nwere oke - mana nke kachasị bụ nchikota nke arụ ọrụ na akwara na nkwonkwo. Ngwọta zuru oke nke mọzụlụ na nkwonkwo jikọtara ya na ọzụzụ a kapịrị ọnụ kwesịrị ịbụ ihe ngwọta maka gị.
Nwata nwanyị na afọ 20 ya ekwu, sị:
Bụ nwa agbọghọ dị afọ iri abụọ na ụma nke achọpụtara na ọ na-arịa ike ọgwụgwụ postviral (G.20)
Enweela mgbu azụ / olu kemgbe ndị nọ n'afọ iri na ụma.
A na-enyocha m ụlọ ọgwụ azụ na olu, ebe m na-adịghị ike n'olu / olu akwara, akwara afọ, mgbu dị ukwuu na azụ karịa ka ọ dị. Ọtụtụ ihe na-adịkwaghị adị, ma e wezụga na m dị nro, ma ọ bụghị hypermobile n'ime ahụ. Dị ka m kwuru, enwere m ihe mgbu na ihe na-enye m nsogbu na ndụ kwa ụbọchị bụ ihe mgbu site n'isi, na ala n'akụkụ aka nri dum, ruo n'ụkwụ.
Mgbe m na-aga a psychomotor physiotherapist ọ nwere ike na-ele anya n'ahụ ebe uru ahụ na-esighi ike, na nke uru ahụ bụ / na-adịghị ike ma ghara itinye aka n'ebe ha kwesịrị, nke mere na akwara ndị ọzọ na-arụ ọrụ ọzọ, na nke a na-eduga ná mgbu na ahaghị nhata. nke m ghọtara nke ahụ.
Na mgbe ahụ, ọ bụ n'ezie n'aka ekpe nke kasị ejighị n'aka, ọ bụ ezie na m nwetara na ọ bụ n'akụkụ aka nri na-afụ ụfụ. (mgbe ahụ, m mere mgbatị ahụ na a physiotherapist na èbè na na-agbanwe gburugburu hips na ụkwụ, na mbụ nwere ọtụtụ elastics, ma n'ikpeazụ jisiri ike na-eji naanị èbè iji kwụsie ike mọzụlụ) M ike na-eche na ndị a bụ otu okwu na m. kọwara n'elu.
Mana kedu ka m ga-esi gaa na dọkịta / physiotherapist ugbu a ka m nweta ọgwụgwọ ziri ezi / chọta ihe kpatara na-eme nke a? Kedu ihe m ga-eme onwe m? ọ na-ewutekarị m nke ukwuu site na bọọlụ ịhịa aka n'ahụ nke na m na-ama jijiji. Ahụ́ m anaghị anabata mmega ahụ nke ukwuu, ma ọ bụghị ya, m gaara amụtala ma jee ije n'ebe ndị siri ike dị ka m mere tupu m rịa ọrịa.
Enwere m mmetụta mgbu na-abawanye kwa ụbọchị, ma gbalịa iji bọọlụ ịhịa aka n'ahụ mee ka ọ dị mfe, mana echere m na ọ dị ọtụtụ ugbu a na mụ onwe m enweghị ike idozi ya.
Ị nwere ndụmọdụ ọ bụla?
Matilda ekwu, sị:
Abụ m nwa agbọghọ nke afọ 16 wee nweta mmerụ ahụ ikpere anyị chere na ọ bụ ikpere jumper / jumper. Eji m n'aka ma ọ bụrụ na ọ bụ, ma ebe ọ bụ na m na-enwe mgbu mgbe a na-agbanye m n'okpuru ikpere, ọ dịghị ọtụtụ mmerụ ọzọ. M na-enwekwa mgbu mgbe ụkwụ na-ehulata na nrụgide na-agbanye ya. Mmega ahụ ọ na-eme ka ọ ka njọ? Ọ na-ewute naanị mgbe mgbatị ahụ gasịrị, ma ọ dịghị mgbe ọ bụla n'oge mgbatị ahụ ma e wezụga na mgbanwe. M na-azụ ọtụtụ ike ụkwụ, nke a na-atụ aro maka ikpere jumpers, ma ọ dịghị mmetụta ọ bụla. Ndụmọdụ ọ bụla?
Kristin ekwu, sị:
Enwere m ịwa ahụ na mkpịsị ụkwụ aka nri m n'ihi mkpịsị ụkwụ hama na ụlọ ọgwụ rheumatism dị na Haugesund n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 2014 ma ugbu a n'ime afọ gara aga, ihe na-akawanye njọ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị ka enwere ọtụtụ nde agịga na-arapara na mkpịsị aka na mkpịsị ụkwụ - mmetụta na mkpịsị aka ahụ etoola ibu. Nke a nwere ike ịbụ ihe a ga-eji mee ya, ka m ga-eji ihe mgbu ahụ bie?
M na ikpere jumpers mgba ihe karịrị ọkara otu afọ ugbu a, na-enweghị ọganihu ọ bụla n'agbanyeghị mmega ahụ na-enweghị atụ, ọgwụgwọ ife efegharị na enweghị mmega ahụ siri ike. N'ikpeazụ nweta MRI, ebe a bụ nsonaazụ:
Menisci na-adịghị emebi emebi, akwara cruciate na akwara mpụta. Ntụpọ ntakịrị nke akaị patellar dị nso, mgbama dịtụ elu dị elu. Nchọpụta ahụ dabara na tendinosis na mgbakwunye akwara patellar. Ọdịda dị n'akụkụ edema na-agbanwe na ntinye. Ọ na-enye nkwonkwo femorotibial bụ cartilage articular emebibeghị. Enwere ntụpọ osteochondral na patella na-aga n'ihu, ma eleghị anya ihe a na-akpọ ntụpọ dorsal, anomaly mmepe. N'ebe a, enwere mgbawa na cartilage articular na ntụpọ na efere subchondral, n'akụkụ ụmị ọkpụkpụ edema. Ma nke a ò nwere uru ụlọ ọgwụ ejighị n'aka.
R: Tendinosis nke akwara patellar na-ejikọta na ogwe ala nke patella. Ọkpụkpụ ostechondral gbagoro elu na patella dịka akọwara n'elu.
Echere m na ọ bụ ihe ijuanya na tendinosis adịghị akawanye mma n'agbanyeghị ịgbaso ndụmọdụ niile, ya mere na-eche na ntụpọ osteochondral nwere ike inwe ihe ọ pụtara. Na ọ bụ ya na-emepụta iwe nke pụtara na tendonitis anaghị adị mma. Nke a ọ nwere ezi uche? Dabere na nkọwa ahụ, akwara akwara na ntụpọ osteochondral dị na mpaghara ndị dị n'akụkụ?
Mgbe m na-agba ọsọ dị iche iche, Aghọtaghịkwa m ma ntụpọ osteochondral dị otú ahụ nwere ike ịka mma n'onwe ya. Ị nwere ike dee ihe gbasara nke ahụ?
Enwere m ikpere jumper mana a gwara m na ọ nweghị ihe jikọrọ ya mana ị ga-emeghari ka ị chọpụta ihe ị nwere ike / nwere ike ịnabata ma ọ bụ na ị gaghị ..
Ajụjụ gbasara MS ekwu, sị:
Na MS, mmadụ nwere ike nwee mgbaàmà na-adịru otu nkeji ruo max 5 min? Nwee obere ọdịdọ ebe m na-enweghị ike ịga ije kwụ ọtọ, hụ kefoogu / urukpuru na mkpọnwụ na hip. Ihe ọdịdọ ahụ na-abịaru nso na ihe owuwu ụzọ mbata mana ọ nwekwara ike ịmụrụ anya otu ọnwa.
Ọkụ siri ike n'okpuru ọbụ ụkwụ niile. Ruo n'ókè na ịwụ ice cubes nọ n'ebe. Enweghị ọdịiche dị na ibu ma ọ bụ na ọ bụghị, ma "ike ọgwụgwụ" na mgbakwunye na ibu ibu ogologo. Got enwetara gout ọtụtụ afọ gara aga, mana tiori ikpere nke a dabara kpamkpam. Ọzọkwa nwere oké mgbu na nkwojiaka / aka na na nkwonkwo ụkwụ, ma ọ bụrụ na ọ nwere ike inwe njikọ ọ bụla, ma ọ dị ugbu metụtara kpọmkwem na gout. Kedu ihe ọkụ ahụ nwere ike ịbụ? Enweela ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 11/2.
Biko tinye ajụjụ gị n'okpuru isiokwu dabara adaba - dịka ọmụmaatụ. Ụkwụ na-egbu mgbu. Daalụ n'ọdịnihu.
PS - nweere onwe gị ide ihe nkwado karịa ka ị mere na ajụjụ gị n'elu. Ozi ndị ọzọ ka mma, dịka azịza ya nwere ike ịdabere na nkọwa kacha nta.
Nina Minatsis ekwu, sị:
Nnọọ. Maka ọnwa 5 a na m agba mgba na isi ọwụwa na-adịghị ala ala. N'ihi na 1,5 afọ m mgba na oké tinnitus. O yiri ka ma ọ bụrụ na e nwere muscle esemokwu na biri na n'aka ekpe ma ugbu a, m na-aga na a elu ekpe ubu, ọ biri nke ọma mgbe m ịhịa aka n'ahụ ya nnọọ ike dị nnọọ n'elu New Year. Ọ dị ka m na-anụ tinnitus na enwere esemokwu n'ubu na gburugburu isi. M na-enwe ntamu na mọzụlụ ma ọ bụrụ na m ebuli na arọ, akwara na-ama jijiji n'ubu. M na-atụ egwu na-emeso ubu ebe ọ bụ na mgbe m ịhịa aka n'ahụ ikpeazụ ịkpalite ihe n'azụ ntị, n'elu ntị na ọkpọiso ghọrọ nnọọ ike, nwetara nchegbu na-ehi ụra emezighituri, ma a obere mma ugbu a. Mana m ga-enweta nke a, enweghị ike ịrụ ọrụ ruo mgbe ubu kwụsịrị ịrụ ọrụ dịka ọ dị ugbu a. M na-agbatị ma na-eme mgbatị ahụ ndị ọzọ maka olu maka ọkara otu awa kwa ụbọchị. M na-aga na psychomotor physiotherapist, n'ihi ya, m na-amụta ugbu a ịnagide nrụgide, ma na-atụ uche muscular sochi anya na-atụ egwu na-emefu nnukwu ego na ọgwụgwọ na-adịghị arụ ọrụ. Ego ole ka m nwere ike ime na akwara ubu na-emebiga ihe ókè, esemokwu ahụ ọ ga-ebelata ka oge na-aga ka ọ bụ mmadụ kwesịrị ịgwọ ya? Kedu ụdị mmega ahụ dị mma na nke na-ezighị ezi, agaghị akpalite nke a ka ọ ghara ịrụ ọrụ. Daalụ Nina
Nnọọ. Amaghị m ebe m nwere ike ide ka m jụọ, mana ị nwere ike ịkpọ m ma ọ bụrụ na ebe a abụghị ebe ọjọọ. Gụọ ebe antacids nwere ike imebi akụrụ n'ikpeazụ. A na-etinye m na Esomeprazole 40 mg, mana ahọrọ m 20 mg n'onwe m ka ọ na-arụ ọrụ megidere nzube ya na 40 mg. Nke a ọ bụ nkwadebe ị kwesịrị ịma gbasara mmerụ ahụ n'oge? Agbalịrị m ịkwụsị, ma ọ naghị arụ ọrụ, mgbe ahụ enweghị m ike ọbụna iguzo mmiri.
Sveinung ekwu, sị:
Ndewo, enwere m ọrịa ụbụrụ ụbụrụ. Ihe bụ nsogbu bụ na m na-enweta ntakịrị mgbu. Ana m enweta ọgwụgwọ ọkụ eletrik maka azụ na ikpere, yana ntakịrị maka azụ - n'ihi hips gbagọrọ agbagọ. M na-eche na ọgwụgwọ ugbu a na-aga n'ụzọ nile ruo ụbụrụ mgbe ụfọdụ na m na-eche na m ga-akpachara anya mgbe m na-enweta ugbu a ọgwụgwọ na m azụ.
Achọpụtala m na m nwere scoliosis, ma echela m na a na-ewere nke a nke ọma ma ọ bụ na a na-enyocha m nke ọma.
Dịka ọmụmaatụ, m na-ewere naanị X-ray nke ọhụụ elu na MRI nke azụ azụ.
Mgbe mbụ achọpụtara ya na azụ azụ, ha enyochaghị azụ ndị ọzọ ma ọ bụ naanị mgbe ọtụtụ m na-amanye m n'ihi nnukwu ihe mgbu na azụ azụ ka e zigara m MRI ma chọpụtakwa na ya. ala azụ. Dọkịta ahụ anaghị enyere aka ma kwuo na m nwere ike ịhụ chiropractor.
Mana m na-atụ egwu na enweghị m nkọwa zuru oke na foto nke azụ niile. Ọ na-atụkwa egwu ime ihe ọjọọ. Amaghị m ogo ogo ole ma ọ bụ ihe m dị. Ana m enweta naanị paracetamol maka enyemaka mgbu. Azụ dị elu anaghị afụ ụfụ mgbe niile, naanị mgbe m nwetara mucositis mbufụt n'ihi fibromyalgia m, ebe azụ azụ na-afụ ụfụ mgbe niile n'agbanyeghị ihe m na-eme. Nke a karịrị ihi ụra abalị. Ọ na-agbawakwa ebe ahụ mgbe m tụgharịrị na nke a na-ewute m nke ukwuu.
Enweghị m ihe na-esochi nsogbu azụ.
M na-eche otú m ga-esi na-aga n'ihu na nke a, iji nweta nkọwa nke ọma nke scoliosis.
Na gịnị ka m ga-eme iji nweta ndụ ka mma na nchoputa, ọ bụghịkwa mgbu na-adịghị ala ala.
Kedu ihe m nwere ike ịrịọ dọkịta ka o nyere m aka?
Gbalịa physiotherapy na-enweghị ihe ịga nke ọma. Ka m na-aga ọtụtụ ije. nwara yoga. Ọgwụgwọ okpomọkụ.
Echere m na nke a enweghị olileanya. Amaghịkwa m ndụmọdụ m dara ogbenye. Na-atụ anya inweta enyemaka ma ọ bụ ozi ebe a.
Site n'ụzọ, chiropractic ọ dị m mma na scoliosis? Ọ ga-enyere aka ma ọlị?
Ike gwụrụ nke inwe mgbu mgbe niile, na ụra dara ogbenye n'ihi nke a. Ọ̀ bụ ihe kwesịrị ekwesị ime ihe ọ bụla banyere ya?
Ha na-akpọ ya okenye scoliosis. Mbụ chọpụtara banyere nke a afọ 2 gara aga. Adị m afọ iri atọ na atọ n'afọ a.
Lise ekwu, sị:
Nnọọ. Di m (73) gbara ọsọ, nwere mgbaka ukwu (ma eleghị anya ọ naghị elebara ya anya nke ọma ma emesịa), ugbu a ọ na-eme ọtụtụ ịkwọ ụgbọ wee chere na ọ bụ ezi echiche. Mana ejighi m n'aka… Kedu ndụmọdụ ha?
Ndewo Lise, mgbe ị na-agbapụ igwe ịkwọ ụgbọ mmiri, a na-eju gị na mgbagharị hip- na ndị na-agbatị úkwù, yana ndị na-apụnara mmadụ ihe na ndị na-agba ọsọ. Ọ bụrụhaala na ọ na-eme mmegharị ahụ n'ụzọ dị jụụ na nke a na-achịkwa, o kwesịghị ịdị oke ike megide ukwu ukwu ya. Ụdị ọzụzụ ndị ọzọ akwadoro gụnyere mmemme ọzụzụ akọwapụtara (dị ka egosiri na ọwa youtube anyị ya), ịgba ígwè na igwu mmiri.
Igwe ịkwọ ụgbọ mmiri ekwesịghị ịbụ ihe na-adịghị mma maka onye nwere nsogbu ukwu, mana ị dịkwa mma na ọ ga-adị mfe ịbata nke ukwuu wee si otú a bufee onwe gị.
Bia ekwu, sị:
Nnọọ. M na-enwe mgbu na azụ na n'etiti ụkwụ m n'oge ọzụzụ siri ike na skis na ịgba ọsọ na mkpọda ugwu. Ị maara ihe nke a nwere ike ịbụ na ihe m nwere ike ime ka ọ dịkwuo mma? Nke a na-ewe iwe nke ukwuu, ka m na-aga asọmpi ma ọ dị m ka ụkwụ m na-akụda.